Print Page - Sex for business and Fun (Nepali)
xNepali Forum => General Discussion => Topic started by: xsajha on March 12, 2008, 01:25:17 AM
Title: Sex for business and Fun (Nepali)
Post by: xsajha on March 12, 2008, 01:25:17 AM
** For some strange reason: the content of this post was deleted **
We believe, this thread was stated to discuss and debate on legalizing prostitution and human rights of sex workers.
Should sex be something the government should regulate ?
Responding to the requests from members I have moved this topic in General Discussion.
Limpman को अनुरोध पनि जायज लगेकोले यि प्रश्नहरु पहिलो थ्रेड मा राखेको छु ।
के यौन कर्मी बाध्यता ले हुनु समाज को लागी कलंक हो ?
के उनी हरु को समाझ माँ बाच्ने अधिकार छैन ?
यौन ब्यबसाय लाई कानूनी मान्यता दिएर ब्यबस्थित गर्नु राम्रो हो की हैन ?
Title: Australia and Nepali Girls
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 12:50:19 PM
अष्ट्रेलियामा नेपाली युवती यौनव्यवसायमा लागेको आशंकामा नेपाली राजदूतावासले गम्भीरता देखाएको छ। अन्नपूर्णपोष्टका अनुसार अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत योगेन्द्र ढकालले परराष्ट्र्मन्त्रालयलाई पत्र लेखी त्यसबारे जानकारी गराएका छन्। उल्लेख्य संख्यामा अष्ट्रेलिया छिरेका नेपाली युवतीहरु पैसाको अभावमा यौनव्यवसायमा होमिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । अध्ययनका लागि भनेर गएका युवतीहरु आर्थिकमन्दीसंगै रोजगार गुमाउन थालेपछि वाध्य भएर यौनव्यवसायमा लाग्न पुगेको समाचारहरु बेला- बेलामा आइरहदा पछिल्लो समयमा राजदूतबाटै गम्भीर पत्र आएको हो ।
Title: Re: Australia and Nepali Girls
Post by: S1nner on July 20, 2009, 01:03:08 PM
k ho yesto.. yesko roktham garnu paryo
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:14:06 PM
Quote from: Limpman on July 20, 2009, 08:02:47 PM
Please Mod....Can you add this question's pool on top.......
and guys please add your comments......
Title: Re: Sex for business and Fun (Nepali)
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:18:17 PM
विवशताको व्यापारः देहव्यापार
बुधवार, 17 जून 2009 07:45
केही दिन पहिले हामी सपरिवार टिभी हेर्दै थियौँ। टेलिभिजनमा ठमेलको कुनै डान्स रेष्टुराँको कथा देखाइएको थियो। 'हे भगवान् कस्तो जमाना आयो' हजुरआमा फत्फताउन थाल्नुभयो। ममीले थप्नुभयो 'यसरी भगवानको वरदान बेचेर ज्यान पाल्नुभन्दा त मरेकै भए हुन्थ्यो।' मैले प्रतिवादमा भने 'रहरले यस्तो काम गरेका हुन् र यिनले ' हजुरआमा र ममीले मेरो बीचै मलाई उछिन्नु भयो 'शरीर बेचेर बाँच्नुभन्दा त मर्नु निको।'
सोचेँ मसँगै कलेज पढ्ने उमेरका दौँतरीहरु देह व्यापारमा संलग्न छन्। यीमाथि नानाथरीका आरोप लगाइन्छ। हेर्ने दृष्टिकोण नै पूरै नकारात्मक हुन्छ। समाजबाटै बहिष्कार गरिन्छ। समाजमा अगुवाहरु भन्छन् यस्तो - घृणित र फोहोरी काममा लाग्नेलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ। अच्चम्मको कुरा हाम्रै समाजमा त्यस्ता घृणित र फोहोरी काम गर्नेले आफ्नो व्यवयास कसरी चलाएका होलान् समाजका यिनै ठेकेदार राती लुकेर उनीहरुकोमा पुग्छन् अनि दिनमा देखिएर कुरा काट्छन्। यौनव्यवसायी महिला चाहिँ आफ्नै परिचय पनि लुकाएर हिँड्न बाध्य छन्।
सहरको महंगीमा बाँच्न 'सहरिया' हुनुपर्ने 'बाध्यता' अनि गरिबीको पीडाले दौँतरीसंगै पढ्न नपाउनुको 'चिन्ता'ले गाँजेका अधिकांश 'गाउँले' युवती मसाज सेन्टर तथा रेष्टुराँका 'पेड शरणार्थी' बन्न पुगेका हुन्छन्। त्यसो त कमिसनको लोभमा चेलिबेटी ओसार्ने 'दलाल'को प्रलोभन र सँगिनीको फजुल खर्चीबाट लोभिँदै कतिपय युवती यौन व्यवसायमा 'फस्नु पुग्छन्। अनि न माथि उक्सिनै सकिन्छ न त पेसालाई जीवनभर अगाल्न नै। 'रहरु अनि 'बाध्यता' का सिकार हुन पुगेका युवती अनिश्चित अध्याँरो भविष्य बोकेर 'पैसावालुको यौन सेवामा हाजिर हुन विवश हुन्छन्।
'पीडा लुकाएर कृत्रिम मुस्कान छर्दै ग्राहकलाई यौन सन्तुष्टि प्रदान गर्नु' उनीहरुको 'धर्म' मानिन्छ। यही धर्म पूरा गरे यिनको 'डिमान्ड' बढ्यो हैन भने 'नो डिमान्ड'। उमेरसँगै माग घट्दै जान्छ तर उपेक्षा र घृणा बढ्दै जान्छ।
देशभित्रकै यौनकेन्द्रमा शरणर्थी जीवन बिताइरहेका नारीको भित्री रहस्य र यथार्थ पहिल्याउने कोसिस नै गरिँदैन। यस पेसामा संलग्न गराउनेलाई कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रशासनले नै मौन समर्थनको नीति अख्तियार गरिरहेको आभास हुन्छ। पहिले लुकेर र सिमित ठाउँमा त्यो पनि निश्चित दरभाउ बिना गरिने देह व्यापार अहिले खुलेर र 'रेट' नै तोकेर मुख्य सहरका केन्द्रहरुमा फैलिएको पाइनुले अब यौन व्यवसाय अपराध नभएर व्यापार मात्र भएको हो कि भन्ने सन्देह हुन्छ। लागू नगरिएपनि कानुनमा यौन व्यवयायमा बन्देज लगाइएको छ। यस विडम्बनाऌ यसमा संलग्न महिलाले सधैँ गैरकानुनी काम गरेको मानेर शोषण सहनु परेको छ।
विभिन्न अध्ययनहरुअनुसार यस व्यवसायमा संलग्न महिला प्रायः अशिक्षित पतिले छोडेका टुहुरा र सौतेनी आमाको कारण घरबाट बाहिरिएहरु नै छन्। हातमा सीप र पढाइको प्रमाणपत्र नभएपछि उपलब्ध सहज विकल्प बनेको छ यौन व्यवसाय।
भारतमा यौन व्यवसाय कानुनी छ। तर नेपालमा गैरकानुनी भएकाले लुकिछिपी गरिन्छ। यौन व्यवसाय बन्द गर्ने हल्ला र भाषण गर्ने नेताहरुले यौन व्यवसायीको मर्म र वाध्यता बुझेनन्। यौन व्यवसाय निर्मूल पारेपछि यौन कर्मी महिलाले कसरी बाँच्ने त सडकमा भिख मागेर खाने बालबच्चा भोकले मर्न लागेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने हैन भने उनीहरुले बाँच्ने आधार केलाइ बनाउने
मैले यसो भनेर यौन व्यवसाय फैलियोस् भन्न खोजेकी हैन तर यौन व्यवसाय बन्द गरेपछि त्यसबाट गुजारा चलाइरहेकाहरुलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने यथार्थमा जोड दिएकी हुँ।
सरकारले अशिक्षित एकल र असहाय महिलालाई सीपमूलक तालिम दिने हो भने यौन व्यवसाय बन्द गर्न सरकार लाग्नै पर्दैन आफै कम हुन्छ। सामान्यतः कसैको पनि शरीर बेच्ने रहर हुँदैन। तर बाँच्ने अरु आधार नभएपछि के गर्नु
यौन व्यवसायमा संलग्न महिलाका पीडा महिला अधिकारकर्मीले गम्भीरतापूर्वक बुभुने प्रयास गरेको देखिएको छैन। अरु कुरामा सानो चित नबुझ्दा पनि सडक र सदन तात्छ। सडक टायरको धुँवाले रुमलिन्छ तर हामी महिलाको अवस्थाबारे किन सबै मौन बाँच्ने आधार नभएर देह व्यापारमा लाग्न विवश महिलालाई सीपमूलक तालिम र महिला िहंसा बन्द हुनुपर्ने माग किन अहिले सुन्न पाइदैन विवश महिलाका पक्षमा किन सडक तात्दैन
करिष्मा किष्ट कलेज काठमाण्डौमा बीबीए पढ्दैछिन्।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:19:05 PM
पोखरामा यौन व्यवसाय बढ्दो
कास्की, पर्दा लगाइएको क्याबिन रेस्टुरेन्टमा ग्राहकसँगै काँध मिलाएर रेस्टुरेन्टकी युवती पनि पिइरहेकी थिइन् । रेस्टुराँकी सञ्चालिकासँग ती युवतीलाई लैजान अर्का ग्राहक मोलमोलाई गरिरहेका छन् ।
यो दृश्य पर्यटकीय नगरी पोखराको एउटा रेस्टुरेन्टको हो । यहाँ बग्रेल्ती खुलेका साना क्याबिन रेस्टुराँँहरूमा यौन व्यापार बढेको छ ।
पाँच वर्षअघि म्याग्दीबाट आएकी शिला नाम बताउने युवती ग्राहकलाई यौन सन्तुष्टि दिएर जीवनयापन गरिरहेकी छिन् । यहाँको एक रेस्टुराँमा काम गर्ने उनले ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिए पनि पारिश्रमिकमा रेस्टुराँ साहुनीबाट पीडित हुनुपरेको गुनासो गरिन् । १ हजार ५ सय रुपैयाँमात्रै तलब हुन्छ । ग्राहकबाट पनि हेपिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'बाध्यताले यो पेसा अँगालें । अहिले पेसाबाट निस्कनै गाह्रो भएको छ ।' ग्राहकलाई यौन सन्तुष्टि दिने क्रममा उल्टै पैसा र मोबाइल लुटिएको गुनासो उनले पोखिन् ।
उता स्याङ्जाबाट सात वर्षअघि यहाँ आउँदा जागिर नपाएपछि सुशीलाले यौन व्यवसाय अँगालिन् । एक रेस्टुराँमा काम गर्दै आएकी उनले पनि न्यून पारिश्रमिक र यौन व्यापारको ज्यालासमेत रेस्टुराँ सञ्चालकले नै लिने गरेको बताइन् । 'हामी ग्राहकसँगै रेस्टुराँ सञ्चालकहरूबाट समेत शोषित भएका छौं, उनले भनिन्, 'भनेजति पारिश्रमिक अझै पाइएको छैन ।' ग्राहकसँग दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म ज्याला लिने साहुनीले चार सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ मात्रै दिने गरेको गुनासो यौन व्यवसायी महिलाले गरे । पीडा भोग्दा-भोग्दै पनि यौन व्यवसायमा लाग्ने युवतीहरू कम छैनन् । बागलुङबाट आएकी सुकृति घरकै आर्थिक अवस्थाका कारण
बाध्य भएर यस पेसामा लागेको बताउँछिन् । सरकारले जागिर दिँदैन, बाँच्नका लागि शरीर सुम्पनुपरेको छ, उनले दुःखेसो पोखिन् ।
घरबाट अपहेलित, श्रीमान्ले छोडेको पढाइमा कमजोर र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका युवतीहरू यौन व्यवसाय अँगालिरहेका छन् ।
यौन व्यवसायमा लाग्नेहरू प्रायः बाहिरबाट यहाँ आउने अविवाहित युवतीहरू छन् । 'गरिबी, द्वन्द्व, पारिवारिक अवहेलना र बेरोजगारकै कारण यौन व्यवसायमा लाग्ने महिलाहरू बढेका छन् । सामाजिक विकृतिविरुद्ध अनुगमन समितिका संयोजक मीनप्रसाद भट्टराईले भने, 'बेरोजगारी समस्याकै कारण यौन व्यवसाय फस्टाएको हो, राज्यले नियन्त्रण गर्दैन भने रेडलाइट एरिया तोकिदिनुपर्छ ।'
'प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको कारण अनुगमन गरी यौन व्यवसाय नियन्त्रण गर्न सकिएन,' सामुदायिक जिल्ला समन्वय समितिकी अध्यक्ष गोमा ढकालले भनिन्, 'कसैको सहयोग नभएपछि अनुगमन गर्न छाड्यौू ।' उनले बाध्यता, साथीको संगत र आफूखुसीसमेत यौन व्यवसायमा लागेको भेटिएको
बताइन् । सरकारले योजना बनाएर यसको समाधान खोज्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'समाजलाई यसले बिगारेको
छ ।' समितिले डेढ महिनाअघि बगालेटोलबाट ग्राहक र यौनकर्मी सहित १२ जनालाई अनुचित क्रियाकलाप गर्दागर्दै समातेको थियो ।
यौनकर्मी महिलाहरू प्रहरीबाट समेत पीडित हुनुपरेको गुनासो
गर्छन् । प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने बहानामा हामीलाई लैजान्छ र पैसा माग्छ,' एक यौन व्यवसायी महिलाले भनिन्, 'नदिए थुन्ने चेतावनी दिन्छन् ।'
यहाँको नयाँबसपार्क, सृजनाचोक, महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, वैदाम, बगालेटोल, पार्दी यहाँका बढी यौन व्यवसाय हुने क्षेत्रहरू हुन् । यहाँ रहेका ३ सय ८५ रेस्टुराँमा २ हजार महिला कामदार छन् । तिनमा एक हजारभन्दा बढीले यो पेसा अँगालेको अधिकारमा आधारित एचआईभी र एड्स कार्यक्रमले जनाएको छ ।
तिनमा २२ प्रतिशत महिला एचआईभीको सिकार भएका छन्,' संस्थाका संयोजक दिलिप दोषीले भने, 'यौन व्यवसायमा लाग्ने महिलाको संख्या बढ्दो छ ।' १३ वर्षदेखि माथिका यो व्यवासयमा लागेका छन् । तिनीहरूमा आधाभन्दा बढीले आफैं ग्राहक खोज्ने गरेका छन् ।
'रेस्टुराँमा काम गर्नेमात्रै होइन, मोबाइलको भरमा पैसाका लागि यौन व्यवसाय गर्नेहरू पनि यहाँ उत्तिकै छन्,' उनले भने, 'आर्थिक रूपले सबल भएकाहरू पनि यो व्यवसायमा छन् ।' उनका अनुसार उनीहरूका पहिलो ग्राहक व्यापारी हुन्, त्यसपछि सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, मजदुर र भारतीय पर्यटक पनि ग्राहकमा पर्छन् ।
Posted on: 2009-06-10 23:12:24
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:19:52 PM
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला र बालबालिकाको तस्करीबारे सन् २००६/७ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १२ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका करिब ४० हजार महिला क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर र डान्स रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए । यीमध्ये अधिकांश यौनकर्मी भएका जनाइएको थियो । धेरैजसोलाई हङकङ, दुबई र साउदी अरबमा रोजगारी मिलाइदिनेे आश्वासन दिएर काठमाडौं ल्याइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बर्सेनि पाँचदेखि सात हजार नेपाली युवती भारतीय बजारमा पुर्‍याइने गरेको तथ्यांक पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २००१ मा गरेको अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष १२ हजार किशोरी -१८ वर्षमुनिका) भारतको मुम्बई, दिल्ली र कोलकाता यौन-बजारमा पुग्ने गरेका छन् ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:22:58 PM
अबैध रुपमा यौन व्यवसाय संचालन गर्दै आएकी एक समलिङ्गीलाई नेकपा एमाले निकट युवा संगठन युथफोर्सले पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा
अबैध रुपमा यौन व्यवसाय संचालन गर्दै आएकी एक समलिङ्गीलाई नेकपा एमाले निकट युवा संगठन युथफोर्सले पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौंको धापासीमा युवतीहरु राखेर व्यवसाय चलाउँदै आएकी अन्टी भनिने तिर्थ गुरुङलाई युथफोर्सले नियन्त्रणमा लिएको हो। गुरुङसँगै युथफोर्सले स्याङ्जाकी सीमा थापा, पर्साका रमेश अग्रवाल र लाजिम्पाटका कुमार विष्टलाई समेत पक्राउ गरेको छ। समाजमा यौन विकृति फैलाएको गुनासो आएपछि छामा मारिएको युथफोर्सले जनाएको छ।
पक्राउ परेकाहरुलाई फोर्सले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको प्रहरी टोलीलाई जिम्मा लगाएको हो। पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइने र कारबाही गरिने वृत्तका प्रहरी निरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:24:06 PM
विदेशमा महिलाहरुलाई अवसर पनि चुनौति पनि
अगष्ट, २१ बुटवल/ हाल यू.ए.इ अल ऐन
विदेशमा महिलाहरुलाई जति अवसरहरु छन् त्यति मात्रामा चुनौतीहरु पनि छन् । आज विदेशमा काम गर्ने महिलाहरुले जति मात्रामा अवसरहरु पाएका छन् त्यति मात्रामा दुःख वेदना र कष्टहरु व्यहोरिरहेका छन् । हामीलाई भन्न जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न धेरै गाह्रो र कठिन पनि छ । पहिलो समस्या स्वदेशमा रोजगार नपाउनु नै हो, दोश्रो विदेशमा नेपालीहरुका लागि श्रमको मूल्य नतोकिनुले गर्दा आज विदेश महिलाहरुको लागि मात्र होईन पुरुषहरुको लागि पनि चुनौतिको विषय बनेको छ ।
त्यसो त दलाल र रोजगारदाता कम्पनीहरुले कामदारहरुलाई झूठो, असत्य र असभ्य कुराहरु बताएर विदेशमा ल्याउनु वा पठाउनु, त्यसपछि भने बमोजिमको काम नपाउनु, तोकिएको तलब र सुविधाहरु नपाउनु नै एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ भने अर्को तर्फस्वदेशमा लाखौं रुपैयामा घर बन्दकी राखी ऋण निकालेर दलालहरुलाई दिनु, विदेशमा वर्षौ बस्दा पनि ऋण चुक्ता गर्न नसक्नु आदिले गर्दा आज विदेशमा महिलाहरुलाई मात्र होइन पुरुषहरुलाई पनि अवसरको खोजी चुनौतिको बिषय बनेको छ ।
किन ठगिन्छन् त नेपालीहरु विदेशी भूमिमा -
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि सही नीति नवनाउनु, श्रम मन्त्रालयले श्रमको उचित मूल्य निर्धारण नगर्नु आदि नै ठगिको मुख्य कारण बनेको छ । त्यतिमात्र नभएर अरु देशरुले आफ्ना कामदारहरु विदेशमा पठाउँदा कामदारहरुको श्रममूल्य तोकेको हुन्छ । जबकी तोकिएको पैसा भन्दा कमी तलबमा त्यहाँको सरकारले आफ्ना कामदारहरुलाई पठाउँदैन तर हाम्रो देशमा यस्तो प्रकारको नीति नै छैन । जसले गर्दा आज हामी जस्ता लाखौ लाख नेपालीहरु विदेशी भूमिमा अनाहकमा रात दिन रगत र पसिना बगाईरहेका छौं । यहाँका दलाल र रोजगार दाता कम्पनीहरुले हामीहरुलाई खसी र भेडा बाख्राको रुपमा बेच्ने वा किन्ने गरिरहेका छन् । जसको कारण आज यो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नुहनु, आशान्ति हत्या हिंसा र गृह यूद्धले विदेशीनु, विदेशमा ठगिनु, लुटिनु र श्रम शोषण हुनु नै विदेशमा नेपालीहरुको लागि ठूलो चुनौति बनेको छ ।
अब रहृयो महिलाहरुका समस्या । जस्तो कि महिलाको बारेमा लेख्नु पर्दा अरु देशहरुमा के कस्ता समस्याहरु छन् र के कस्ता अवसरहरु पनि छन् भन्ने बारेमा म एकिनका साथ लेख्न सक्दिन । तर पनि यू.ए.इको बारेमा लेख्नु पर्दा यहाँ कतिपय महिलाहरुले राम्रा राम्रा कम्पनीहरुमा आकर्ष रोजगारी पाईरहेका र गरेका पनि छन् । जसले गर्दा यू.ए.इमा महिलाहरुको लागि राम्रो अवसर त देखियो तर यहाँ कतिपय नराम्रा कार्यहरु पनि नेपाली महिलाहरुले गरिरहेका छन् भन्ने विषयहरु बारम्बार आईरहन्छन् । कतिपय कुराहरु सत्य पनि हुन सक्छन् कतिपय कुराहरु असत्य पनि हुन सक्छन् तर यहाँ अनुसन्धान गर्दा खेरी केही नराम्रा पक्षहरु पनि भेटिएका छन् ती कुराहरुलाई यहाँ केही हदसम्म भए पनि लेख्ने जमर्को गरेको छु । जसबाट अन्य महिला दिदी बहिनीहरुलाई पर्न जाने भावनात्मक असरप्रति म क्षमाप्रार्थी छु ।
यहाँ लेख्नै पर्ने बाध्यताको बिषय बनेको छ कि नेपाली महिलाहरु यू.ए.इमा यौन व्यवसाय पनि गर्दछन् रे । रेशमी र पुजनी -दुवै नाम परिवर्तन) जो दुबै जना यू.ए.इमा यौन व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् । त्यो उनीहरुको बाध्यताको बिषय हो वा रहर र पैसा कमाउने उद्देश्यको खेल हो, त्यो त उनीहरुले नै जान्नु पर्ने बिषय हो तापनि उनीहरु यौन व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् । त्यसो त उनीहरुले भारतको बाटोबाट कतिपय कलिला दिदी बहिनीहरुलाई घरमा, होटलमा, काम गर्ने हो, राम्रो पैसा, सजिलो काम हुन्छ भनि ल्याएर आफूजस्तै यौन व्यवसायमा संलग्न गराएका पनि छन् । यहाँ मैले यो किन लेख्न बाध्य भएको हुँ भने भोलिका दिनहरुमा यू.ए.इ आउने नेपाली दिदी बहिनीहरुले ठगिनु नपरोस्, गलत र कूकार्यको खेलमा आफ्नो जवानी र इज्जत लुटाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिएर हो रहरले होईन ।
यो विषय उठाउँदा कसैलाई राम्रो पनि लाग्न सक्छ र नराम्रो पनि लाग्न सक्छ । तर वास्तविक चाहना चाहिँ यो हो कि भोलि गएर भारतको बम्वइको जस्तो हालत यू.ए.इमा नदेखियोस् र नेपालीहरु त्यसको शिकार नबनुन् भन्ने धारणा मात्र हो । त्यसो त रेशमी र पुजनी मात्र होईन अरु महिलाहरु पनि छन् । तर यो भन्दा धेरै लेख्नु अनुपयुक्त होला भन्ने मैले ठानेको छु । मलाई लाग्छ कतिपय राष्ट्रहरुमा नेपाल सरकारले नेपाली महिलाहरुलाई रोजगारीमा जानको लागि प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । त्यो पनि केही हदसम्म जायज छ तर सबै राष्ट्रहरु भने होईनन् ।
जस्तो कि यूरोप र नेपाल बीचको संस्कृति, रीतिस्थिति, चालचलन आदि आकाश र धर्ती जस्तै फराकिलो छ । यदि त्यही संस्कृतिमा नेपाली महिलाहरु रमाउन चाहन्छन् भने यसको कुनै प्रश्न रहेन । नत्र भने प्रतिबन्ध लगाईएका राष्ट्रमा नेपाली महिलाहरु जवर्जस्ती चोरीको बाटो भएर भारत वा अन्य कुनै राष्ट्रबाट नआउन समेत नेपाली दिदी बहिनीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा विदेशमा आउने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनी जो सुकै भए पनि आउने बेलामा आफू कुन कामको लागि जाँदै छु - त्यहाँको कानून, नीति नियम, आफूले पाउने सुविधा र के कामको लागि को मार्फत् जाँदैछु भन्ने जानकारी लिएर दलाल र ठगहरुबाट बचेर विदेश आएमा राम्रो कम्पनिमा स्तरीय रोजागारी नपाईएला भन्न सकिंदैन ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:25:14 PM
(विरगञ्ज, २५ चैत्र ०६५)
वीरगंजको बाइपास क्षेत्रमा संचालन भएका रेष्टुरेन्टले विकृति फैलाएको भन्दै स्थानीयवासीहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारी र रेष्टुरेन्टका विरुद्ध उत्रिएका स्थानीयबासीहरुका बीच भएको वार्ता र छलफलपछि प्रजिअले समाजको सहमति बेगर बाइपासका कुनै पनि रेष्टुरेण्ट संचालन हुन
नदिने बचन दिएका छन् ।
बाइपासमा संचालन रेष्टुरेण्टहरुले वेश्यावृत्ति (यौन व्यवसाय) लाई प्रश्रय दिएकोले बन्द गर्नुपर्‍यो भनी हजारौंको संकलित हस्तक्षरसहितको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र ज्रि्रकामा एक महिना अगाडि परेको थियो
।रेष्टुरेण्टहरुले यौन व्यवसाय चलाएकोले भारत र नेपालका अपराधीहरुले समेत जमघट हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैवीच नारायणी टुडे दैनिकका संवाददाता एवं फोटो पत्रकार जगत राइलाई आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीको सुरक्षा गार्ड असइ शम्भुप्रसाद गुप्ताले अपमानित गर्दै हातपात गरेका छन् । सो
कार्यालयमा बाइपासस्थित रहेका रेष्टुरेन्टहरु संचालन हुन दिने, नदिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बखत समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकार राइलाई प्रहरी असइ गुप्ताले अपमानित गरेका हुन् ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:28:16 PM
काठमाडौं 'सेक्स टुरिज्म'को सेन्टर ?
काठमाडौं । समाज जति खुला हुन्छ यससंगै विकृतिहरु पनि बढ्दै जाने गरेका छन् । अहिले राजधानी यौन व्यापारको उर्वर भूमि बन्दै गएको छ । राजधानीमा च्याउझैं उम्रिएका क्याबिन, डिस्को, डान्स लगायत शहरबाहिरका रिसोर्ट र कटेजहरु यौन व्यापारको सुरक्षित थलो बनेको छ । स्वदेशी मात्र होइन विदेशीहरु समेत काठमाडौंको यौन व्यवसायको गतिला ग्राहक बन्ने गरेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा काठमाडौं 'सेक्स टुरिज्म'को आकर्ष थलो बन्नेक्रममा छ ।
समाजलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी लिएकाहरु राजनीतिक रुपमा मात्र बढी केन्द्रित हुँदा समाज विकृत बन्दैगएको छ र राजधानीमा खुलेआम यौन व्यापार फस्टाइरहेको छ । त्यसो त विगतमा यौन व्यवसायमा संलग्नहरु अहिले आफ्नो पेशा बदल्ने अभियानमा पनि कम्मर कसेर लागेका छन् ।
अहिले विश्वमा 'सेक्स टुरिज्म' लोकप्रिय छ । विश्वका कतिपय मुलुकले यसैको माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक उन्नति गरेका छन् । नेपालमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ भन्नेहरुको पनि अहिले कमी छैन । नेपालमा अहिलेसम्म यौन व्यवसायले कानुनी मान्यता नपाएका कारण यसले सामाजिक विकृति निम्त्याइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लुकिछिपी र संगठिन रुपमा यौन व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । राजधानी नजानिंदो किसिमले 'सेक्स टुरिज्म'को आकर्ष थलो बन्न पुगेको छ ।
राजधानीमा कति महिला यौन व्यवसायमा संलग्न छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि प्रत्येक वर्षझण्डै दर्ुइ हजारका दरले वृद्धि भैरहेको छ । केही महिना अघि कम्युनिटी एक्सन नेपाल -सिएसी) नामक संस्थाले र्सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस वर्षात्र उपत्यकामा यौन व्यवसायमा संलग्न रहेका थप एक हजार ८०० यौनकर्मी महिलाको पहिचान भएको थियो । अहिले राजधानीमा यौनकर्मी महिलाहरुको संख्या कति छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यो व्यवसायमा खुलेर र गोप्यरुमा संलग्न हुनेको संख्या कहालिलाग्दो छ ।
यौनकर्मी महिलाहरुको संख्या हरेक वर्षबढ्दै गएको छ । त्यसो त हातमुख जोर्नकै लागि यौन पेशा अंगाल्नेहरु मात्र होइन आफ्नो सोख पूरा गर्न पनि यो व्यवसायमा संलग्न हुनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । बाहृय संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव र विलाशी जीवन विताउने लालचले समेत यौन व्यवसायमा संलग्न हुनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । निकै सम्भ्रान्त जस्ता देखिने यी यौनकर्मीहरु आफ्ना ग्राहक विदेशी र उच्चपदस्थहरु रहने गरेको बताउँछन् । यिनीहरु राजधानीका ठूला होटलहरुमा दलालमार्फ ग्राहकको सर्म्पर्कमा गर्दछन् ।
राजधानीको शहरी क्षेत्र बाहिर रिसोर्टका नाममा खुलेको स-साना छाप्रे होटेलहरुको मुल धन्दा नै यौन व्यापार गराउने हो । बालाजुमाथि नागार्जुन क्षेत्रमा रहेका अधिकांश रिसोर्टहरुको धन्दा यस्तै छ । हुन त यो इलाका समाज सुधार गर्ने अभियानमा लागेको भनिएको वाईसीएलको हेडक्वाटर रहेको क्षेत्रभित्र पर्छ तैपनि यस विषयमा कुनै अभियान चलेको छैन । नागार्जुनदेखि मुड्खुसम्मका प्रायः सवै रिसोर्टहरुको काम यही हो । उनीहरु युवतीको माग गर्नेलाई उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर बाहिरबाट लिएर आएकालाई कोठा समेत उपलब्ध गराउने गर्दछन् । उनीहरुलाई न प्रहरीको डर छ, न त वाईसीएलकै । "सवैसंग व्यवहार मिलाएका छौं" एक रिसोर्ट संचालक यसै भन्छन् ।
नागार्जुन मात्र होइन ललितपुरको जंगली क्षेत्र र भक्तपुर पार गरेपछि सुरु हुने साँगाका छाप्राहरुको प्रयोजन पनि यस्तै कार्यमा हुने गरेको छ । यो व्यवसाय नेपालीमा मात्र सीमित नभएर विदेशी पर्यटकहरुसम्म पनि पुगेको छ । विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरुमा नेपालको 'सेक्स टुरिज्म' आकर्षाको केन्द्र बन्दै गएको छ । यो व्यवशास राजधानीमा मात्र सीमित नरहेर पर्यटकहरुका आकर्ष गन्तव्यहरुमा विस्तारित हुने क्रममा छ ।
कति रहले कति वाध्यताले
विगतकालमा यौन व्यवसाय अँगाल्नेहरुमध्ये अधिकांश महिला पारिवारिक भेदभावको शिकार भएका, आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेका हुने गर्दथे भने अहिले स्कूल-कलेजका युवतीहरु पनि संलग्न हुने गरेका छन् । आफूलाई सम्भ्रान्त र आधुनिक देखाउँनकै लागि अन्जानमै यस्तो दलदलमा फस्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ । नागार्जुनदेखि साँगाहुँदै नगरकोटसम्मका सडक किनारमा रहेका रिसोर्टहरुमा देखिने दृश्यले नै यसलाई पुष्टि गर्दछ । कलिलो उमेरमा आफ्नो असीमित चाहना पूरा गर्न यौन पेशामा लाग्नेेहरुले पनि राजधानीको यौन व्यापारलाई टेवा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर कर्पोरेट हाउसहरुमा पनि आफ्नो 'क्यारियर', 'प्रतिष्ठा' अनि 'पावर'का लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने आधुनिक युवतीहरु पनि नजानिंदो किसिमले यौनकर्मी बन्न पुगेका छन् ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:30:15 PM
इटहरी - (स्रोत रासस)
प्रकाशनको मिति २७ जुलाई २००८
व्यावसायिक तथा कानुनी आधारमा नै यौन व्यवसाय सञ्चालनको माग राख्दै सुनसरीका यौनकर्मी महिलाहरूले सहयोगी महिला समूह नामक संस्था दर्ता गराएका छन् ।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीमा सङ्घसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत सो संस्थाको दर्ता गराएका हुन् ।
पूर्वाञ्चलमा पहिलोपल्ट यौनकर्मी महिला समूह नामक संस्था दर्ता गराउने क्रममा प्रशासनले अनुमति नदिएपछि उनीहरूले संस्थाको नाम परिवर्तन गरी सहयोगी महिला समूह नामक संस्था दर्ताको अनुमति लिएका हुन् ।
जिल्लाका विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा यौन व्यवसाय गर्दै आएका महिला समूहले देविका धमलाको अध्यक्षतामा यौनकर्मी महिला समूह गठन गरी स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गराएका हुन् ।
यौन व्यवसायमा लागेका उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिनेलगायतका समस्याहरूको संस्थागत रूपमा प्रतिरोध गर्नका लागि सो संस्था दर्ता गराएको उनीहरूले दावी गरेका छन् ।
अहिले सुनसरीमा यौन व्यवसायमा लागेका ७० भन्दा बढी यौनकर्मी महिलाहरू संस्थामा आबद्ध रहेको पनि अध्यक्ष देविकाले बताउनुभएको छ । गरिबी तथा पुरुषबाट अपहेलित भएर जीवन गुजाराका लागि यौन पेसामा लागेका महिलाहरूलाई एचआइभी/एड्सजस्ता विषयमा परामर्श दिने कार्यमा संस्थाले काम गर्ने बताइएको छ ।
सुनसरी तथा मोरङ जिल्लाका औद्योगिक क्षेत्र तथा राजमार्ग आसपासमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अरू धेरै यौनकर्मी महिलाहरू रहेको र उनीहरूलाई समेत समेट्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।
यस पेसामा लागेका महिलाहरू कति छन् भन्नेबारे अहिले नै यकिन गर्न नसकिने भए पनि चाँडै नै संस्थाको सक्रियतामा ती सबैको तथ्याङ्क निकालिने तयारी भइरहेको पनि संस्थाले जनाएको छ ।
यौनकर्मी महिलाहरूमा देखापरेका समस्याहरूका विषयमा खुलेर बहस चलाउने र महिलाहरूमाथि दुःख दिने पुरुष ग्राहकहरूलाई सुरक्षित यौन सम्पर्कका लागि उत्प्रेरित गर्नका लागि पनि संस्थाले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष धमलाले उल्लेख गर्नुभयो ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:31:15 PM
यौन व्यवसायमा लाग्छन किशोरीहरु दलाली गर्छन् किशोरहरु
विदेशमा रेडलाइट एरिया हुनु ठूलो कुरा होईन तर नेपालमा रेडलाईट एरिया भने छैन । रेडलाईट एरिया नभए त के भयो ठमेल नै छ नेपालको रेडलाईट एरिया । हुन त ठमेललाई रेडलाईट एरिया घोषणा गरिएको छैन तर पनि रेडलाईट एरिया जस्तै भएको छ ठमेल । रेडलाइट एरिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ यौन व्यवसायको कुरा आउँछ । ठमेल यस्तो एरिया जहाँ दिउँसै यौनको बार्गेनिङ हुन्छ । ठमेलका केही ठाउँमा अहिलेपनि दिउँसै यौनको खुलेआम बार्गेनिङ हुने गरेको छ । हुन त गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अपराध बढ्यो र यौनको विकृति भयो भन्दै रातमा चल्ने डान्स रेष्टुराँ डिस्को गजल पब र दोहोरी साँझ जस्ता रात्री व्यवसायलाई रातको ११ बजेपछि बन्द गराएका छन् । रातको ११ बजेपछि यस्ता रात्री व्यवसाय चल्न नदिएपनि अझै यौनको खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ ठमेलमा । सेक्स मान्छेका लागि अपरिहार्य कुरा हो त्यसैले यौन कुण्ठा पालेर मान्छे बस्न सक्दैन । जब तीब्र यौनेच्छालाई दबाईन्छ तब उसका मनमा अनेक बिकृतिहरु जन्मन थाल्छ । त्यसैको परिणाम अहिले ठमेलमा दिउँसै खुलेआम यौन व्यवसाय हुन थालेको छ । डान्स रेष्टुराँमा काम गर्ने आशा नाम गरेकी एक जना किशोरीले भनिन् सरकारले रात्री व्यवसायीलाई लक्षित गरेर बन्द गराउने काम गरेको छ जसको कारणले कयौं युवतीहरु सडकमा सेक्सको बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन् । प्रहरीले हामीमाथि जबर्जस्ती तुच्छ बोल्ने काम गरिरहेका हुन्छन् उनले भनिन् । प्रहरीहरुलाई माथिबाट आदेश आउँछ कि चाँडो डान्स रेष्टुराँहरु बन्द गर भनेर । तर उनीहरु बन्द गर्न आउने नाममा हामीमाथि नचाहिने कुरा बोलिरहन्छन् । कहिलेकाही त उनीहरु सेक्स गर्ने प्रस्ताव पनि राख्छन् हामीमाथि आशाले भनिन् । ठमेलमा रातको आठ बज्न नपाउँदै सडकमा युवायुवतीहरुको भीड लाग्न थाल्छ । ठमेलको रातसँग धेरै जना परिचित छन् । ठमेलको रात्री जीवनको बारेमा अझ धेरै जान्न मन लाग्दा म एकदिन ठमेल पुगें । त्यो दिन सडकमा युवायुवती र अधवैशेहरु डुलिरहेका देखिन्थे । ठमेलस्थित संचयकोष भवन अगाडि एउटा भीड मैले अनि म लागें त्यतैतिर । यौन व्यवसायको बारेमा कसलाई सोध्ने भनेर एकछिन त अलमल्ल परें । तर सोच्न धेरै समय नै थिएन । सडक छेऊमा उभिरहें एकछिन् त्यत्तिकैमा ड्राइभरले सोधिहाले दाई केटी चाहिएको हो मैले सोधंे कस्ता युवतीहरु छन् उनले सम्पूर्ण जानकारी दिए । जानकारी पाएपछि म अघि बढे । अघिमात्र के अगाडि बढेको थिए केटीहरुको एक झुण्ड देखियो । मैले सोचे उनीहरु ग्राहकको प्रतिक्षामै होलान् भनेर । अन्दाजी १८ देखि ३० बर्ष सम्मका युवतीहरु यसो प्रहरीको आँखा छल्दै घुम्दै थिए । उनीहरु अश्लिल शब्द प्रयोग गर्दै आपसमा जिस्किरहेका थिए । ग्राहकसंग पैसाको मोलमलाई पनि चल्दै थियो । कर्मचारी संचयकोष अगाडि नै एकजना किशोर भेटिए । २० बर्ष झै देखिने एकजना किशोर ग्राहकको खोजीमा रहेछन् । गेष्ट हाउसमा एक जना केटा लगिदिएबापत उनले केही रुपैंया कमिशन पाउँदा रहेछन् । उनले एकजना ग्राहकलाई सिल्क रोड गेष्ट हाउसमा लगिदिए । जहां खुल्लेआम यौनव्यापार चल्नॆ गर्दोरहेछ । गेष्ट हाउसमा छिर्नासाथ एउटा कोठा भित्र उनलाई लगियो । कोठाभित्र केही केटीहरु रहेको थाहा भयो । त्यहाँ वरिपरीका केही व्यक्तिलाई सोध्दा थाहा भयो की यहाँ पहिलेदेखि नै यौन व्यवसाय चल्ने गरेको रहेछ । गेष्टहाउसमा काम गर्ने ती युवक अरु ग्राहकको प्रतिक्षामा तल बसिरहेका थिए । केही व्यक्ति सँग बार्गेनिङ गर्दै थिए उनीहरु । ती युवकको काम गेष्ट हाउसमा ग्राहकलाई पुर्याईदिने र केटी रोज्न लगाउने रहेछ । गेष्ट हाउसमा बसेबापत एक जना किशोरीको एक घण्टाको एक हजारको हाराहारीमा अनि रातभरको ३ देखि ५ हजार सम्म दिनुपर्ने रहेछ । यतिमात्र होईन ठमेलको बीयर बार नजिकैको गेष्ट हाउसमा पनि यौन व्यवसाय हुने गरेको थाहा पाएँ । त्यो गेष्ट हाउसमा गएपछि कसैले थाहा नपाउने व्यवस्था गरिदिने गर्ने गरेको केही व्यक्तिहरुबाट थाहा हुन आयो । त्यहाँपनि भर्खरै १८ वर्ष लागेका देखि २५ वर्षसम्मका केटीहरु पाईने गर्दो रहेछ । ठमेलमा यस्ता कयौं गेष्टहाउसहरु छन् जहाँ खुलेआम यौनव्यवसाय चल्ने गर्दछ । सरकारले रात्री व्यवसायलाई मात्र लक्षित गरेर रातको ११ बजेपछि बन्द गर्न कडा कदम चालेपनि ११ बजे अगाडि नै यौनका खुलेआम गतिविध चल्ने गर्दछ । राजधानीको केन्द्रविन्दुमा रहेको एउटा व्यस्त बजार मानिने ठमेलमा यस्ता गतिविधिहरु बढ्दै छन् । गृहमन्त्री बामदेव गौतम सरकारमा सहभागी भएदेखि नै राजधानीमा भएका विकृतिका विरुद्ध कुर्लदै आउनुभएको छ । ठमेलमा विभिन्न विकृति विसंगति हुन्छन भन्ने गृहमन्त्रीको ठहर छ । यसैले सरकारमा सहभागी भएदेखि नै गृहमन्त्री गौतमको निगरानीमा छ ठमेल । तर ठमेलमा अवैध धन्दा रोकिएका छैनन । बरु संस्थागत हुंदै गएका छन । सांझको धिपधिपे बत्तीसंगै अहिले पनि खुल्लेआम अबैध धन्दा सुरु हुन थाल्छ ठमेलमा । गेष्ट हाउसमा काम गर्ने शर्मिला नाम गरेकी एक किशोरीले ठमेलका गेष्ट हाउस र डान्स रेष्टुराँमा काम गर्दै आएका आधा जसो त क्याम्पसमा अध्ययनरत केटीहरु हुने गरेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने धेरै केटीहरुले आर्थिक अवस्थाका कारण यौन व्यापार गरिरहेका छन् । उनले भनिन कतिपय त श्रीमान छाडेर आएका महिलाहरु छन् । भारतका कोठीमा बेच्न लगिएका तर बाटोबाटै फर्काइएका युवतीसमेत ठमेलमा यौन व्यापार गरिरहेका छन । ती मध्ये अधिकांश १६ देखि ३० बर्षसम्मका छन । एउटै गेष्ट हाउसमा १५ जनासम्म युवती हुन्छन् । यो पेशामा संलग्न महिलाहरुका अनुसार राति ८ बजेबाट यो धन्दा सुरु हुन्छ र जुन राति २ बजेसम्म चल्छ । गेष्ट हाउस अनुसार यौन व्यवसायको दररेट पनि फरक फरक छ । कुनै पेशाबाट खान नपुगेपछि बाध्य भएर यौन व्यवसाय गर्नुपरेको किशोरीहरुको भनाई छ । उनीहरुको सरकारसँग माग छ की सरकारले खान पुग्ने रोजगारी दिनुपर्यो । गेष्ट हाउस डान्स रेष्टुराँ डिस्को पब गजल दोहोरीमा काम गर्ने महिलाहरुले राति अबेरसम्म काम गर्न नपाईएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको भनाई छ रातको समयमा काम गर्दा बढि आम्दानी हुन्छ । उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारको यो निर्णयका कारण डान्स रेष्टुराँमा काम गर्ने केटीहरु दुबई कतार जस्ता खाँडी मुलुक जाने क्रम बढ्न थालेको रेष्टुराँ व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
Post by: tundikhel on July 20, 2009, 01:32:35 PM
यौनकोठी, ग्राहक र मिडिया
निर्मला शर्मा >>
महाराजगञ्जमा सञ्चालित एउटा यौनकोठी बाट गएको महिना पक्राउ परेका सभासद् कृष्ण यादव सोही दिन प्रहरी हिरासतबाट छुटे । कोठीकी सञ्चालक सुनिता खड्का र यौन-व्यवसायमा संलग्न युवतीहरूलाई २२ दिन थुनेर छाडियो ।
राजधानीका कतिपय सञ्चारमाध्यमले झ्ण्डै एक साता यो घटनाको समाचार दिइरहे । तर समान अपराधमा कसैलाई ऐन कसैलाई चैन भएको यस किसिमको विभेदकारी विषय उठाउन न कुनै सञ्चारमाध्यम सशक्त देखिए, न कुनै अधिकारकर्मी वा कानूनविद्ले नै मुख खोले ।
वास्तविकता स्पष्ट छ, नयाँ संविधानका विषयमा सुझाव लिन घरदैलो जाने तयारीमा रहेका सभासद् यौनकोठीमा भेटिए । प्रचलित कानून अनुसार यो दण्डनीय अपराध हो । मानव बेचबिखन तथा 'सारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ ले यौन-व्यवसायी महिलाबाट यौनसेवा खरिद गर्नुलाई वेश्यागमन भनेको छ । ऐनको दफा १५ (घ) मा यस्तो काम गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र रु.२ हजारदेखि रु.५ हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
कानूनतः प्रहरीले यौनकोठी सञ्चालक र सभासद् यादव दुवैलाई रिहा गर्न मिल्दैनथ्यो । प्रहरीले अपराधीलाई सभासद् भन्ने थाहा नपाएर पक्रिएको भन्नु आत्मसमर्पण मात्रै थिएन, राजनीतिक आडमा कानूनी राज्यको उपहास समेत थियो । यस घटनाले पुरुषप्रधान राजनीति र राज्यसंयन्त्रले अपराधीलाई समाजमा पुनःस्थापना मात्र गराएन, नयाँ संविधानका लागि सुझ्ाव लिन जनतामाझ् जाने बाटो समेत खोलिदियो । बिचल्ली तिनको भयो, जसले सभासद् यादव लगायतलाई यौनसेवा दिएर अपराध गरे । ग्राहक पक्राउ नै नपर्ने अथवा परिहाले पनि तत्कालै छुट्ने अनि बिक्रेता महिलाले २२ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ?
यस प्रकरणमा कारबाहीको कागजी कारण पनि अनौठा छन् । युवतीहरू समातिए सभासद् यादवसहितका ग्राहकलाई यौनसेवा दिएको भनेर । तर भनियो, यौनअखडा चलाएको भन्ने छरछिमेकीको सुराकीको आधारमा ठालूहरू जाने गरेको थाहा पाएर छापा मारिएको । सेवा लिन जाने ठालू को हुन्, खोजी भएन । पक्राउ परेका महिलामाथि गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाइयो ।
आरोप आफैँमा अस्वाभाविक थियो । किनभने नेपालको कानूनअनुसार कुनै महिला आफैँ यो व्यवसायमा लागेको अवस्थामा उसको कामलाई अपराध मान्न मिल्दैन । कानूनले यौनकोठी खोल्नु र यौन-व्यवसायी महिलाको सेवा पाउनुलाई मात्रै अपराध मानेको छ । कानून बमोजिम अपराध नभएपछि कारबाही हुने प्रश्नै उठ्दैन । फेरि प्रहरीले उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएको जवाफ दियो । बन्द कोठाभित्रका कामबाट कसरी सार्वजनिक अपराध भयो कतैबाट पनि प्रश्न उठाइएन ।
यौन-व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने ? यो कुनै व्यवसाय हो वा होइन ? महिलाले आफ्नो अङ्गको अधिकतम उपयोग गर्न पाउनुपर्छ मात्र भनियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक असरतिर ध्यान दिने कि नदिने ? यस्ता विषयमा पर्याप्त बहस हुनुपर्दछ । नेपालको कानूनमा स्पष्ट छ, यसलाई उद्योग बनाउन पाइन्न, ग्राहकका रूपमा जान पाइन्न तर विवशताका कारण महिलाहरू यस पेशामा लागेका छन् भने उनीहरूलाई हतोत्साहित पनि गर्नुहुन्न ।
कानूनले यसो भने पनि ज्यादती भयो महिलामाथि नै । सभासद्सँग कुरा गर्न र उनका तस्बिर लिन कञ्जुस्याइँ गर्र्ने सञ्चारकर्मीहरू युवतीका अनुहार कैद गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका देखिए । यसो गर्नु कानूनको सरासर उल्लङ्घन थियो । ऐनमा यसो गर्नेलाई रु.२५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर पनि मिडियामा महिलाका अनुहार देखाइयो, कसैले उजुरी गरेन । उजुरी नगरेपछि कारबाही हुने अवस्था पनि रहेन ।
घटनाको अर्को पाटो पनि छ । यौन-व्यवसायी महिलाका भनाइमा राजधानीका सबैजसो यौनकोठीबारे प्रहरी बेखबर छैन । जब लेनदेन मिल्दैन अनि छापा मार्न प्रहरीले अग्रसरता देखाउँछ । उपत्यकाका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरूले पनि यसरी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । तर यसबाट महिलाहरू झ्नै पीडित हुने कुराप्रति उनीहरू बिल्कुलै गम्भीर देखिएनन् । यसले समस्याको जटिलता झ्ल्काउँछ ।
कोठी सञ्चालक सुनिता खड्का र अरू यौन-व्यवसायी महिला धरौटीमा रिहा भए । तर नसुल्झ्िएको पाटो के हो भने राजनीतिक शक्तिको आडमा अहिले पनि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हदैसम्म भएको छ । यौन-व्यवसायीका सेवाग्राही स-सम्मान रिहा हुने अनि सेवा दिने महिला तीनसातासम्म थुनिनुपर्ने त्यो पनि सार्वजनिक सुरक्षा कानून उल्लङ्घन गरेको भनेर ! यो भन्दा बिडम्बना अरू के हुनसक्छ ?﻿
Post by: S1nner on July 20, 2009, 03:51:20 PM
nice article bro.. tara yo kina chhada section ma
Post by: khatee on July 20, 2009, 04:05:33 PM
very nice this should not be in chhada section make it reach to every one sure for social awareness.
Post by: Limpman on July 20, 2009, 08:02:47 PM
Post by: Red Devil on July 21, 2009, 03:42:14 AM
Post by: queenbee on July 21, 2009, 09:47:25 AM
sadly women sell their body mostly for money.
the fact is you cannot eliminate prostitution, you will find it in every nook and corner of the world
even the most developed countries have prostitution problem, many girls are trafficked for this
all those in nepal who are advocates for or against prostitution do not know the reality of it.
you have to accept prostitution asanecessary evil inasociety
the only thing is it should not be forced or blatant
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:14:08 AM
Quote from: queenbee on July 21, 2009, 09:47:25 AM
It should also be considered asabusiness...asingle ownership business. ... That is, no pimps and escort business.
Individual should be given the freedom of whatever they want as long as nobody is hurt.
Two people can indulge inarelationship either for money or for fun - it's their choice.
There is dark side of every aspect of life. People will learn to cope with it in the long run.
Making it illegal has created more problem... In Nepal prostitutes can't complain - if they do they will be jailed instead... so they are being abused.
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:18:04 AM
Great idea Limpman bro (+1 for you) and Thanks Kurakani for moving the thread...
के यौन कर्मी बाध्यता ले हुनु समाज को लागी कलंक हो ? -- The society is to be blamed. the society has created that situation. The people in the society use prostitute in night and speak against them in the day.
के उनी हरु को समाझ माँ बाच्ने अधिकार छैन ? - Yes and should live with dignity.
यौन ब्यबसाय लाई कानूनी मान्यता दिएर ब्यबस्थित गर्नु राम्रो हो की हैन ? - Just don't make it illegal... Rest leave it to the individual.
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:19:43 AM
Quote from: S1nner on July 20, 2009, 03:51:20 PM
Quote from: khatee on July 20, 2009, 04:05:33 PM
Kurakani bro has taken care of that
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:23:44 AM
Inadifferent thought.......
Girls prefer wealthy guy to get married.
I think marriage is legal form of prostitution.
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:48:40 AM
NEPAL: 5,000 women and girls are trafficked to India yearly. After India with 100,000 women, Hong Kong is the second biggest market. Brokers especially in rural areas and even family members sell girls; husbands sometimes sell their wives to brothels. According to the book Rape for Profit, about 50,000 Nepali women and girls have been trafficked to India. Every year about 10,000 Nepali girls, mostly between the ages of9and 16 are sold to brothels in Indian cities. According to international social agencies, this flow of Nepali girls into Indian brothels is probably the busiest slave traffic of its kind anywhere in the world. Some experts believe that more than 200,000 Nepali girls are involved in the Indian sex trade.
(Proceedings of the fact-finding meeting and the National Workshop on Trafficking in Women and Children, May 23-25, 1997, Dhaka, Bangladesh, edited by professor Ishrat Shamim Farah Kabir.)
Problem of sex and trafficking is rampant in the countries where the society is more conservative in terms of sexuality - http://www.catw-ap.org/programs/research-documentation-publications/facts-and-statistics/ (http://www.catw-ap.org/programs/research-documentation-publications/facts-and-statistics/)
Post by: kurakani on July 23, 2009, 02:50:14 AM
Post by: Limpman on July 23, 2009, 09:09:19 PM
Thanks mod for editing my post.....hope you guys give your opinion here.......
Post by: kalam on August 08, 2009, 11:15:47 PM
once these things start they never end. it is better for all involved to try to manage this not as an underground business but actually more openly for hte benefit for the workers and customers as well.
Post by: tundikhel on September 13, 2009, 03:42:14 AM
प्रेम बानियाँ, खासा (चीन)- नेपालमा जस्तो यहाँ पुलिस/आर्मीले दुःख दिदैनन्। आउँछन् हामीसँग बस्छन्, रमाइलो गर्छन्, पैसा तिर्छन् र फर्किन्छन्।
'यो त सूर्य चुरोट, मलाई खुब मन पर्छ।'
बन्द कोठाको मधुर तर रंगिन उज्यालोमा उपरखुट्टी लाएर उनले चुरोट सल्काइन्।
स्थानीय समय अनुसार रातको १२ वजेको छ। हाम्रो घडीमा त्यस्तै १० वजेका वेला एक अर्को प्याला भरिन् ल्हासा नामको बियरले।
'म पहिला काठमाडौंको रेष्टुरेण्टमा काम गर्थे, तर त्यहाँ रातभरि काम गर्न पनि नपाइने। कता-कताबाट यता आइयो। यो जिन्दगीको भरै नहुने के दाइ।'
जिन्दगीसँग नभेटिएको उनको भर यतिवेला चिनको खासास्थित न्यू नेपाली रेष्टुरेण्ट एण्ड बारमा छ। एउटा सिंगै घरमा उनी सहित अरु १० जना नेपाली युवती बैंसको ब्यापार गरिरहेका छन्।
हामीभन्दा दायाँतर्फको कोठाबाट आवाज आयो- 'नयन! तिमी यता आऊ।'
उनी जुरुक्क उठेर त्यसतर्फ लागिन् र केहीबेर हराइन् हामीबाट।
त्यसपछि सुन्दर अनुहार लिएर आइपुगिन् अन्जू। उमेर त्यस्तै १५/१६ भन्दा बढी छैन होला। 'अँह, म त रक्सी चुरोट केही पनि पिउँदिन। सानै छु नि त!' उनी बोल्दै गर्दा अर्की छिरिन्- प्रेरणा।
'बिस्तारै सिकिहाल्छे नि दाइ, भर्खर एक महिना त भो यो आकी'- तिनले भनिन्। प्रेरणाले बियर खोलिन्, सबै प्याला भरिन् र भनिन्- 'दाइ चियर्स!'
नेपालीमा ग्याम्बे भने झै एकै पटकमा पूरै प्याला रित्तो पारेर प्रेरणा बोलिन्- 'यो त खासा हो नि दाई, देश अनुसारको भेष त गर्नै पर्छ। बरु, सिग्रेट सल्काउनु न म त झ्याप भइसकें।'
खासाको त्यो मध्यरात। झन्डै १० जना अटाउने हाम्रो कोठामा क्रमशः फरक-फरक नेपाली अनुहार फरक-फरक ब्यवहारका साथ आउने-जाने गरिरहे।
यहाँ के के पाइन्छ बैनी?
'जे पनि पाइन्छ नि दाइ, काँ यो नेपालजस्तो हो र?
एक हजार रुपियाँदेखि रुप र बैस हेरेर १० हजारसम्मको रातबारे सांकेतिक जानकारी दिइन् उनले। 'चाइनिज केटीहरू त अझ सस्तोमा पाइन्छन् भाउ बिगारेकै तिनेरले' भन्दै गर्दा सैनिक पोशाकमा चिनिया दुई युवा आए। हामी सशंकित भयौं।
'डराउनु पर्दैन दाइ, उहाँहरू पनि तपाईंहरू जस्तै ग्राहक हो। मैले भने नि यो नेपाल होइन', स्वेच्छाले हामीलाइ सम्झाइन्। ती चिनिया सैनिक रहेछन्, केहीबेर नेपाली युवतीसँग बिताउन आएका। त्यतिबेला स्थानीय समय अनुसार रातको दुई बजिसकेको हुनुपर्छ।
झण्डै एक घण्टा पछि सेनाका दुई जवान बन्द कोठाबाट थकित सिपाही भएर निस्किएको देखियो।
'केही हुदैन दाइ यस्तै हो, बरु क्यामेरा लुकाउनु होला, उनीहरुले देखे भने फुटाल्न सक्छन्। फोटो खिच्न चाहिं चाइनामा गारो छ, स्वेच्छाको सुझाब अनुसार हामीले क्यामेरा लुकायौं।
केहीबेर हराएर आएकी नयनले भनिन्- 'दाइ नेपालमा जस्तो यहाँ पुलिस/आर्मीले दुःख दिदैनन् नि, ऊ यसरी आउँछन् हामीसँग बस्छन्, रमाइलो गर्छन्, पैसा तिर्छन् र फर्किन्छन्।'
काठमाडौं घर भएकी नयन त्यो बारको पुरानो स्टाफ रहिछन्। उनलाई धेरै जानकारी रहेछ खासाबारे। र, त्यहाँ नेपालका उच्च पदस्थ पनि धाउँदा रहेछन्। तर, अराजक हुन्छन् रे तिनीहरू यस मामिलामा। भनिन् -'चाइनिज ग्राहक त धेरै सोझा हुन्छन्। नेपाली जस्ता उत्ताउला हुदैनन्। भाषा बुझ्न गारो र मात्रै नत्र मजाका।'
करिव दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खासा बजारमा यो एउटा प्रतिनिधि बार रहेछ। बुझ्दै जाँदा नेपाली काम गर्ने बारको संख्या आधा दर्जन जति रहेछ र खासामा रहेर विभिन्न काम गर्ने करिव ५ सय नेपाली अनि अरु चिनिया ग्राहकका मनोरञ्जनका माध्यम रहेछन् उनीहरू।
नेपालमा गृहमन्त्री रहँदाताका वामदेव गौतमले रात्रीकालिन व्यावसायमा कडा नियम लगाएको परिणाम रात्री व्यावसायमा अभ्यस्त भइसकेकाहरू काठमान्डूमा राति ११ वजेउता काम गर्न नपाउने भएपछि खासातिर हान्निएका रहेछन्। उनीहरु त्यस्तो नियमलाइ बिरोध गर्दै थिए खासामा पनि।
'दाइ यहाँ त चौविसै घण्टा खुल्ला हुन्छ नि। पेशा गरेर पनि खान नपाइने काठमाडौं जस्तो होइन।' नयनले भनिन्-'उसले चिन्ला कि, काकाको छोरा आउला कि, साथी पो आउली कि भन्ने चिन्ता पनि छैन।'
उनीहरूको दैनिक तलब कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ हुँदो रहेछ। काठमाडौका रेष्टुरेण्ट, क्याविन र बारहरुबाट खासासम्मको दूरी पूरा गर्नुलाइ उनीहरु 'बेस्ट प्रमोशन' मान्दा रहेछन्। खासाका बार र ५ वटा डिस्कोथेकमा गरी डेढ सय जति नेपाली युवती कार्यरत छन्।
खासा रोडको त्यो मध्ये सडकमा अरु धेरै चिनिया बार र रेष्टुरेण्ट पनि छन्। जहाँ खल्तीमा पैसा हुनेका लागि आइटम-आइटमका मदिरा, रेष्टुरेण्ट, बार, डिस्को र युवती तयार छन्। दिनभर व्यापार व्यावसायमा व्यस्त त्यही सहर रात परेपछि 'रेडलाइट एरिया' बन्छ।
सहरको मध्ये चोकमा एउटा डिस्कोबाट गीतको आवाज बाहिरिरहेको थियो- चिया बारीमा..हो......चिया बारीमा...। प्रवेश शुल्क नलाग्ने डिस्कोमा छिरेर एउटा ल्हासा वियर पिउँदा सय रुपियाँ तिरे पुग्छ। बाँकी ग्राहक के चाहन्छ र ऊसँग कति पैसा छ त्यसमा भर पर्छ।
सवैजसो चिनिया अक्षरमा लेखिएका साइनबोर्ड अनुसार नेपालीलाई रेष्टुरेण्टहरुको नाम आउँदैन। यस्तै मध्येको एकमा हामी पुग्दा-युवती पुरुषसँग आलिंगनमा व्यस्त थिए। अनाम चिनिया युवती आएर हामीलाई पनि त्यसै गर्न थाले। पछि थाहा भयोे-नेपाली युवा चिनिया युवतीसँग र चिनिया युवा नेपाली युवतीसँग बढी रमाउँदा रहेछन्। अचेल त्यहाँ नेपाली युवतीको माग निकै बढेको रहेछ।
Post by: xsajha on September 16, 2009, 11:36:22 PM
नेपालमा ३० हजार महिला यौनकर्मी, ६ लाख ग्राहक, अधिकांश उपत्यकामै
देहव्यापार कानुनीरुपमा अवैध भएपनि मुलुकमा यसको सङख्या करिब तीस हजार रहेको छ। यौनकर्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुका अनुसार ती यौनकर्मी महिलाहरूका ग्राहक छ लाख रहेको छ। यस्तो सङ्ख्यामा रहेका यौनकर्मी महिला र उनका ग्राहकहरूमध्ये धेरैलाई यौन रोग लागेको हुनसक्ने अनुमान छ।
'काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै धेरै महिला तथा उनका ग्राहकहरूलाई यौन रोग लागेको पाइएको छ, उनीहरूलाई आवश्यक परामर्श पनि अधिकारकर्मीहरुले दिइरहेका छन् ।
देह व्यापारलाई जीवनयापनको माध्यम बनाएका यौनकर्मी महिलाहरूलाई धेरैजसो प्रहरी, आर्मी र योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) ले शोषण गर्ने गरेको स्वंम यौनकर्मीहरु बताउँछन् ।
घरमा हुने घरेलु हिंसा सहन नसकेर, घरपरिवारमा अपहेलना परेर, रोजगारी नपाएर, बेचिएर तथा लहलहैमा लागेरसमेत यो पेशामा लाग्ने गरेकोसमेत उनीहरुको भनाइ छ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका यौनकर्मी महिलाहरूका लागि अधिकारकर्मीहरुले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरे पनि उपत्यका बाहिर भने यस्ता कार्यक्रम हुने गरेका छैनन। यौनकर्मी महिलासँग प्रतिव्यक्ति २० जनासम्म ग्राहक हुने गरेको र धेरै जनासँग विश्वासको भरमा असुरक्षित सम्पर्क हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
यस्तो व्यवसायले एकातिर विकृति पनि ल्याएको बताइएको छ भने अर्कातिर यस्तो पेशामा आवद्धहुनेहरूलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
Post by: xsajha on October 16, 2009, 03:38:58 AM
होटलमा बसेका जोडीलाई दु:ख नदिन आग्रह
बिहिवार, 15 अक्टोबर 2009 09:16 नागरिक
मनोज अधिकारी, पोखरा असोज २९ - पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडका व्यवसायीले होटलहरुमा प्रहरीले मध्यरातमा छापा मारी आन्तरिक पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गरेका छन्। पश्चिमाञ्चल होटल संघका पदाधिकारीले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर विभिन्न होटलमा छापा मार्दा नेपाली पर्यटकले दुःख पाएको गुनासो गरेका हुन्।
होटलमा बसेका जोडीहरु अनैतिक काममा लाग्ने गरेको भन्ने शंकाका आधारमा प्रहरीले निगरानी बढाउँदै केही व्यवसायीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरु प्रहरी कहाँ पुगेका हुन्।
'सबैसँग म्यारिज सर्टिफिकेट (बिबाह प्रमाणपत्र) हुँदैन' संघका अध्यक्ष गोविन्दराज पहारीले भने- 'पोखरा घुम्न आएका दम्पतीमाथि प्रशासनले अनावश्यक शंका गर्दा नराम्रो सन्देश जान्छ।'
उनले प्रहरी प्रशासनबाट आन्तरिक पर्यटनलाई हतोत्साही बनाउने काम हुन नदिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश खरेललाई अनुरोध गरेको बताए। मध्यरातमा होहल्ला गर्दा छापा मार्दा विदेशी पर्यटकमा समेत त्रासको वातावरण फैलनतर्फ आफुहरुले सचेत गराएको पहारीले बताए।
प्रहरीले १२ दिनअघि होटल तिव्बत होममा छापा मारी दुई जोडी आन्तरिक पर्यटक र होटल प्रबन्धक दिनेश ढकाललाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुलाई भोलिपल्ट भेट्न गएका होटल संचालक उद्धब चालिसेलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुचित कार्य गरेको र त्यसमा सघाएको भन्ने आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरुलाई अझै नछाडिएको होटल संघका अध्यक्ष पहारीले बताए।
होटल न्यू फेमेलीका संचालक रवि ज्यावारचनलाई पनि गलत क्रियाकलाप गर्ने नेपाली जोडीलाई बास दिएको भन्दै प्रहरीले छापा मारेर नियन्त्रणमा लिएको संघले जनाएको छ। ज्वारचनको गोडा भाँचिएकाले उनलाई बढी दुःख नदिन संघले अपिल गरेको छ।
व्यवसायीहरुले ओलाला रेष्टुरेण्ट र होटल ट्राभल इनमा समेत प्रहरीले छापा मारेर अनाबश्यक दुःख दिएको गुनासो गरेका छन्।
व्यवसायीसँगको भेटमा कास्कीका प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले यौनधन्दा जहाँसुकै भए पनि आफूले नछाड्ने बताए। उनले यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्ने स्थलका रुपमा होटललाई प्रयोग नगर्न समेत व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। ...यौन धन्दा जहाँसुकै भए पनि छाडि्दन' चेतावनीपूर्ण शैलीमा व्यवसायीलाई सम्झाउँदै खरेलले भने-...थाह पाए १५ वर्ष जेल हाल्छु।'
आगामी दिनमा होटलहरुमा अनैतिक क्रियाकलाप हुन नदिने र पर्यटकलाई पनि दुःख नहुने गरी काम गर्न व्यवसायी र प्रहरीबीच साझा आचारसंहिता बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको अध्यक्ष पहारीले जानकारी दिए।
'यसबारे तिहारपछि विस्तृतरुपमा छलफल गरी आचारसंहिता बनाउने सहमति भएको छ' उनले नागरिकसँग भने।
Post by: tundikhel on October 17, 2009, 11:46:35 AM
Post by: tundikhel on November 05, 2009, 12:41:07 PM
Post by: tundikhel on November 05, 2009, 12:42:38 PM
Post by: thulomulo on November 05, 2009, 01:16:08 PM
Post by: mr_worm on November 05, 2009, 05:09:33 PM
Post by: tundikhel on December 31, 2009, 02:42:52 AM
Post by: tundikhel on December 31, 2009, 02:43:52 AM
Post by: tundikhel on December 31, 2009, 02:21:09 PM
Post by: tundikhel on January 03, 2010, 03:27:26 AM
Post by: tundikhel on January 07, 2010, 10:49:09 AM
Post by: tundikhel on January 07, 2010, 08:41:48 PM
देह व्यापारका १६ आरोपी धरौटीमा छुटे
भक्तपुर, २०६६ पुस २३ -
देह व्यापारमा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न रेष्टुरेन्टबाट एक साताअघि पक्राउ परेका १६ जना महिला तथा पुरुष बिहीबार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
अरनिको राजमार्गखण्डमा सञ्चालित विभिन्न रेष्टुरेन्टमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, थिमीले छापामारी चार पुरुष र १२ महिलालाई पक्राउ गरेको थियो ।
एक सातापछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले जनही रु.सातहजार धरौटी लिएर पुनः देह व्यापारमा नलाग्ने सर्तमा सामान्य तारिखमा रिहा गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक विपीन कर्माचार्यले बताए ।
Post by: tundikhel on January 24, 2010, 07:55:08 AM
२८ हजार तिर्न नसक्दा यौनकर्मी जेलमा
23/01/2010 16:08:00 रामकृष्ण बोहरा/नयाँ पत्रिका
बाग्लुङ, ९ माघ : यौनव्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेको एक जोडी २८ हजार जरिवाना तिर्न नसकेपछि जेल चलान भएको छ । जेल चलान हुने यौनव्यवसायीको जोडी पर्वतका विष्णु दर्जी र म्याग्दी बाबियाचौरका शान्तिकुमारी खत्री हुन् ।
बाग्लुङ बजारबाट पक्राउ परेका पाँच जोडीमध्ये चार जोडी भने धरौटी राखी तारेखमा रिहा भएका छन् । उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दाअन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २८ हजार धरौटीसहित तारेखमा रिहा गरेको हो ।
रिहा हुने अवैध यौनजोडीमा बाग्लुङ दमेक- ९ का मीनबहादुर पुन र म्याग्दी सिंगा- ४ का लक्ष्मी घर्ती, बाग्लुङ नगरपालिका- ३ का कर्णबहादुर थापा र पर्वत बनौं- ४ का टकमाया पुन, बाग्लुङ राङखानीका डोलराज शर्मा र बाग्लुङ अमरभूमिका शर्मिला सापकोटा, पर्वत पाङका श्याम अर्याल र बाग्लुङ तित्याङका लक्ष्मी खड्का छन् ।
अवैध यौनकार्यमा संलग्न रहेर सार्वजनिक अपराधको मुद्दा खेपेका अभियुक्तलाई यति धेरै जरिवाना लिएर धरौटीमा रिहा गरिएको बाग्लुङमा पहिलो घटना हो । यसअघि प्रहरीले यौनव्यवसायीलाई समाते पनि कानुन नभएको भन्दै केही दिनमै छाड्दै आएको थियो ।
यी जोडीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङले गत १ माघमा अवैध यौनकार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सदरमुकाम बाग्लुङ बजारका 'लेखानी', 'बाजे', 'न्यू दाह्रीवाला', 'माउन्टेन भ्यू' र 'मितेरी' होटलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
'व्यावसायिक रूपमा अवैध यौनव्यवसाय सञ्चालन गर्ने अझै छन्,' प्रहरी नायव उपरीक्षक विकासराज खनालले भने, 'अवैध यौनव्यवसाय सञ्चालन गर्ने होटलमा निगरानी बढाइएको छ ।' खनालका अनुसार प्रहरीले सदरमुकाम बाग्लुङ बजारमा अवैध यौनव्यवसाय सञ्चालन गर्ने होटलको सूची नै तयार पारेको छ ।
Post by: tundikhel on February 26, 2010, 09:26:17 PM
बनेपाका गेस्टहाउसमा आपत्तिजनक अवस्थामा २६ जोडी पक्राउ
बिहिवार, 25 फेब्रुअरी 2010 11:03 नागरिक
बनेपा, फागुन १३ (नागरिक)- प्रहरीले विभिन्न बनेपाका गेष्ट हाउसमा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएका २६ र जुवातास खेलिरहेका ४३ जनालाई पक्राउ गरेको बताएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको विशेष टोलीले आपत्तिजनक अवस्थामा रहेका पाँच जोडीलाई बनेपाको चण्डिका, चण्डेश्वरी, भ्याली र वेलकम गेष्टहाउसबाट पक्राउ गरेको छ।
यसैगरी बुधबार साँझ शिव गेष्ट हाउस धनेश्वरबाट ७ युवती र फूलबारी रेष्टुरेण्ट आईस किलोबाट ३ युवा र ६ युवतीलाई पक्राउ गरको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा १८ देखि २६ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्।
विगतदेखि नै बनेपाका केही गेष्ट हाउसहरुमा खुल्लेआम यौनजन्य क्रियाकलाप भइरहेको स्थानीयबासीले गुनासो गर्दै आए पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको थिएन।
'एकहप्ता लामो रेकी (निगरानी) पछि कारवाही गर्न सकिएको हो' प्रहरी निरीक्षक रुपेश खड्काले जानकारी दिए।
केही दिन पहिलेमात्र सरुवा भई बनेपा आएका उनले उपत्यकानजिकैको शहर बनेपामा सामाजिक अपराध बढ्दो क्रममा रहेको गुनासो आएकाले कारवाही तीव्र बनाएको समेत बताए।
प्रहरीले बुधबारसम्ममा बनेपाका चार छुट्टाछुट्टै स्थानबाट जुवा-तास खेलिरहेका समुहलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरु बनेपा नपा-४ नयाँबस्तीबाट ८ जना, बनेपा-१० तरकारीबाजारबाट १४ जना, महेन्द्रज्योतीबाट ९ जना, बनेपा-१० गोदामचोकबाट १२ जना छन्। प्रहरीले उनीहरुलाई जुवातास खेलिरहेकै अवस्थामा नगदसहित पक्राउ गरेको छ।
अब आइन्दा यस्ता क्रियाकलाप नदोहोर्‍याउने शर्तमा पक्राउ परेकाहरुलाई छाड्ने प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताए।
Post by: tundikhel on March 06, 2010, 12:24:29 AM
अबैध यौन क्रियाकलापमा संलग्न पक्राउ
बिहिवार, 04 मार्च 2010 18:39 नागरिक
छविलाल तिवारी, पर्वत, फागुन २० - प्रहरीले पर्वत सदरमुकामको सन्तोष होटलबाट यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा एक महिला र दुई पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीको गस्ती टोलीले कास्कीका २३ बर्षिय श्यामबहादुर विक, १७ बर्षिय विनोद आले र पर्वत आर्थर बस्ने महिलालाई पक्राउ गरेको हो। ।
पक्राउ परेका तीनैजनालाई प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिराज वाग्लेले बताए।
अवैध यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि नै दुईजना पक्राउ परिसकेका छन।
Post by: tundikhel on March 08, 2010, 02:15:04 AM
क्याम्पसमा यौन क्रियाकलाप मौलाएको अभिव्यक्तिविरुद्ध पढाइ ठप्प
कास्की, फाल्गुन २३ - पोखरा नर्सिङ क्याम्पसकी पूर्व प्रमुख लालकुमारी गुरुङले आफै पढाउने क्याम्पसमा वेश्यावृति मौलाएको अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा आईतबार देखि पढाई ठप्प पारी छात्रा तथा शिक्षकहरु विरोधमा उर्तिएका छन् ।
पूर्व प्रमुख गुरुङले एक दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेर राजीनामा नदिए सम्म पढाइ बन्द गरी प्रशासन अघि नाराबाजी गरेका छन् । पत्रिकामा उनले चौकीदारहरु क्याम्पस हातभित्र मदिरापन गरेर बस्ने र वेश्यावृत्ति समेत मौलाएको अभिव्यक्ति दिएपछि क्याम्पसका छात्रा, शिक्षक तथा कर्मचारी आक्रोसित भएका हुन । उनीहरुले यस्तो कपोल कल्पित अभिव्यक्तिले आफुहरुलाई लज्जाको स्थितिमा पुराएको भन्दै आक्रोस पोखे ।
बिहानैदेखि कलेज र आफनो चरित्रहत्या भएको भन्दै छात्राहरु भोकभोकै नाराबाजी गदै दोषीलाई कार्वाहीको माग गरिरहेका छन् । 'हाम्रो कलेजको बेइज्जत भएको छ, यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई कार्वाही नभए सम्म हामी पढाई संचालन हुन दिने छैनौ,' स्ववियु सचिव पुष्पा शर्माले भनिन,' 'कानुनी कार्वाहीका लागी हामी अदालतको ढोका सम्म पुग्ने छौ ।'
क्याम्पसकै बदनाम भएको भन्दै छात्रा, शिक्षक तथा कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिने पुर्व क्याम्पस प्रमुखको राजीनामा र कार्वाहीको माग गदै आन्दोलित बनेका छन् । तर पुर्व क्याम्पस प्रमुख गुरुङले भने आफुले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएकेा दावी गरेकी छिन् । 'मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै छैन आफनो शैक्षिक केन्द्रलाई बदनाम कसरी गर्न सक्छु गुरुङले संचारकर्मीमाझ भनिन् ।
तर क्याम्पसका छात्रा तथा शिक्षकले भने उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकोले उनको राजीनामा माग गरेका छन् । 'यो घटनाले हामीलाई लज्जित बनाएको छ, विद्यार्थीको आँखामा आँसु छ, क्याम्पस प्रमुख भगवति केसीले भनिन,' 'शैक्षिक केन्द्रलाई वेश्यावृत्ति मौलायो भन्नु दुखद कुरा हो ।' यस्तो अभिव्यक्तिको विरुद्ध शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी युनियनले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ती प्रकाशित गरी विरोध जनाएका छन् । '
तीन वर्ष देखि क्याम्पसको चौकीदारमा कार्यरत छु अहिले अहिले सम्म रक्सी खाएको छैन कृष्ण तिमिल्सनाले भनिन, रक्सी खाएर क्याम्पस हातमा मातिएको भनेर हामीलाई दोष लगाएकोमा आपत्ति छ ।' क्याम्पसमा वेश्यावृत्ति मौलाएको अभिव्यक्ति दिएकी पुर्व प्रमुख गुरुङ अहिले सह-प्राध्यापकको रुपमा सोही कलेजमा कार्यरत छिन् । पाँच वर्ष अघि विद्यार्थीको दबाबमा प्रंमुखबाट हटाइएकी गुरुङले त्यही आक्रोसमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक छात्राले भनिन ।
समाचार संक्लनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि क्याम्पसका केही छात्रा र शिक्षकले माथि दुर्व्यवहार गरेका छन् । उनीहरुले पत्रकार मुर्दावादको नारा लगाउदै समाचार संकलनमा अवरोध गरेका थिए ।
केहीले पत्रकार माथि हातपातको समेत प्रयास गरेका थिए । तस्बिर लिएका पत्रकारको क्यामेरा खोसी तस्विर हटाउन अपशब्द समेत प्रयोग गरे । पत्रकारमा आफूहरुको तस्बिर छापिए जे पनि गर्ने धम्की समेत उनिहरुले दिएका थिए ।
Post by: tundikhel on March 08, 2010, 12:19:54 PM
यौन क्रियाकलापमा संलग्न पाँच युवती पक्राउ
(२०६६ फाल्गुन २३, आइतवार)
यौन क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै स्थानीय भेटवाल होटलबाट पाँच युवतीलाई शनिबार साँझ झापाको अनारमनीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ युवती १५ देखि २२ वर्ष उमेरका रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीले जनाएको छ । प्रहरीले सुरु गरेको विकृति नियन्त्रण अभियानका क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो । इप्रका, अनारमनीमा राखिएका पाँचैजनालाई अभिभावक बोलाएर जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
Post by: tundikhel on April 08, 2010, 01:09:30 PM
यौनधन्दा सञ्चालिकासहित चार पक्राउ
उदयपुर/ यौनधन्दा सञ्चालन गर्दै आएकी एक होटल सञ्चालिकासहित चारजनालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ　। उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका-२ लोकतान्त्रिक चोकस्थित सजिना होटलकी सञ्चालिका सजिना चाम्लिङ राई, यौनक्रियाकलापमा संलग्न रामपुर ठोक्सिला-३ का डम्बरबहादुर खड्का, एक १४ वषर्ीया बालिका र अर्की एक युवती पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजकुमार यादवले बताए　।
स्थानीयबासीबाट प्राप्त 'होटलमा यौनक्रियाकलाप भइरहेको' जानकारीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो　। पक्राउ परेका खड्काले होटलमा यौनक्रियाकलापमा संलग्न भएको स्वीकार गरेका छन्　। प्रहरीले उनीहरूलाई मेडिकल टेस्ट गराई दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ　। होटल सञ्चालिका राईसहित चारैजनालाई अहिले प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ　।
Post by: tundikhel on April 08, 2010, 10:49:36 PM
आपत्तिजनक अवस्थामा जोडी समातिए
बुधवार, 07 अप्रेल 2010 19:10 नागरिक
महेश्वर चामलिङ, उदयपुर, चैत २५- गाईघाटस्थित एक होटलमा बेश्यावृतिमा संलग्न भएको अभियोगमा बुधबार चार जना पक्राउ परेका छन्।
ठोक्सिला-२ का डम्बरबहादुर खड्का (३७) र त्रियुगा नगरपालिका-७ की २७ वर्षीय एक महिलालाई सजिना होटलमा आपत्तिजनक अवस्थामा पक्राउ गरिएको असई कर्णबहादुर बस्नेतले बताए।
उनीहरुसँगै होटल सञ्चालिका सजिना राई र होटलकै एक सहयोगी युवतीलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बिहान साढे ११ बजे एक बजारबासीले दिएको खबरका आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा उक्त जोडीलाई रङ्गेहात फेला पारेर पक्राउ गरिएको बस्नेतले बताए। केही महिनायता सो होटलमा यौन व्यवसाय हुँदै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो।
बस्नेतका अनुसार साता दिनअघि एक सैनिक अधिकृत एक महिलासहित यौनकार्यमा संलग्न भएको थाहा पाएर छापा मारिएको भए पनि पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको थियो। उनले कोठाबाहिर सिपाही राखेका कारण प्रहरी पुगेको थाहा पाएर घरको छतबाटै हाम फालेर भागेको प्रहरी सहायक निरीक्षक बस्नेतले बताए।
Post by: tundikhel on April 08, 2010, 10:50:16 PM
क्याबिनका किशोरी अनैतिक काममा
बुधवार, 07 अप्रेल 2010 12:42 नागरिक
सुनसरी (इनरुवा), चैत २५- राजमार्ग आसपासका विभिन्न क्याबिन रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने किशोरीहरूको पुनःस्थापनका लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
सुनसरी-मोरङका राजमार्गआसपास खुलेका क्याबिन रेष्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने युवतीहरू अनैतिक काममा लाग्ने गरेको खुल्न आएपछि उनीहरूको पुनःस्थापनका लागि उप्का नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्लान नेपालको करिब रु. दुई करोडको आर्थिक सहयोगमा सो परियोजना एक वर्ष अगाडि सुरु गरिएको थियो।
सुनसरी-मोरङका राजमार्ग क्षेत्रमा यस्ता रेष्टुरेन्टको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको र त्यहाँ कार्यरत किशोरीहरू अझै पनि यौनजन्य क्रियाकलापमा खुलेआम संलग्न हुने गरेकोले उनीहरूका लागि उप्काले रोजगारमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो।
क्याबिनमा काम गर्ने महिलाका लागि चलाइएको चार महिने बुटिक तालिममा ९५ प्रतिशत महिला क्याबिनबाट नभई अन्यत्रबाट सहभागी गराई तालिम गराएको औपचारिकता पूरा गरिएको पाइनुले यस्ता यौनजन्य क्रियाकलापमा सहभागी किशोरीहरूको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको जनाइएको छ।
सुनसरी-मोरङमा रहेका क्याबिनहरूमा करिब तीन हजारको सङ्ख्यामा यस्ता किशोरीहरू जोखिम मोलेर काममा लगाइने गरेको पाइएको छ।
महिलामाथि हुने अनैतिक व्यवहारका विषयलाई लिएर सुनसरीको धरान, इटहरी, झापाको दमकलगायतका ठाउँमा क्रियाशील महिलावादी सङ्घसंस्थाहरूले यस्ता रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न पटकपटक आन्दोलन गरेको भए पनि प्रहरी प्रशासनको कमजोरीका कारण यो व्यवसाय पूर्वी नेपालमा मौलाउँदै गएको छ।
दिन दुईगुणा रात चौगुणा आम्दानी हुने क्याबिन व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र विभिन्न कारणले सामाजिक अपहेलनाको शिकार भई कामको खोजीमा किशोरीहरू सहरबजारतिर आउनुले उनीहरू अनैतिक काममा फस्ने गरेको पाइएको छ। रासस
Post by: tundikhel on May 01, 2010, 08:45:55 AM
कारमै आउँछन् ग्राहक खोज्दै युवती
काठमाडौं। ठमेलबजार अचेल यौनबजारका रूपमा परिचित छ। ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित मसाज सेन्टर, डान्सबार तथा रेष्टुराँ यौनव्यापारकै लागि सञ्चालन गरिएका छन्।
ती मसाज सेन्टरमा यौनव्यवसायमा संलग्न गराई युवतीमाथि व्यवसायीले शोषण गरेको कथा त नौलो होइन, शारीरिक, मानसिक तथा श्रम शोषणको सिकार भएका ती अवोध युवती अचेल म्यानपावर कम्पनीबाट पनि ठगिन थालेको रहस्य खुल्न थालको छ। मसाज सेन्टरमा काम गर्न बाध्य पारिएका युवतीको उद्धार कार्यमा संलग्न केही संस्थाको अनुगमनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने प्रलोभन दिई ती युवतीले सहकारी वा यस्तै कुनै निकायमा संकलन गरिएको रूपैया लिई बेपत्ता हुने गरेको घटना भेटिएको ती संस्थाका प्रतितिनिधिले साँघुलाई जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा यौनव्यवसायमा संलग्न युवती सहकारीमा आम्दानी रकम जम्मा गर्नथालेका छन्। यौनव्यवसायमा संलग्न गराइएका केही युवती घर फर्किन, अन्य व्यवसाय गर्न वा वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक रहेकाले यसको फाइदा एजेन्टमार्फत म्यानपावर कम्पनीले लिने गरेको विगत सात वर्षदेखि मसाज सेन्टरमा कार्यरत युवतीको उद्धार कार्यमा संलग्न चेन्ज नेपालका प्रतिनिधिले साँघुलाई बताए। आफ्नो सुरक्षाको कारण भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले मासिक १५ सय देखि २ हजार रूपैयाँ कमाउने युवती बढी ठगिने गरेको बताए। मसाज सेन्टरमा कार्यरत युवतीको उद्धारका लागि भन्दै चेन्ज नेपाल, स्टेप नेपाल तथा रक्षा नेपाल नामका संस्था क्रियाशील छन्।
ती संस्थाको अध्ययनमा भेटिएको तथ्यअनुसार मसाज सेन्टरका युवतीको मूल्यको निर्धारण उमेर, अनुभव र सौन्दर्यमा मापन गर्ने गरिन्छ। ठमेल एरियामा सञ्चालित मसाज सेन्टरमा एकपटक यौनसम्पर्क गरेबापत ग्राहकले ४ सयदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ। ठमेल एरियामा मात्रै नगरपालिकाको स्वीकृति लिई करिब १ सय ५० वटा मसाज सेन्टर सञ्चालनमा रहेका भए पनि अनौपचारिक रूपमा २ सय ५० भन्दा बढी रहेका छन्। हरेक मसाज सेन्टरमा सरदर छजना युवती कार्यरत रहेको पनि चेन्ज नेपालका पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीका अनुसार ती मसाज सेन्टरमा १२ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका महिलालाई यौनव्यवसायमा संलग्न गराइएको छ। सुरुको अवधि अर्थात् तालिम अवधिमा व्यवसायीले युवतीमाथि थ्रुपै लागनी गरी प्रभावमा पार्ने गरेकाले केही महिनाको अन्तरालमा सेक्स एडिक्ट भइसक्ने भएकाले युवतीहरू पेसाबाट बाहिर निस्कन नसकेको अनुभव पनि ती संस्थाका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन्।
खासगरी २५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीको माग अत्यधिक हुने गर्दछ भने व्यवसायीले पनि परीक्षणकालमा नक्कली गरगहना, मोबाइल, राम्रो खानेबस्ने व्यवस्था, जस्तो भन्यो त्यस्तै सेवासुविधा दिई युवतीलाई राख्ने गरेका छन्। त्यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाका अनुसार गेस्टहाउस अहिले नयाँ यौनस्थलका रूपमा विकास भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा अचेल ठमेल क्षेत्रमा साँझ सात बजेपछि सभ्य र सोझा युवायुवती हिंड्नै नसक्ने अवस्था छ। बाटैमा केटी चाहिएको सर भन्दै १२ देखि १५ वर्षका केटाहरू सोध्न आउने गरेका छन्। त्यसमा पनि ठमेलको सञ्चयकोष भवन आसपासमा यस्ता एजेन्टका रूपमा काम गर्ने युवाको उपस्थिति बाक्लो हुने गरेको छ। धेरै मसाज सेन्टर तथा गेस्ट हाउसले साइनबोर्डसमेत नराख्ने गरेकाले र ग्राहक ल्याएबापत् कमिसन पनि पाउने भएकाले पनि ती बालकहरू एजेन्टका रूपमा परिचालन गरिएको हुन्छ। मसाज सेन्टरका युवतीले दिनमा सरदर एक घन्टामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। ग्राहकको मागअनुसार बढी माग हुने युवतीले त त्यसभन्दा बढी नै सहभागी हुने गरेका छन्। केही संस्थाका अनुसार त्यसरी बढी समय यौन सम्पर्कमा संलग्न युवती एचआईभी एड्सको सबैभन्दा बढी खतराको सूचीमा पर्छन् नै, साथमा सेक्स एडिक्टसनले मानसिक अवस्था पनि कमजोर हुने गरेको छ।
कारमै आउँछन् युवती
धनाढ्य परिवारका महिला प्राइभेट कारमा ग्राहक खोज्दै ठमेलका मसाज सेन्टर र गेस्ट हाउसमा आउने गरेको भेटिएको चेन्ज नेपालले जनाएको छ। काठमाडौंका उद्यमीका श्रीमती, लाहुरे वा श्रीमान देशबाहिर भएका महिला कन्ट्याक्टमा मसाज सेन्टरमा आउने गरेका छन्। त्यसरी आउने महिलालाई भने केही उद्यमी वा पैसावाला ग्राहकले केही दिनका लागि उपत्यकाबाहिर वा कुनै छुट्टै होटलमा लैजाने पनि व्यवस्था मसाज सेन्टरले मिलाएको हुन्छ। त्यसो त, मसाज सेन्टरले नियमित ग्राहकलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने गरेका पनि छन्।
काँठ क्षेत्रकै बढी
मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवती काठमाडौं क्षेत्रआसपास जिल्लाका भेटिएका छन्। त्यसमा पनि जनजाति युवती गरिबीकी कारण मसाज सेन्टरमा आउने गरेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपलाञ्चोक, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट जिल्लाका युवती ती क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।
आफ्नै सन्तानलाई ल्याइदिन्छन्
धेरै युवती गरिबीका कारण कामको खोजीमा काठमाडौंमा आउने क्रममा यस्तो व्यवसायमा संलग्न हुने गरको भनिए पनि कतिपयलाई भने आफ्नै बाबु वा श्रीमानले मसाज सेन्टरमा युवतीलाई ल्याइदिने गरेको पाइएको चेन्ज नेपालले जानकारी दिएको छ। चेन्ज नेपालका अनुसार, गरिबीका कारण पैसा कमाउनका लागि बुबा र श्रीमान्ले ल्याएर छोडेका उदाहरण थ्रपै छन्।
विदुरको फिजिक्स बुस्टर
उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट ०६५/६६ मा लिइएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा आजसम्मकै ऐेतिहासिक रेकर्ड कायम गरी बोर्ड टप हुनुभएका र हाल महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विलक्षण प्रतिभाका धनी विदुरप्रसाद पण्डितद्वारा लिखित 'फिजिक्स बुस्टर' नामक पुस्तक बजारमा आएको छ। एमबीबीएस र इन्जिनियरिङका लागि 'हट केक' मानिने सो पुस्तक कक्षा ११ र १२ का विज्ञानतर्फका विद्यार्थीका लागि पनि अति उपयोगी देखिन्छ। एकजना भौतिकशास्त्रका प्राध्यापकका अनुसार प्रत्येक विज्ञानका विद्यार्थीले यो पुस्तक पढेपछि फिजिक्स गाह्रो विषय हो भन्ने भानलाई मेटाएर सजिलो विषय रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ। किनकि यसमा विभिन्न किसिमका सिप विकास गर्ने ट्याक्टिस, न्युमेरिकल हल गर्ने सर्टकट तरिकाजस्ता कुराहरू समावेश छन्। विदेशी गुणस्तरको सो पुस्तकबाट धेरै विद्यार्थीहरू लाभाविन्त हुने कुरा यस विषयसँग संलग्न प्राध्यापकको भनाइ छ। विदुर प्रकाशनद्वारा प्रकाशित १०३२ पेजको सो पुस्तक मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूले समेत पढ्न सकून् भनेर लागतमूल्य मात्र पाँच सय ९५ रूपैयाँ राखिएको लेखक बताउँछन्। ७ खण्ड र ५६ अध्यायमा तयार गरिएको पुस्तकमा प्रत्येक अध्यायमा सैद्धान्तिक अवधारणा, समस्या समाधान हल गर्ने विधि, वैकल्पिक उपायहरू चित्रद्वारा प्रस्ट पार्ने तरिका आदि कुराहरू समावेश भएको पाइन्छ। परीक्षामा पर्नसक्ने सम्भाव्य हजारौं प्रश्नहरू समावेश हुनुका साथै विद्यार्थीलाई अभ्यासका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रश्नहरू राखिएको छ। हरेक अध्यायकोे अन्त्यमा समस्या हल गर्ने तरिका उल्लेख छ। टिचिङ, शिक्ष्ँा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धरान, पुल्चोक र भारतीय दूतावासबाट लिइने डाक्टर र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाका लागि तयार गरिएको यो पुस्तक नमुनाको रूपमा नै रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। बीएस्सी, प्लस टु र आईएस्सीको कोर्सलाई एउटै किताबमा समेटेर विश्लेषणात्मक, अनुसन्धानात्मक एवम् मौलिकपन र सरल भाषामा प्रस्तुत गर्न सफल लेखकको सबल पक्ष देखिन्छ।
Post by: tundikhel on May 16, 2010, 10:49:24 AM
होटल र रेस्टुरेन्टमा धमाधम छापा
यौन-व्यवसाय सञ्चालन गरेको आशंकामा राजधानीका घर, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रहरीले धमाधम छापा मार्न थालेको छ । प्रहरीले बुधबार राजधानीका विभिन्न घर तथा होटल र रेस्टुरेन्टमा छापा मारेर सात यौनकर्मी महिलासहित नौजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले कोटेश्वरकी सीता थापासहित सात यौनकर्मी महिलालाई पक्राउ गरेको हो । थापाले कोटेश्वरस्थित आफ्नै घरमा दुई वर्षदेखि यौन-व्यवसाय सञ्चालन गरेको प्रहरीको दाबी छ । विशेष सुराकीको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले जनाएको छ ।
यसैगरी जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाएको भन्दै ठमेलस्थित जावेल गेस्टहाउसका मेनेजर दिनेश लामालाई प्रहरीले मंगलबार राति पक्राउ गरेको छ । लामाले १४ र १५ वर्षका तीन किशोरीलाई धम्क्याएर यौन-क्रियाकलापमा संलग्न गराएको प्रहरीको आरोप छ ।
पीडित किशोरीको जाहेरीको आधारमा लामालाई पक्राउ गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार गेस्टहाउसका सञ्चालक प्रकाश क्षेत्री भने फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको छ । जबर्जस्ती अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न गराउने ठमेलस्थित श्रीगणेश गेस्टहाउसका सञ्चालक प्रेमबहादुर खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई पनि पीडित महिलाले दिएको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जबर्जस्ती अश्लील नृत्य गर्न लगाउने ठमेलस्थित क्वालिटी डान्स बारका सञ्चालक दीपक खड्का, धनबहादुर खड्का र राम भट्टराईलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । उनीहरूविरुद्ध रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने पाँचजना महिलाले उजुरी दिएको प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले जनाएको छ ।
Post by: tundikhel on May 23, 2010, 04:00:50 AM
२०६७ - जेष्ठ - ४
दक्षिण अप्रिmका यतिबेला निकै चटारोमा छ, विश्वकपको आयोजनालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेको दक्षिण अप्रिmकालाइ यौनकर्मीहरूले अर्काे चिन्ता थपोरिदिएका छन् ।
दक्षिण अप्रिmकाले विश्वकपको सपमयमा देहव्यापारलाइ मान्यता दिने सोच बनाएको हल्ला चल्यो । जर्मनमा भएको २००६ को विश्वकपमा पनि देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने यस्तै हल्ला चलेको थियो । देशमा एचआईभी/एड्स फैलिएको छ, त्यसैले दक्षिण अप्रिmकाका सर्न्दर्भमा भने अवस्था निकै डरलाग्दो छ । सरकार यतिबेला एचआईभी/एड्स फैलिएला कि भनेर निकै चिन्तामा छ ।
त्यस्तै, हजारौ यौनव्यवसायी विश्वकपको दौरनमा दक्षिण अप्रिmका भित्रिनेमा कर्मचारीहरूले सावधानी गराइसकेका छन् । त्यसैगरी बालिकाहरूसमेत यौन उद्यमीको ध्यानमा आउसक्ने चुनौती थपिएको छ । विश्वकप जति नजिकिँदै छ, त्यति नै उसमाथि यौनकर्मीहरूको चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ ।
विश्वकप आयोजकहरूले भनेका छन् कि ४० हजार महिना यौन व्यवसायमा संलग्न भएका महिलाहरूको बाढी दक्षिण अप्रिmकामा हुनेछ । १६ प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण अप्रिmकामा एचआईभी संक्रमित रहेको विश्वास गरिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय बालबालिकासमेत यौन व्यवसायमा लाग्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ किनकि चार हप्तासम्म चल्ने विश्वकपको दौरनमा दक्षिण अप|mीकाका विद्यालयहरू विदा भएका छन् । यसले कतै एचआईभी संक्रमणको संख्यामा अझ वृद्धि हुने त होइन - चिन्ता बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रको बैठकमा समेत यो समस्याको विषयमा चर्चा भएको थियो । दक्षिण अप्रिmकको लागू औषधिसम्बन्धी कार्य गर्ने विभागका उपाध्यक्ष डिभिस बेइभरले सरकारले यौन व्यवसायीको बाढी लाग्न सक्ने विषयलाइ लिएर चिन्तित रहेको बताए । उनले भने, 'पैसाका लागि यौन व्यवसायी यतिबेला दक्षिण अप्रिmकामा जम्मा हुन सक्नेछन् ।' यौन व्यवसायी गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्न नपाउनु भन्ने हेतुले उनीहरूले बोर्डरमा कडा गर्ने बताएका छन् ।
विश्वबाटै यौनकर्मी महिलाहरू दक्षिण अप्रिmका प्रवेश गर्ने छन् अहिले । मुख्य त पर्ूर्वीय युरोपबाट महिलाको ज्यादा आगमन हुने अनुमान गरिएको छ । गरिब बालबालिकाहरू मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा यौन धन्दमा संलग्न रहेका यौन व्यवसायी र लागू औषधको कारोबार गर्नेहरूको फन्दामा पर्न सक्नेमा त्यहाको सरकारलाई चिन्ता छ । यस विषयमा कुनै शंका छैन कि उनीहरू यौनधन्दा सञ्चालन गर्नेहरूको आँखामा पर्छन्, भन्ने विषयमा । ग्रामीण भेगमा रहेको गरिब परिवारका बालबालिकालाई लालीपप देखाएर यौन व्यवासयमा लगाउन सक्छन् । अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूले ती बालबालिकालाई ठूला सहरहरूमा गएका खण्डमा राम्रो काम र पैसा हुने आश्वासन दिएर ललाई फकाई यौन धन्दमा फसाउन थालिसकेका पनि छन् । चार लाख ५० हजार फुटबल प्रेमीहरू दक्षिण अप्रिmकाको भ्रमणमा हुने भएकाले पनि यतिबेला यौन धन्दालाई मालामाल हुने अवसरका रूपमा यौनकर्मीहरूले लिएका छन् ।
असुरसित यौन सर्म्पर्क कतै नियन्त्रणभन्दा बाहिर त जाँदैन भन्ने विषयलले यतिबेला कर्मचारीहरूलाई अर्काे परलो थपेको छ । जसका कारण एचआईभी झनै डरलाग्दो तवरले फैलिन सक्छ । डिमान्ड बढेका कारण स्वास्स्थ प्रमुखहरूले पनि सरकारले देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरोस् भन्ने पक्षमा देखिएका हुन् । उनीहरूले कानुनी मान्यताको पक्षमा वकालत गर्नुका पछाडि अर्थ छ । कानुनी मान्यता दिएपछि यौनव्यवसायीहरू पर्दाबाट बाहिर आउँछन र उनीहरूलाइ निःशुल्क कन्डमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एक रिपोर्टलेसमेत बताएको छ ।
यौनकर्मीलाई शिक्षा र सहयोग गर्ने टिमका डाइरेक्टर इरिस हारपरले भने, 'यो मात्र अन्तिम र उपयुक्त फर्मुला हो । जसका कारण ग्राहक र यौनकर्मीहरू दुवैलाई सहयोगी हुन्छ ।' २००८ मा भएको एक र्सर्वेका अनुसार ५.२ मिलियन एड्सग्रस्त मानिसहरू दक्षिण अप्रिmकामा बसेका थिए । २००८ मै दर्ुइ लाख ५० हजार मानिसको एड्कै कारण मृत्यु भएको विश्वास गरिएको छ जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यहाँ सप्लाइ स्वतः हुन्छ नै ।' हारपारले सीएनएनमा भने, 'यौनकर्मीको निश्चित ग्राफ त छैन ।' तर, उनको संस्थाले केप टाउनमा मात्र तीन हजरा यौनकर्मी रहेको अनुमान गर्दछ । यौनधन्दा दक्षिण अप्रिmकामा कानुनविपरीत मानिन्छ । तर, केही समयअगाडि कानुनमा पर्ुनविचार गएकिो छ । हारपरलाई के विश्वास छ भने यौनकर्मीलाई छुट दिएको खण्डमा एचआईभी फैलिनबाट रोक्न ठूलो सहयोगी हुनसक्छ ।
Post by: tundikhel on May 27, 2010, 06:13:43 AM
मसाज र गेष्ट हाउसमा छापा मार्दा २७ युवा युवती पक्राउ
बुधवार, 26 में 2010 16:47 नागरिक
काठमाडौं, जेठ १२ (नागरिक) - राजधानीका ७ मसाज केन्द्र र गेष्ट हाउसमा छापा मारी प्रहरीले २७ महिला र पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेबाट यौनजन्य व्यवसाय गरेको आशंकामा ठमेल क्षेत्रमा मसाज केन्द्र र गेष्ट हाउसमा छापा मारिएको थियो। केही दिन यता यस्तो गतिविधिमा प्रहरीले निगरानी बढाउँदै आएको छ।
ठमेलमा प्रहरीले छापा मार्दा आपत्तिजनक अवस्थामा समेत युवा युवती फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। केही समय अघि प्रहरीले विभिन्न डिस्को र डान्स रेष्टुरेन्टमा छापा मारी यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेकालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
Post by: tundikhel on May 27, 2010, 06:14:15 AM
अनुचित कार्य गर्ने चार युवा थुनामा
बुधवार, 26 में 2010 14:29 नागरिक
भीमफेदी जेठ १२ - मकवानपुर जिल्ला अदालतले चुरीमाई गाविस वडा नं २ का चारजनालाई १७ वर्षीया युवतीलाई सामूहिकरुपमा अनुचित कार्य गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
अदालतका न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माको एकल इजलासले अभियुक्त राजु लामा, रामकुमार गोले लामा, हरि तामाङ र शम्भु लामालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
अभियुक्तहरूलाई हेटौडा नगरपालिका-१० स्थित स्थानीय एक होटलमा आश्रित एक १७ वर्षीया युवतीलाई गत वैशाख २८ गते सामूहिकरुपमा जबर्जस्ती अनुचित कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। - रासस
Post by: tundikhel on August 01, 2010, 12:52:28 PM
आइतवार, 01 अगष्ट 2010 12:04 नागरिक
दाङ (देउखुरी), साउन १६ - जिल्लामा यौनव्यवसाय मौलाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यहाँका प्रमुख बजार तुलसीपुर, घोराही, लमही, भालुवाङ, नारायणपुरलगायत स्थानका होटेलमा यौनव्यापार हुने गरेको जिल्लास्थित एक गैरसरकारी संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ।
सो संस्थाले जनाएअनुसार विशेष गरेर राजमार्गआसपासका होटेल तथा पहाडी गाउँ विकास समितिमा यौनव्यवसायी बढिरहेका छन्।
चार वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट (आइसिएच) युनिटी कार्यालयले जिल्लामा छसय ७६ जना यौनकर्मी रहेका जनाएको छ।
उक्त तथ्याङ्क संस्थाको सम्पर्कमा आएकाहरूको मात्र भएको उल्लेख गर्दै आइसिएच युनिटी कार्यालयकी प्रमुख रञ्जना चौधरीले 'यी त हाम्रो सम्पर्कमा आएका यौनव्यवसायी महिलाको मात्र तथ्याङ्क हो, जिल्लामा योभन्दा धेरै यौनव्यवसायी रहेका हाम्रो अनुमान छ' भनिन्।
विशेषगरी १५ देखि ४० वर्षसम्मका महिला यौनव्यवसायमा संलग्न रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले १८ वर्षमुनिकाहरू पेसामा एकदमै कम रहेका बताउनुभयो। त्यसैगरी सम्बन्धविच्छेद गरेका, श्रीमान् विदेश गएका र कर्मचारीका श्रीमतीसमेत यौनव्यवसायमा संलग्न छन्।
पहिले वादी समुदायका महिला यस व्यवसायमा बढी संलग्न रहेका भनिए पनि सबै समुदाय र वर्गका महिला यसमा संलग्न रहेका भन्दै श्रीमती चौधरीले सम्भ्रान्त परिवारका केही महिला मनोरञ्जनका लागि यौनव्यवसामा संलग्न भएको दाबी गरिन्।
यौनव्यवसायका लागि बजारका साना होटेल प्रमुख केन्द्र भए पनि यहाँका प्रतिष्ठित होटेलमा समेत यस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको ठोकुवा गर्दै उनले 'केही होटेलमा कामदारका रूपमा युवती राखेर उनीहरूलाई यौनव्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेको पाइएको छ' भनिन्।
जिल्लामा यौन व्यवसाय मौलाएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै दाङका प्रहरीप्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले 'आपसी सहमतिमा हुने कुरालाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छजस्तो लाग्दैन' भने - रासस
Post by: tundikhel on August 05, 2010, 02:22:38 PM
२० जोडी पक्राउ, १६ बिरुद्ध मुद्दा
नेपालगन्ज , श्रावण १८ - प्रहरीले बिभिन्न होटलहरुमा छापा मारेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न २० जोडीलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक खेमबहादुर केसीका अनुसार, बिभिन्न चरणको अनुसन्धान पछि केहिलाई सम्झाएर अभिभावकको जिम्मा लगाईएको छ । १६ जनालाई सार्बजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाईएको छ । 'ब्यवसायिक रुपमा संलग्न र पटक पटक पक्राउ परेकाहरु माथि कानुनी कारवाही सुरु गरिएको छ ।' निरीक्षक केसीले भने ।
परिचयपत्र थप नराख्दा अपराधी सजिलै उम्कने गरेको प्रहरीको भनाई छ । व्यवसायीहरुले भने परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएपनि तत्काल लागू गर्न नसकिने दावी गरेका छन् । होटल अर्गनाईजेशन बाँकेका अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुन नसक्ने बताए । 'हामीहरु पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न चाहान्छौं तर केही समय लाग्छ'-उनले भने ।
Post by: tundikhel on August 07, 2010, 10:01:46 PM
एकै होटलबाट तीन जोडी समातिए
शुक्रवार, 06 अगष्ट 2010 12:56 नागरिक
रमेशकुमार पौडेल, चितवन, साउन २१ - श्रीमान श्रीमती नभए पनि होटलमा दिउँसै यौन कार्य गर्ने तीन जोडीलाई वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढले पक्राउ गरेको छ।
शम्भु अर्याल संचालक रहेको नारायणगढ पुलचोकको पीस गेष्ट हाउसबाट उनीहरु बिहीबार दिउँसो सावा दुई बजे पक्राउ परेका हुन्।
सो होटलमा यस्ता कार्य पटक पटक हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको र बिहीबार पनि त्यस्तो काम हुँदै छ भन्ने सूचना आएको आधारमा होटलमा छापा मारेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकालाई सामुदायिक सेवा केन्द्र नारायणगढको पहलमा बिहीबार नै अभिभावकको जिम्मा लगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
Post by: tundikhel on August 10, 2010, 01:06:18 PM
होटलबाट यौन व्यवसायी पक्राउ
विराटनगर, २४ साउन
विराटनगरका होटल तथा रेष्टुरेन्टमा छापामारी प्रहरीले यौन धन्दामा संलग्न भएको आशंकामा दसजनालाई पक्राउ गरेको छ　। यौन धन्दा फस्टाइरहेको चर्चा चलिरहेको वेला विराटनगरका दुई होटलबाट चार भारतीयसहित १० लाई　आइतबार राति पक्राउ गरिएको हो　।
पक्राउ पर्नेमा पाँच पुरुष र पाँच महिला छन्　। स्थानीय शेरे पञ्जाव र यती होटलबाट उनीहरू　पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ　। यतीबाट पक्राउ पर्नेमा भारत सुपौलका ३० वर्षीय सौरभकुमार झा, उदयपुर त्रियुगा नगरपालिकाका २८ वर्षीय भीष्म चौधरी, भारत पुणिर्याका २५ वर्षीय मो. इफरान रहेका छन्　। त्यस्तै, विराटनगरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायीसहित भारत अररियाका २९ वर्षीय मो. बक्लु पनि स्थानीय शेरे पञ्जाव होटलबाट पक्राउ परेका छन्　।　प्रहरीले ट्राभल एजेन्टको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन　।
प्रहरीले विराटनगर उपमहानगरपालिका-६ की श्रेष्ठ थरकी ३८ वर्षीया, विराटनगर-१५ की कार्की थरकी २४ वर्षीया, भारत सुवास चौककी सिंह थरकी २४ वर्षीया, विराटनगर-२ तीनपैनीकी केसी थरकी २८ वर्षीया र मधेसा-८ सुनसरीकी चौधरी थरकी २० वर्षीया गरी पाँच युवतीलाई पनि पक्राउ गरेको छ　। पक्राउ पर्ने युवतीमा तीन यती र दुई शेरे पन्जाव होटलबाट रहेका छन्　। उनीहरूलाई सुराकीका आधारमा नगर प्रहरीका इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो　।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले उनीहरूलाई मानव बेचविखन मुद्दाअन्तर्गत कारबाही चलाइने जानकारी दिए　। एसपी थापाका अनुसार उनीहरूलाई सोमबारै म्याद थप गरिनेछ　।
'विराटनगरका अधिकांश होटलमा दिउँसै यौनजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको हो,' थापाले भने, 'निमिट्यान्नै पार्न त सकिँदैन, तर　अवश्य नियन्त्रणमा ल्याउनेछौँ　।'
Post by: tundikhel on August 18, 2010, 04:17:12 AM
सात यौनजोडीसहित होटल सञ्चालक पक्राउ
17/08/2010 07:49:00 विष्णु घिमिरे
बुटवल, ३१ साउन
बुटवलका विभिन्न होटेलबाट यौनकार्य गरिरहेको अवस्थामा सात जोडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ　। प्रहरीले होटल सञ्चालक दुई जनालाई समेत पक्राउ गरेको छ　।
प्रहरीले आइतबार पाँच र सोमबार दुई यौनजोडीलाई पक्राउ गरेको हो　। पक्राउ परेकामा यौनजोडीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन　। पक्राउ परेका पुरुष १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो　। स्रोतका अनुसार, ती यौनजोडीमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसमेत रहेका छन्　। उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ　।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीका अनुसार सोमबार दिउँसो बुटवलको चौराहस्थित सागर होटलबाट दुई यौनजोडी पक्राउ परेका हुन्　। उनका अनुसार, आइतबार बुटवल नगरपालिका-८ नयाँ बसपार्कनजिकैको कालिका होटल एन्ड लजबाट तीन र इँटाभट्टीमा सञ्चालित नमुना होटल एन्ड लजबाट दुई यौनजोडीलाई पक्राउ गरेको थियो　।
होटलमा यौनधन्दा सञ्चालन गरेको र कम उमेरका युवतीलाई जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाएको आरोपमा प्रहरीले कालिका होटलकी सञ्चालिका अर्घाखाँची भगवती गाविसकी ललिता पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ　। नमुना होटल एन्ड लजका सञ्चालक दम्पती डोरनाथ र हिमला गिरीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ　। डोरनाथले कामदारका रूपमा राखिएका किशोरीलाई जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाएको प्रहरीको दाबी छ　। दुवै होटलका सञ्चालकले होटलमा यौनधन्दा सञ्चालन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्कीले बताए　।
प्रहरीले केही दिनअघि बुटवलकै सांगि्रला होटलका सञ्चालक डिबी कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ　। कार्कीले जबर्जस्ती यौनधन्दामा लगाएको उजुरी पीडित युवतीले दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो　। पक्राउ परेका होटल सञ्चालकलाई मानव ओसार-पसार तथा बेचबिखनको अभियोगमा मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ　।
Post by: tundikhel on August 18, 2010, 12:51:52 PM
18/08/2010 04:14:00 Naya Patrika
यौन व्यापार केन्द्रका रुपमा चर्चित भइरहेको बुटवलमा प्रहरीले पक्राउ गरेका केही यौनजोडीका कथा चाखलाग्दा छन् । विदेशमा रहेका श्रीमान्ले पठाएको पैसा पुर्‍याउन आएका श्रीमान्कै साथीसँग सल्किएकी महिला हुन् या घरमा साथीको दिदीको बिहेमा जान्छु भनेर यौन व्यापार गर्न बुटवल जाने किशोरी, यी सबै उदाहरणले एउटै कुरा संकेत गरेका छन्- यौन व्यापार र खुला यौन क्रियाकलाप केन्द्र बनिरहेको छ बुटवल ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक दानबहादुर कार्की
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवल
१. पोखराबाट एउटी युवती बुटवलमा साथीको दिदीको विवाहमा जान्छु भनेर घरबाट हिँडिछिन् । बुटवल आउने क्रममा उनले त्यही पोखराबाट अर्की साथीलाई समेत बुटवल जाउ"m भनिछिन् । तर, उनले बुटवल जानुका कारण खोजिछिन् । 'केटा भेट्न जाने हो हिँड्' भनिछिन्, तर तिनले आप\_mनो त केटासाथी बुटवलमा नभएको बताएपछि 'हिँड् केही फरक पर्दैन, उतै मिलिहाल्छ' भन्दै आफनै स्कुटरमा राखेर ल्याइछिन् । बुटवलमा भेट्न आउने केटासाथी भनेको अस्ट्रेलिया बसेर आएको गाँठवाला रहेछ । पोखराबाट आएका ती दुवै होटेलमा बसेछन । केटासाथी पनि आएछ । तर, सँगै आएकी साथीलाई अर्को केटासाथी भने तत्काल मिलेनछ । त्यसपछि ती युवतीले साथीलाई पनि अस्ट्रेलिया बसेर आएको मानिससँग धन्दामा लगाइछिन् । प्रहरी गस्तीले समातेर ल्यायो । अनुसन्धानपछि यो तथ्य खुल्यो । तर, घटना बताएर ती युवतीको आमालाई फोन गर्दा उनले भनिन्, 'ए पठाइदिनुहोस् न त । हामी त आउन भ्याउँदैनाँै ।' अभिभावकलाई आपनो सन्तानको कुनै वास्ता नभएपछि यस्तो समस्या त आउने नै भयो ।
Post by: tundikhel on August 27, 2010, 10:49:49 AM
ठमेलका अवैध मसाज पार्लर बन्द
27/08/2010 02:28:00 Naya Patrika
काठमाडौं/ ठमेलमा अवैधानिक रूपमा सञ्चालित मसाज व्यवसाय नियन्त्रणका लागि प्रहरीको निगरानी बढेपछि मसाजको नाममा यौनधन्दा चलाउने व्यवसायी संकटमा परेका छन् ।
ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित ८० प्रतिशत मसाज व्यवसाय गैरकानुनी भएको भन्दै प्रहरीले निगरानी बढाएपछि व्यवसायी संकटमा परेका हुन् । ठमेललाई व्यवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन र विकृति हटाई पारिवारिक वातावरण बनाउन प्रहरीले निगरानी बढाएको लैनचौर प्रहरीले बताएको छ ।
ठमेलमा सञ्चालित मसाजमा अधिकांशले हिमालयन हर्बल केयर, बडी केयर, प्राकृतिक उपचार केन्द्रको नाममा यौनधन्दा चलाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यस्तो व्यवसाय गर्ने करिब ५० व्यवसायी ठमेलबाट हटिसकेको प्रहरीले बताएको छ । ठमेलमा सञ्चालित सयभन्दा बढी मसाज व्यावसायीमध्ये २० प्रतिशतले मात्र मसाज व्यवसाय गरेकाले अन्यलाई कानुनी मर्यादामा ल्याउन प्रहरी छापालाई निरन्तरता दिइएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीको निगरानी बढेपछि मसाजको नाममा यौनधन्दा चलाउने व्यवसायी व्यवसाय नै बन्द गरी भाग्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मसाजका नाममा अन्य धन्दा गर्ने ठमेलका नेचुरल हिलिङ सेन्टर, ट्रेकर्स सर्भिस सेन्टर, आयुर्वेदिक नेचुरल्ली मसाज सेन्टर, जो नेचुरल हर्बल आयल मसाज, एक्जुकेटिभ मसाजलगायतका प्रहरी छापापछि बन्द भएका छन् भने कतिपय छापा मार्नुअगाडि नै भागेका छन् । प्रहरीले अवैध धन्दा चलाएको आरोपमा ६ सय ५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दामा कारबाही गरेको छ, जसमा ५० भन्दा बढी व्यवसायी छन् ।
मसाज व्यवसायी संघले भने प्रहरीले मनलागी छापा मारी मसाज व्यवसाय गर्ने सबैलाई लगेर दुःख दिने गरेकोे आरोप लगाएको छ । विकृति बढाउन प्रहरी प्रशासन र घरमालिक नै लाग्ने गरेको आरोप संघको छ । घुस खुवाउने व्यवसायीलाई प्रहरीले नै भगाउने गरेको संघको भनाइ छ । अमर्यादित र विकृतिजन्य काम गर्ने व्यावसायीलाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउन सहयोग गरिने संघले बताएको छ ।
मसाज व्यवसायी संघले तयार पारेको आचारसंहिता र रात्रिकालीन व्यावसायको निमयभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको विरोधमा आफूहरू नरहेको प्रहरीको भनाइ छ । अश्लील क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरे पनि र केही सामाजिक संस्था तिनलाई छुटाउने कार्यमा लाग्ने गरेको प्रहरी प्रशासन बताउँछ । कानुनी मर्यादामा रहेर व्यवसाय गर्नेलाई कुनै बाधा नपुर्‍याइने प्रहरीले स्पस्ट पारेको छ ।
पर्यटन वर्ष २०११ नजिकिँदै गर्दा ठमेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने व्यावसायीको अभियानलाई सघाउ पुर्‍याउने प्रहरीले बताएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र अन्य विभिन्न पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाको सहयोगमा ठमेललाई विकृति विसंगतिमुक्त नमुना पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने अभियानमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी लागेका छन् ।
Post by: tundikhel on September 07, 2010, 09:07:58 AM
यौन धन्दाको आरोपमा पर्यटक पक्राउ
२१ भाद्र, पोखरा । पोखराको लेकसाइडस्थित स्नोल्यान्ड होटलमा वास बसेका दुई भारतीय पर्यटकलाई प्रहरीले होटलबाटै पक्राउ गरेको छ ।
भारत उत्तर प्रदेशका पप्पु गुप्ता र एके मिश्रलाई प्रहरीले कोठामा अवैध यौन धन्दा गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । भारतीय पर्यटकले बुक गरेका कोठामा शङ्का लागि प्रहरीले आइतबारराति ११:३० बजेको समयमा तलाशी लिँदा म्याग्दी घर भएका पूणिर्मा गुरुङ, पि‍रया गुरुङ, शोभा तिलिजासमेत उनीहरूको कोठामा भेटिएका थिए ।
पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारबाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । यसैगरी पोखराको शान्ति स्तूप भ्रमणमा आएका रसियन नागरिकलाई चक्कु देखाएर लुटपाट गरी भागेका म्याग्दी घर भई पोखरा बस्दैआएका कुशलबहादुर कुमाल र कास्की सेदीबगर बस्ने लक्ष्मण नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय वैदामका अनुसार डुङ्गा चढी भाग्दै गरेको अवस्थामा चक्कुसहित पक्राउपरेका ती दुईविरुद्ध आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको छ । रासस
Post by: tundikhel on October 12, 2010, 10:40:45 AM
युवतीलाई जबर्जस्ती यौन कार्यमा लगाएको आरोपमा दुई पक्राउ
काठमाडौं, असोज १८ (नागरिक)- युवतीहरूलाई जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगाउने गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसरले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। नक्सालको टाउन प्लाजाबाट प्रहरीले दुई युवतीसहित सञ्जीव लामा र सोमबहादुर तामाङलाई शनिबार बेलुका पक्राउ गरेको छ।
युवतीलाई जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगाउने गरेको अभियोगमा लामा र तामाङलाई प्रहरीले बुधबारै जिल्ला अदालत पेस गरेको थियो। उनीहरूसँगै पक्राउ परेका दुई युवतीलाई भने कुनै अभियोग लगाइएको छैन।
लामा र तामाङले विभिन्न होटल र क्यासिनोमा पुगेर ग्राहकको खोजी गर्दै 'आफूहरूस"ग मोडल र प्लस टु पढ्दै गरेका युवती रहेको' भन्दै मोलमोलाइ गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। उनीहरूको साथबाट ५० युवतीको विवरणसमेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
परिसर प्रहरीका अनुसार विद्यालय र कलेजमा पढिरहेका युवतीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर यौन व्यवसायमा संलग्न गराउने गिरोह सक्रिय रहेको जानकारीका आधारमा परिसरको विशेष टोलीले १५ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
क्यासिनो तथा उच्च तहका होटलमा उनीहरुको सक्रियता देखिएपछि प्रहरीले शनिबार बेलुका टाउन प्लाजामा ग्राहकका लागि बोलाइएका दुई युवतीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूकै जानकारीका आधारमा लामा र तामाङ पक्राउ परेका हुन्।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका युवतीलाई 'टिटि' भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका थिए। मोबाइल नम्बरका आधारमा प्रहरीले उनीहरूको सञ्जालमा रहेका ५० युवती र एक सय ग्राहकको विवरण फेला परेको छ।
पक्राउ परेका युवतीहरूले विदेशीसँग घुम्न जानुपर्ने र सोवापत पैसा आउने प्रलोभन देखाएर पछि जबर्जस्ती यौनकार्यमा लगाएको बताएका छन्। परिसरमा भेटिएकी एक युवतीले भनिन्, 'भनेको नमाने बेइज्जत गरिदिन्छु भन्दै उनीहरूले धम्क्याएर जबर्जस्ती यस्तो काममा लगाए।'
काठमाडौं परिसरका डिएसपी केदार ढकालले तामाङ र लामाले स्कुल/कलेजका किशोरीहरूलाई विभिन्न प्रलोधन देखाएर वेश्यावृत्तिमा लगाउने गरेको दाबी गरे। उनीहरूले ग्राहक खोजेर एक रातको ५० हजारसम्म लिने र युवतीहरूलाई बढीमा १० हजार दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको ढकालले बताए।
Post by: pradman03 on October 12, 2010, 09:45:00 PM
totally unethical work of ABC, news flash is ok..but face showing is not ethical, ABC shall be sued
Post by: tundikhel on October 19, 2010, 11:55:36 AM
Quote from: pradman03 on October 12, 2010, 09:45:00 PM
Another news from pokhara
Post by: tundikhel on October 19, 2010, 11:56:40 AM
Post by: pradman03 on October 19, 2010, 02:41:07 PM
non professional lai pani samtdo rahechha...yo ta human rights ko ullanghan bho ni haina ra?
Post by: tundikhel on October 25, 2010, 01:14:27 PM
मिथिलेश यादव, सप्तरी, कात्तिक ८- दशैँ र तिहार मेलाको नाममा सप्तरीको पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुमा खुलेआम युवतीहरुको नाङ्गो नाच प्रदर्शन भइरहेको खुलासा भएपछि सोमबार बिहानबाट प्रशासनले नाचघर बन्द गराएको छ।
सप्तरीको पातो, वोदेवसाइन र मानराजा गाविसमा दशैं मेलाको अवसर पारी आर्केस्ट्राको नाममा खुलेआम युवतीहरुको नाङ्गो नाच देखाउनुको साथै जुवा तास तथा कौडा खेल सञ्चालन भइरहेको थियो। नाच हेर्न आउने दर्शकले प्रतिव्यक्ति एक सयदेखि पाँच सय सम्म शुल्क बुझाउनु पर्थ्यो।
स्थानिय प्रशासनले पुरानै परम्पराको निरन्तरता भन्दै मेलामा हुने नाचलाई मौखिक अनुमति दिएका थिए। स्थानीय सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीहरुको संरक्षणमा गाउँलेहरुले खुलेआम युवतीहरुको नाङ्गो नाच प्रदर्शन गराइरहेको आइतबार बिहान खुलासा भएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेले सोमबार बिहानैबाट यहाँका मानराजा पातो र बोदेबरसाइनमा सञ्चालित नाच घर बन्द गराउन प्रहरी परिचालन गरेको बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले आर्केस्ट्राको आडमा नग्न नाच भैरहेको खुलेपछि यी केन्द्रहरु बन्द गराएको प्रतिक्रिया दिए।
बोदेबरसाईन कृषि मन्त्री मृगेन्द्र सिंह यादवको गृह गाउँ हो।
साँझ ७ देखि ८ बजेबाट सुरु हुने नाचमा एकै पटक नग्नता प्रदर्शन भने हुँदैन। नाचको सुरुवाती आभास भोजपुरी उच्छृङ्खल नृत्य जस्तो भए पनि जति रात छिप्पिँदै जान्छ, त्यति नै नग्नता बढ्दै जान्छ। मध्यरातपछि पूर्ण अश्लील नृत्यको आभास हुने गरेको दर्शकहरुले बताए।
नाङ्गो नाच बन्द
Monday, 25 October 2010 10:45 नागरिक
Post by: tundikhel on October 25, 2010, 01:14:51 PM
भारतीय युवती नाङ्गो नाचका लागि आइपुगे
Monday, 25 October 2010 02:53 नागरिक
मिथिलेश यादव, सप्तरी, कात्तिक ८ - दशै तिहारमा वर्षेनी थापिने मेला अन्तर्गत 'मनोरञ्जन कार्यक्रम' भन्दै नांगो नृत्य देखाउने टोलीलेविभिन्न स्थानमा प्रदर्शनी सुरु गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले भने यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। सप्तरीको पश्चिमी भेगमा यस्ता नृत्य टोलीले एक सयदेखि पाँच सयसम्म टिकट राखेर नृत्य देखाउन थालेका हुन्।
वर्षेनी आयोजना हुने मेला भएकाले सँधै झै स्थानीय प्रशासनले दिएको मौखिक अनुमतिका भरमा यस्ता मेलाहरु चल्दै आएका छन्। यहाँका केहि सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीले भने मेला भित्रै देखाइन थालिएको यस्तो नृत्यलाई संरक्षण दिएको आरोप स्थानीय पत्रकारको छ।
यस कुराको जानकारी पाएपछि शनिवार राति स्थानिय सञ्चारकर्मी बैद्यनाथ यादवसहित पाँच पत्रकार प्रदर्शनीस्थल बोदेबरसाईन पुगेका थिए। 'त्यहाँ प्रहरीकै संरक्षणमा यस्तो नाच देखाइरहेको पायौं,' यादव भन्छन्, 'नांगो नाचको तस्बिर खिच्न खोज्दा प्रहरीले उल्टो सञ्चारकर्मीको क्यामरा खोस्दै आक्रमण गरेका थिए।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार परम्पारगत रुपमा वर्षौ देखि चल्दै आएको मेलाका निम्ति यसपाला पनि अनुमति दिइएको हो। 'तर, त्यहाँ के के प्रदर्शन भइरहेको छ भन्ने जानकारी थिएन,' घिमिरेले भने, 'अब कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भएका छौं।'
यहाँ हुने परम्परागत दशै मेलामा वर्षेनी आरकेस्ट्रा (नृत्य गर्ने टोली) ल्याउने प्रचलन थियो। यस वर्ष भने बढी आम्दानी गर्ने हिसाबले आयोजकले नांगो नृत्य देखाउने टोलीलाई ल्याएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाई छ। यसपाला जाँड, जुवा र नाङ्गो नाचकै कारण सर्बसाधारणको आर्कषण यो मेलामा बढेको पनि उनीहरु बताउछन्।
भारतको गोरखपुर, लखनउलगायतका स्थानहरुवाट नांगो नृत्य देखाउन दर्जनौको संख्यामा युवतीहरु ल्याइएको छ। आयोजकका अनुसार यस्ता नाचवाट प्रत्येक स्थानमा हरेक रात एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ।
Post by: kurakani on November 02, 2010, 12:48:39 PM
यौनकर्मीहरू प्रेमी बनेर धन्दा चलाउँदै
दीपक दाहाल, काठमाडौं, कात्तिक १६- तपाईँ पुरूष हुनुहुन्छ र प्रेमको बहानामा एक भन्दा बढी महिलासँग यौनसम्पर्क राखिरहनु भएको छ, नठान्नुस् मैले मात्र प्रेमिकालाई ढाँटिरहेको छु। कहिले सापटी र सपिङ्गको बहानामा आर्थिक फाइदा लिइरहने त्यस्ता महिला यौनकर्मी पनि हुनसक्छिन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणले थुपै यूवती एवं अधवैसे महिला एकभन्दा बढी पुरूषसँग प्रेमीकाको रूपमा यौन व्यवसाय चलाइरहेका छन्। 'अधिकांश यौनकर्मीहरू कुनै हिसाबले नजिकिन्छन् र यौन साथी बन्छन् र विभिन्न बहानामा पैसा लिन्छन्,' केन्द्रका निर्देशक डा.कृष्णकुमार राईले भने।
प्रहरीले सक्रियता देखाउने नाममा यौनकर्मीका अखडामा छापा मार्ने र आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्ने भएपछि उनी आफूलाई नाम चलेका अफिसा स्टाफ एवं कुनै कलेजको विद्यार्थी भन्छन्। 'यौन पेशा गरेको भन्न आधारमा मात्रै होइन्, कण्डम बोकेको भरमा समेत प्रहरीले समात्ने गर्छ ' राई भन्छन्। राईका अनुसार यौन रोग नियन्त्रणका दृष्टिले यौनकर्म नियन्त्रण गर्न प्रहरीको यो प्रयासले नकारात्मक असर पारिरहेका छ। 'एचआइभी तथा यौन रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मातहतका निकाय निशुल्क कण्डम बाँड्छन्' राई भन्छन्, 'त्यही कण्डम बोकेको आधारमा प्रहरी समात्छ, त्यसैले अधिकांश यौनकर्मीले यो बाटो रोजेका हुन्।'
यौनकर्मीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था जागृतिकी कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रुति कार्कीका अनुसार यौनकर्मी महिलाले पहिचान खुलाएमा धेरै दुःख पाउने भएकोले पनि उनीहरू छलछाम गर्न हैन कतिपय धेरै अवस्थामा असुरक्षित यौनसम्पर्कका लागि वाध्य हुन्छन्। 'हामीसँग यौनकर्मी दिदी बहिनीहरूले भने अनुसार प्रहरीले लग्यो भने, पैसा नदिइ यौनसम्पर्क पनि राख्छ, भएको पैसा पनि लिन्छ र केही दिन हिरासतमा समेत राख्छन ' कार्कीले भनिन्। निर्देशक राईका सर्वेक्षणका क्रममा यौनकर्मी महिलाले बताएअनुसार प्रहरीले समेत उनीहरूसित कण्डम बिना यौनसम्पर्क राख्छन्।
जागृतीको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा मात्र पचास हजारको हाराहारीमा यौनकर्मी महिला र चार लाख भन्दा बढी यौनकर्मी महिलाका पुरुष ग्राहक छन्। ग्राहकको तुलनामा महिला यौनकर्मीको संख्या न्युन रहेकाले एकजना महिलाले छ सात जना पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्नु पर्ने अवस्था छ। 'फरक फरक पुरूषसँग जाँदा उनीहरू पहिचान फरक बनेको हुन्छ।' राईले भने, 'इमेल, इन्टरनेट, सहरी व्यापारिक केन्द्र, मलको अवधारणाले उनीहरू ग्राहक खोज्न सजिलो भएको छ। यसरी छद्म परिचय बोकेका महिलाले प्रेमको नाटक गरेरै व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता महिलाले एक हप्तामा ४० जनासँगसम्म यौन सम्पर्क राख्ने गरेको पाइएको राइले बताए।
उनीहरूको जीवनशैली समेत हाइफाई हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। 'अधिकांश यौनकर्मीलाई विना कण्डम यौनसम्पर्क राख्न हुदैन् भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ ' तर पहिचान खुलाउँन र म यौनकर्मी हुँ भन्न सक्दैनन्।' राई कानूनी रूपमा खुल्ला नगरेपनि सार्वजनिक ठाउँमा समाजिक व्यवस्था नविगारेसम्म प्रहरी मौन बस्नुपर्छ। बोकेर हिड्न नपाइने भएपछि भनेको समयमा उपलब्धता नहुने र जसले गर्दा असुक्षित यौनसम्पर्क गर्नुपरेको सर्वेक्षण्का क्रममा यौनकर्मीहरूले बताउँने गरेका छन्। सर्वेक्षणले पहिचान खुलाएर हिड्ने यौनकर्मी महिलाका अनुसार कण्डम लगाउँन नमान्नेमा अधवैशे अधिक रहेको समेत देखाएको छ। सर्वेक्षणले काठमाडौका ५१ प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले मात्रै यौनसम्पर्कको समयमा कण्डम लगाउँने गरेको देखाएको छ।
जनस्वास्थ्यको सिद्धान्त अनुसार स्वास्थ्य समस्य समाधानका लागि यौन रोग नियन्त्रणको लागि यौन व्यावसाय व्वस्थित गर्नुको विकल्प नभएको एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण बोर्डका उपाध्यक्ष डा.श्यामसुन्दर मिश्रको भनाई छ। द्धन्द्ध, सहरी बेरोजगारी, लैहलैइ जस्ता कारणले यौन व्यावसाय बढीरहेको छ। 'थाइल्याण्डमा राष्ट्रिय आयको ६ प्रतिशत यौन व्यवसायले ओगट्छ ।' डा.मिश्रले भने, त्यहाँ यौनकर्मी हो र कण्डम बोक्दैन् भने समात्छ हामी बोके समातिन्छ।' उनले भने। यसले रोग नियन्त्रणमा अवरोध गरेको उनी बताउँछन्।
यौन व्यवसायलाई कानूनी मान्यता नपाउदासम्म एचआईभीको संक्रमण नघटने यौनकर्मिहरुको दावी छ। केन्द्रका अनुसार यौनरोग संक्रमित मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण भएको छ। एचआईभी र एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको आकडा अनुसार काठमाडौंमा करिव एक हजारभन्दा बढी महिला यौनकर्मी भारतका बिभिन्न सहरमा यौनपेसामा संलग्न भएर फर्केका हुन्। उनीहरु मध्ये अधिकांश एचआईभी संक्रमित छन। एचआईभी संक्रमित यौनकर्मीसँग उनीहरुले कण्डम लगाएर मात्र सम्पर्क राख्न चाहादाँ चाहादै पनि यस्ता अवरोधले रोगको खतरा बढाइरहेको छ।
Post by: tundikhel on November 02, 2010, 11:59:54 PM
जुवातास र यौनधन्दामा संलग्न दर्जन बढी पक्राउ
Tuesday, 02 November 2010 20:58 नागरिक
भक्तपुर, कात्तिक १६ - अवैध रुपमा जुवा तास खेलाएको र यौनधन्दा गराएको आशङ्कामा प्रहरीले छापा मारी गेस्ट हाउसबाट करिब बाह्रजनालाई पक्राउ गरेको छ। भक्तपुर सल्लाघारी खाजा घरमा आज दिउँसो छापा मारी महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरले तास खेल्दै गरेको अवस्थामा सञ्चालक प्रवेश श्रेष्ठसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको छ।
त्यसैगरी परिसरले आजै भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित चम्पक गेस्ट हाउसमा छापा मारी यौन व्यवसाय गरेको अवस्थामा दुई जोडी युवालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले व्यवसाय सञ्चालक पुण्यराम देवनाय्लाई समेत पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ परेका सबैमाथि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
चाडपर्व खासगरी तिहारका बेला उपत्यकामा पेसेवाररुपमा जुवातास खेल्ने र खेलाउने गिरोहको सक्रियता बढेपछि यसपटक प्रहरीले विशेष सतर्कता अपनाएको छ।
Post by: tundikhel on December 10, 2010, 12:31:59 AM
Friday, 10 December 2010 00:14 नागरिक
लहान, मंसिर २४ (नागरिक)- सशस्त्र प्रहरीले सम्राट होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा छापा मारी यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा एक युवती र कामदारलाई पक्राउ गरेको छ।
युवतीहरू बोलाएर यौन व्यवसायमा सञ्चालन हुने जानकारीका आधारमा छापा मार्दा ती युवती पक्राउ परेको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पस लहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल कार्कीले बताए। होटलमा कार्की आफैं बुधबार राति ग्राहक बनेर पुगेका थिए। 'चार हजार रुपैयाँमा होटल सञ्चालकले ती युवतीलाई बोलाइदिएका थिए,' उनले भने।
उक्त होटलमा अन्य विभिन्न जिल्लाका युवतीहरूले 'कल गर्ल'का रूपमा काम गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ । सशस्त्र प्रहरीले रेस्टुरेन्टमा छापा हान्दा वडा प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी निरीक्षक लालध्वथ सुवेदी भने अनभिज्ञ थिए।
Post by: NepDude on March 07, 2015, 02:02:07 PM
एउटी नगरबधुसँगको रात
"तिमी भएको भए के गथ्र्यौ ?" रजनिशले उल्टै मलाई सोध्यो ।
भर्खर-भर्खरै पाउलो कोएलोको 'इलेवेन मिनट्स्' किताब पढेको भएर मलाई त्यस कथाभित्रकै दृश्यहरु दिमागमा आइरहेको थियो । सेक्स, सपना, रहर, प्रेमको वरिपरि घुम्ने यो कथाले जो कोहीको मन छुन्छ । भन्न त धेरैले कोएलोलाई 'ओव­रेटेड राइटर’ पनि भन्छन् ।
इलेवेन मिनट्स् चाहिँ कसरी यो उपन्यासको टाइटल भयो भन्ने प्रसङ्ग थाहा छैन भने गुगलमा सार पाइन्छ होला, हेर्नुस् न !
कथाको शुरुमा नै यस्तो छ, "वन्स अपन अ टाइम, द्य वस अ प्रस्टिच्युट कल्ड् मरिया..."
'वन्स अपन् अ टाइम्' बच्चाहरुको कथा शुरु गर्ने तरिका हो र 'प्रस्टिचुट' चाहिँ उनीहरुलाई बुझाउन समेत नसकिने कुरा ।
रजनिशको हिजोको घटना उसले मलाई सुनाएको पहिलाको घटनाभन्दा धेरै फरक थिएन । फरक यति थियो कि पहिलाको घटना नेपालमा घटेको थियो, यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा । पहिलो घटनामा नेपाली, यसमा चाहिँ यहाँकी गोरी ।
"कामबाट फर्किंदै थिएँ । रातीको साढे बाह्र बजिसकेको थियो । एक जना केटी अलि ढल्पल ढल्पल गर्दै विपरीत दिशाबाट मैतिर आउँदै थिई । नजिक आउँदा निकै रक्सी गन्हायो । झोलाको एउटा मात्रै फिता उसको देब्रे काँधमा थियो, अनि झोलाबाट सामानहरु झर्ला जस्तो", रजनिशले सधैँझै खुलेर अनि विस्तारमा कुरा शुरु गरेको थियो ।
"अनि ?" म उत्ताउलो भएँ ।
"लब, यु माइट ड्रप यो-र) स्टफ । योर ब्याग इज ओपन", भनेछ उसले ।
"ओ, थ्यान्क यु, भनेर अघि बढी त्यो । त्यस्तो मातेको बेलामा अग्लो हिल भएको स्यान्डल लगाएकी थिई, लडी हाली । गएँ, उठाएँ । मसँग कामबाट लिएर आएको पानी थियो, पिउँछेस् भनेँ, पिई । थ्यान्क यु भनी । कहाँ जान हिँडेकी यति बेला भनेर सोधेँ, घर भनी ।"
"तिम्रो घर ?" मैले बीचमै प्याच्च सोधेँ ।
"होइन, मूला । कुरा सुन न ।"
"भन न," मैले भनेँ ।
"त्यसले भनेको ठेगाना मोबाइलमा हानेर हेरेको टाढा रै'छ । अझ लागेको बेला हिँडेर जान त झन् टाढा । मैले 'मेरो घर यहीं नजिकै हो, इफ यु डन्ट माइन्ड्, यु केन स्टे एन्ड लिव इन द मोर्निङ्' भनेँ डराई डराई ।"
"ला, गालामा पड्काई क्या हो ? हाउ डेय्-र्) यु ? भनेर ?"
"अँ । थ्यान्क यु भनेर गालामा चुप्पा पड्काइ", उसले मलाई नै पड्काउने गरी जवाफ दियो ।
"मेरो एउटा इन्डियन साथीले एक पटक नाइट आउट गएको बेलामा भनेको कुरा याद आयोः द बेस्ट टाइम टु गो टु बेड विथ दिज व्हाइट गलर्स् इस व्हेन दे आर ड्रङ्क । दे डन्ट क्यर इफ यु आर व्हाइट् ओर एसियन् । मैले चान्स् चेक गर्न उसको ओंठ नजिकै ओंठ लगेको, उसैले ओँठ ल्याई । ऊ लडेर मैले उठाएर बाटो छेउको पसल जाने सिंढीमा बसेपछि ऊ झनै लल्याक­लुलुक हुँदै थिई । नजिकै चौबिसै घण्टा खुल्ने पसल थियो, गएर किन्नु पर्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो..."
"के ?" मैले बीचमै कुरा काटेँ ।
"कुरा बुझी-बुझी नबुझेको जस्तो नगर न यार", उसले लाज मानेजस्तो गरी तुरुन्तै जवाफ र्फकायो ।
"किन्यौ त ?"
"किनेँ नि ।"
लौ, केटो अब भर्जिन रहेन भन्ठानेँ ।
"मलाई डर लागिरथ्यो । लिएर गएँ, त्यस्ती मातेकी केटी अलि टाँठी हुँदै गई । त्यो अग्लो हिलवाला स्यान्डल खोली अनि मसँग टाँसिन आई । उसको नाम एम्ब रै'छ ।"
"एम्ब, कस्तो नाम ?"
"हामीले भन्यो भने एम्बर हुन्छ, उनीहरुले एम्ब भन्छन्", उसले प्रष्ट पार्दै भन्यो ।
"ए, अनि ?"
"मलाई कहाँबाट आएको भनी । मैले नेपाल भनेँ । कसरी चिनिस् म यहाँको होइन भन्ने ? भनेर सोधेँ, फ्रम योर एक्सेन्ट् भनी । अनि अँ (उसले कुरा सम्झिन खोज्यो).... नचिनेको मान्छेसँग आउन डर लागेन भनेर सोधेको 'नो, यु आर अ गुड म्यान' पो भन्छे बा ।"
रजनिशले भन्दै गयो । "धेरै बेर दुई जनाले के-के कुरा गर्‍यौँ । ऊ निदाउन खोज्थी, म चाहिँ के-के सोधिरहेँ । झस्किँदै फेरि जवाफ दिन्थी । मेरो सिङ्गल बेडमा ऊ कुना पट्टी पल्टेकी थिई । म भुईँमा पुग्छु कि भन्ने डरले ऊसँगै टाँसिएँ । उसको रक्सीको गन्ध चाहिँ घटेको थिएन ।"
"शेल वि मेक लव ?" रजनिशले एम्बलाई सोधेछ ।
"व्हाट डु यु वान्ट् मि टु से ?"
त्यो प्रतिप्रश्नको सजिलै 'हुन्छ' भन्ने अर्थ लगायो होला रजनिशले ।
'इलेवेन् मिनट्स्' मा मरियाले डायरी लेख्छे । एउटी बेश्या भएर काम गर्दाको अनुभव (धेरै तीता) । त्यो काम छोडेर जाने सोचिरहँदा उसले यस्तो लेखेकी हुन्छेः मेरो वरिपरि कोही खुसी छैनन् । जुन कुरा सित्तैमा पाउनु पर्ने हो, त्यसको लागि पुरुषहरुले पैसा तिर्छन्, अनि जुन कुरा प्रेमले माया गर्ने मान्छेलाई दिनु पर्ने हो, त्यसलाई व्यापार बनाएर बेच्नु पर्छ एउटी बेश्याले । यो ठूलो विध्वंश हो, म खुसी छैन । म यो बिर्सन चाहन्छु । म माया गर्न चाहन्छु । जिन्दगी साह्रै लामो र छोटो, दुवै हुन्छ यो तरिकाले जिउँदा ।"
यो दुनियाँ पनि अचम्मको बनाइदिएको प्रकृतिले । यौनलाई व्यापार बनाइन्छ । कहिँ बाटो हिँडिरहेकी केटी बलात्कृत हुन्छे । धन र बलको रवाफमा खुलेआम नारीमाथि आक्रमण गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । कामशक्तिले मातेर छाडा भएर हिँड्नेहरुको के कुरा ? यौनकै लागि सँधै केटीहरु बेचिन्छन् । बेचिनबाट जोगाउन र बेचिएकीहरुलाई जोगाउन लागेकी अनुराधा कोइरालाले सबैको अगाडि 'मेरा छोरीहरुलाई जोगाइदेऊ' भन्दा सम्मान दिइन्छ, हामी सबै मक्ख पर्छौँ । खासमा त हामी सबैलाई त्यो सम्मानले लज्जित बनाउनु पर्ने हो । ट्राफिकमा पत्रिका बेच्ने युवकलाई सान्दार गाडीको झ्याल खोलेर 'पैसा दिन्छु, पत्रिका छोडेर आऊ' भनेर लिएर जाने धनाढ्य महिलाहरु पनि छन् । यो सब ट्रेड हो, व्यापार । पत्रिकाहरु अगाडिको पानामा युवतीहरुलाई देखाएर, सेक्सको बारेमा प्रश्न गरेर पत्रिका बेच्छन् । हामी सधैँ यौन किन्छौँ । हामी सधै यौन बेच्छौँ ।
यो ट्रेड र 'मेकिङ्ग लव' धेरै फरक-फरक कुरा हुन् ।
"सो डिड् यु गाइज् मेक लब ?" अब चाहिँ गम्भिर भएर रजनिशलाई सोधेँ ।
"नो । त्यस्तो केही भएन", रजनिशले पनि गम्भिर भएर जवाफ दियो । मैले यता प्याकेट खोलेको देख्दा उसले नराम्रो मानी । "व्हाट्स रङ विथ मि ? त्यो किन प्रयोग गर्न पर्‍यो ? म त्यस्तो खाले केटी होइन' भनी । अझै पनि राम्रोसँग उभिन सकेकी थिइन, उठेर कपडा लगाई, अनि सिरक ओढेर बिस्तरामा पल्टिई ।"
मैले उसको कुरा सुनिर'को छु भन्न 'ओके' भनेँ ।
"एम्ब भनेर बोलाएको, 'मलाई सुत्न देऊ प्लिज, भोलि बिहानै उठेर जान्छु, हुन्छ ?' भनी । मैले 'ओके' भनेँ, अनि भूइँमा बिस्तरा लगाएर सुतेँ ।"
"सो, यु मिस्ड् येट एनद चैन्स," मैले भनेँ ।
त्यही बेला उसले मलाई सोधेको थियो, "तिमी भएको भए के गथ्र्यौ ?"
मैले केही भनिनँ ।
त्यस्तो बेहोसीमा धेरैले धेरै किसिमको गल्ती गर्छन् । शंकर दाइले कुनै समय भनेको कुरा याद आयो, "खाना खाने समय र यौन क्रिडाको समय मानिस मानिस होइन, पशु हुन्छ । र, यो समय आउने बिचार घुलनशील हुन्छन् । यस्तो समय केही सोच्नु हुँदैन ।"
त्यति बेला मैले सोधेको थिएँ, "अनि दाइ, रक्सीले मातेको बेला नि ?"
शंकर दाइले हाँसेर जवाफ दिनुभ’थ्यो, "नारायण गोपालको एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला' भन्ने गीत सुने भै'गो नि त ?"
"भोलिपल्ट के भो त?", मैले अर्को दिनको कथा सुन्न खोजेँ ।
"राती निदाउन नसकेको भएर बिहान दश बजेसम्म सुतेछु । मलाई काममा जानु पर्ने । उसलाई उठाएँ । ऊ धेरै बेर बसिन । बाथरुम गएर आएर मलाई जोडले अंगालो हालेर 'थ्याङ्क यु' भनेर गालामा चुप्प गरेर गई ।"
"ओ, गुड्बाई किस् ?" म फेरि गिज्जिएँ ।
रजनिशले जवाफ दियो, "होइन बन्धु, त्यसलाई 'पेक' भन्छन्­ पि.इ.सि.के ।"
Post by: testo on March 08, 2015, 08:00:22 AM
पतिले यौनधन्दा गर्न बाध्य बनाएपछि
पोखराको कस्मेटिक पसलमा रमाइरहेकी युवती । एक युवकसँग अप्रत्यासित भेट । निरन्तरको भेटले उनीहरुवीच झांगिएको माया । त्यो मायाले फेरेको बिहेको रुप । त्यसपछि निरन्तर धोकै धोका । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कुनै फिल्मको प्लटजस्तै लाग्ने यो सत्यकथा पोखरकी युवतीको हो ।
बितेका एक वर्षभित्र उनले जे भोगिन त्यो पत्याउनै नसकिने खालको छ ।
बिहेको बहानामा युवकले आर्थिक शोषणमात्रै गरेनन् जर्बजस्ती यौनधन्दा गर्न समेत बाध्य बनाए । पत्नी बनाएर नाटक गर्ने ताप्लेजुङका २६ वर्षीय प्रताप लिम्बु अहिले प्रहरी खोरमा छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २४, २०७१ ०६:२५:२४
Post by: tundikhel on March 18, 2015, 08:01:48 AM
यौनधन्दामा स्कूले बालिका
देशका विभिन्न भागमा स्कूले बालिकाहरु युनिफर्ममै डान्स रेष्टुराँ, डेटिङ स्पट, होटलहरुमा आपत्तिजनक स्थितिमा पक्राउ परिरहेका छन् भने तातोपानी भन्सारमा महिलाहरु सुन तस्करीमा पक्राउ पर्ने गरेका छन्। बालिकाहरु खुलेआम हामी जे खाए पनि, जे गरे पनि तिमीलाई के खाँचो भनेर प्रहरीलाई ओठे जवाफ दिने गरेका छन् भने महिलाहरु बेरोजगार भएपछि सुन तस्करी गर्ने भरिया बनेको बताउँछन्। केही महिनाभित्रै झण्डै ९० किलो सुन प्रहरीले महिलाहरुबाट बरामद गरेको छ।
केही महिना अघि प्रहरीले थाइलेण्ड आवतजावत गर्ने महिलाहरुको यौनाङ्गमा लोरोको रुपमा फिट गरेर ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो भने शरीरमा सर्जरी गरेर लागूपदार्थ ओसार पसरा गरेका घटना पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। लागूपदार्थ क्याप्सुल बनाएर निल्ने र ओसार पसार गर्ने घटना त सामान्य भइसकेका छन्। अव स्कूले बालिकालाई बजार क्षेत्रमा यौन धन्दामा लगाउने र घरेलु महिलालाई तातोपानी भन्सार छलेर सुन तस्करीका भरिया बनाउने नयाँ धन्दाको खुलासा भएको छ। चीनबाट तस्करी भएर आउने सुनलाई युवा भरियामार्फत जुत्ता र शरीरका विभिन्न भागमा लुकाएर भारत पुर्‍याउने गरिन्छ।
दमकका होटल सञ्चालक मुना मगर र बिर्तामोड बसपार्कका केदार चौलागाईंलाई होटलमा यौनधन्दा चलाएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि तिनले बयान दिए– हामीमात्र होइन, सबै होटलहरुमा यौनधन्दा चलिरहेको छ। स्कूल बालिकालाई पैसाको लोभ देखाएर होटलमा लाने, बियर–रक्सी पिलाएर मताउने अनि यौन धन्दामा लगाउने गरिन्छ। ग्राहकले स्कूले टिनेजरहरु भनेपछि बढी पैसा दिने गर्छन्। झापाका दमक, बिर्तामोडमा बेश्याबृत्ति, यौनधन्दा रोक्न अभियान चलाएको प्रहरीले स्कूले बालिकालाई यौनधन्दामा लगाएको यो खुलासालाई देशव्यापी पारेको छ। ताकि अभिभावकहरु चनाखो हुन्, आफ्ना नानीहरुलाई दलालहरुले यौनधन्दामा नफसाउन्।
सबैभन्दा चर्को समस्या राजधानीमै छ। स्कूले र प्लस टु पढ्ने ठिटाठिटीहरु पढ्नभन्दा बढी डेटिङमा जाने, खुलेआम यौनचर्तिकलाहरु गर्ने, चुरोट बियर ट्याप लगाएर तान्ने, मोवाइलमै सेक्स र सेक्सी फिल्महरु हेर्ने र रमाउने गर्छन्। ३ दिन अघि खबर आयो– पाटनको दरवार स्क्वायर युवायुवतीको डेटिङ स्पट बन्यो, दिनदहाडै आपत्तिजनक क्रियाकलाप देखिन थाल्यो। काठमाडौंका दक्षिणकाली रोड, त्रिशुली सडक, बसपार्क लगायतका भीडभाड हुने क्षेत्रका होटलहरुमा खुलेआम यौनधन्दा चलिरहेको देखिन्छ भने भक्तपुर रोड त बेश्यावृत्तिका लागि प्रख्यात नै भइसक्यो।
नेपालमा यौनधन्दा गैरकानुनी मानिन्छ। यसअघि गृहमन्त्री हुँदा एमाले नेता वामदेव गौतमले पोखराको लेकसाइड पुगेर यौन व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन रेडलाइट इलाका तोक्ने कुरा झिकेका थिए। गतवर्षमात्र एआइजी पार्वती थापा मगरले रेडलाइट एरिया नतोकेसम्म महिला हिंसा कम हुनसक्दैन भनेर सनसनी फैलाएकी थिइन् भने यौन व्यवसायीहरुले रोजगारी नभएपछि जे छ त्यही बेच्ने हो, यौन व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्।
देशभरिका मेरी स्टोप्स, गर्भपतनका तथ्यांक हेर्ने, बेश्यावृत्तिका प्रहरी रिपोर्ट पढ्ने र राजधानीको रत्नपार्क, ठमेल, कलंकी क्षेत्रमा जुनसुकै बेला यौन व्यवसायको मोलमोलाई र धन्दा चलिरहेको देख्दा लाग्छ, नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनको सख्त जरुरी भइसकेको छ। अव त बालिकाहरुलाई नै रक्सी, चुरोट पिलाएर मताउने र यौनधन्दामा लगाउने महामारी फैलिसकेको अवस्थामा सख्त कानुनको जरुरत झन बढेको देखिन्छ। युवा विदेशीने क्रम नरोक्ने र बालिकालाई यौन धन्दामा लाग्नबाट नरोक्ने हो भने नेपालको भविष्य इबोला भाइरसग्रस्त अफ्रिकाभन्दा बढी अतासलाग्दो देखिदैन?
Post by: anand on March 20, 2015, 12:12:09 PM
काठमाडौं । राजधानीका डान्सबार तथा मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवतीलाई अफ्रिका लगेर बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । सिआइबीले राजधानीका डान्सबार संचाललकहरुसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको हो । झण्डै एक महिनाको लामो अप्रेसनपछि प्रहरीले गिरोहका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मैतीदेबीमा बस्ने एजेन्ट प्रवीण श्रेष्ठ, ललितपुरमा मुन डान्सबार चलाउने राजन केसी तथा एयरपोर्टमा सेटिङ मिलाउने आशिष नामका ब्यक्ति लगायत पक्राउ परेको नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।
Post by: anand on April 09, 2015, 04:27:28 AM
मैले देहब्यापार गर्ने कुरा श्रीमानलाई पनि थाहा छ
सीता बराल, वर्ष २९, यौनकर्मी
यो पेशा प्रारम्भ गर्नुभएको कति भयो?
१३ वर्ष जति भयो ।
कसले प्रवेश गरायो ?
म फुटपाथमा पसल गर्थें । त्यसबेला चितवनको एउटा केटासँग प्रेम भयो । विवाह त भयो तर उसले घर लगेन । बच्चा पेटमा भएको बेलामा त्यो केटो अचानक भाग्यो । कोठामा खाने कुरा थिएन, व्यापार पनि छोडिसकेकी थिएँ । त्यसपछि के गर्ने ? एउटा चिनेको साथीले मलाई ग्राहक खोजिदिएर सहयोग गरी ।
अहिले बच्चा कहाँछ ?
एउटा बालगृहले मलाई केही पैसा दिएर लग्यो । बच्चा खेलाएर बस्ने हो भने मेरो काम कसले गरिदिने ? फेरि बच्चा बोकेकी आमासँग ग्रामहक पनि आउँदैनन क्यारे ।
कति पैसा कमाउनु हुन्छ ?
पहिले एक्लो हुँदा महिनाको ५० हजार जति कमाउँथे । विवाहपछि श्रीमान्लाई पनि समय दिनुपर्ने हुनाले ३० हजार जति कमाउँछु । अहिले स्वयंसेवक (यौनकर्मी) हरु बढेका छन्, तर ग्राहक भने धेरै छैनन्, त्यसैले पनि आम्दानी घटेको छ ।
कति पैसा बचाउनु भएको छ ?
छैन । खायो, पियो, रमाइलो ग¥यो, अनि सक्यो । अलिअलि श्रीमान्सँग बचत होला । मसँग त्यस्तै २०–३० हजार होला ।
श्रीमान्लाई तपाईंको पेशा थाहा छ ?
म रेष्टुराँमा काम गर्छु । त्यहाँ पाउने तलब भनेको ४ हजार हो । तर दैनिक दुई चार हजार मेरो पर्समा हुन्छ । उसले पनि पैसा लिइरहेको हुन्छ । उसले कहिलै पनि त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्दैन । म पनि भन्दिन । म के गर्छु भन्ने उसलाई थाहा हुनुपर्ने हो । थाहा हँुदा पनि वास्ता नगरेको कारण पनि मलाई हिम्मत आएको हो ।
तपाईं कहाँ आउने ग्राहक कहाँ काम गर्छन् ?
खै कहाँ गर्छुन्, के थाहा ? कोही पुलिस छन्, कोही सेना छन् । नेता पनि छन् ।
नेता भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो ?
तिम्रो पक्षमा नियम परिवर्तन गर्छु । तिम्रो शरीरमा तिम्रो अधिकार हुन्छ । आप्mनो इच्छाले गरेको काममा प्रहरीले थुन्न पाउँदैन । म तुरुन्तै तिम्रो पक्षमा नियम बनाउँछु भन्छन् । त्यही भएर थाहा भयो ।
शारीरिक सम्पर्क राख्दा कण्डम प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
ग्राहक कण्डम बोकेर आएका हुँदैनन् । हामीलाई कन्डम किन्न अप्ठ्यारो हुन्छ । एनजीओहरुले हामीलाई कण्डम प्रयोग गरेनौ भने रोग लाग्छ भनेर सम्झाएका छन्, तर कण्डम पाउन गाह्रो छ । ग्राहकहरु पनि कण्डम प्रयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो भनेजस्तो गर्छन् । उनीहरुको खुशीका लागि पनि कण्डम प्रयोग गदिनँँ । कतिपय ग्राहक भने आफै कण्डम लिएर आउँछन् ।
महिलाले प्रयोग गर्ने कण्डम हुन्छ भन्ने थाहा छैन ?
अहँ छैन । महिलाले प्रयोग गर्ने कण्डम भए हामीलाई किन्न पनि सजिलो हुन्थ्यो, ग्राहकहरुले थाहा पनि पाउँदैन थिए ।
तल्लो पेट दुख्यो, बच्चा पेटमा बस्ने वा त्यस्तै समस्या प¥यो भने उपचार गर्न कहाँ जानुहुन्छ ?
प्राइभेट क्लिनिकमा ।
सरकारी अस्पताल जानुहुन्न ?
सरकारी अस्पतालमा टिकट लिने ठाउँमा के भयो भनेर सोध्छन् । हामीलाई भन्न लाज हुन्छ । यो केटी त स्वयंसेवक पो रहिछ भन्ने थाहा भयो भने प्रहरीले पक्रन्छ भन्ने डर हुन्छ । प्राइभेट क्लिनिकमा जाने बित्तिकै हामीलाई डाक्टरले चिन्छन् । चूप लागेर औषधी लेखिदिन्छन् । सञ्चो पनि भैहाल्छ ।
एचआईभी एड्स रोग कसरी सर्छ थाहा छ ?
खै, ग्राहकसँग धेरै काम ग¥यो भने सर्छ भन्छन् तर यो काम नगरी हुँदैन, के गर्ने ? मलाई त मच्छडबाट पनि यो रोग सर्छ जस्तो लाग्छ । रोगीलाई मच्छडले टोकेर फेरि हामी जस्तो स्वस्थ मान्छेलाई टोक्यो भने सर्दैन त ?
पत्रकार अश्विनी कोइरालाको पुस्तक “उनी” नेपाली महिलाका बारेमा आएको अहिलेसम्मको फरक कृति हो । विगत १७ वर्षदेखि कान्तिपुरको साप्ताहिक र नारीमा कार्यरत कोइरालाको उक्त कृतिमा रहेका ४० मध्येबाट छानिएको यो अन्तर्वार्ता ।लेखक कोइराला जुकरबर्ग क्याफे नामक पुस्तक लिएर फेरि पाठक माझ आउने तयारी गर्दैछन् ।
Post by: tundikhel on April 10, 2015, 03:28:02 AM
ठमेलको एउटा होटलमा मैले स्कूटीकै चाहनामा पहिलो पटक शरीर परपुरूषलाई सुम्पिएँ
राजधानीको सुविधा सम्पन्न परिवारमा जन्मे हुर्किएकी मैले कुनै कुराको अभाव व्यहोर्नु परेको त थिएन । माध्यामिक तहको पढाईसम्ममा म अव्वलनै विद्यार्थी थिएँ । ट्युसन, स्कूलको पढाईले अन्य कुरामा ध्यान जाने फुर्सदै हुँदैन थियो । माध्यामिक स्कूलसम्म मेरा कम मात्र मन मिल्ने साथी थिए । घर नजिकै विद्यालय भएकाले पढाईको चापका कारण अन्त मन डुलाउने, साथीसंगी बनाउने फुर्सद पनि भएन ।
मैले प्रवेशिका परीक्षा विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण गरेँ । प्रवेशिका परीक्षा उतीर्णसँगै म थोरै फुकूवा पनि भएँ । साइन्स पढ्ने रहर हुँदा हुँदै पनि परिवारका दवावका कारण म व्यवस्थापन संकाय पढ्न बाध्य भएँ । स्कूलको फलामे अनुशासनबाट एकैचोटी बाहिर आएकी मलाई कलेजको अनुशासनको सीमा निकै फराकिलो लाग्दैथियो । स्कूलमा नजिकैको परिवेशका साथीहरूकोमात्र संगत पाएकी मैले कलेजमा भने टाढा–टाढाका साथीहरूको संगत गर्ने मौका पाएँ । त्यसमध्ये त अधिकांश राजधानी बाहिरकै थिए । राजधानी बाहिरका पनि हुने खानेका छोराछोरी पढ्ने कलेज भएका कारण अधिकांश होस्टलमा बसेर पढ्ने खाले थिए ।
उनीहरूको लवाई खवाई निकै भड्किलो प्रकृतिका थिए । राजधानीको स्थायी बासिन्दा भएपनि मेरो परिवारले मलाई उनीहरु जति खर्च नगरेको भान हुन्थ्यो मलाई । उनीहरू प्रत्येक शनिबार नयाँ नयाँ ठाउँ जाउँ भन्थे । विदा या अन्य छुट्टिका दिन पनि उनीहरू कुनै ठाउँ पुगेकै हुन्थे । व्वायफ्रेण्ड, गर्लफ्रेण्ड त प्रायः सवैका थिए । ११ कक्षाको तीन/चार महिना नवित्दै मेरो पढाई डामाडोल हुन थाल्यो । फ्रस्र्ट टर्म एक्जाममै कमजोर नतीजा आएको थियो । तर हामीले समयमा फी बुझाउने भएका कारण कलेजले अनावश्यक कम्प्लेन गरेर दुःख दिँदैनथ्यो । त्यसकारण मेरो पढाई बिग्रिएको कुरा घरमा थाहा हुने कुरै भएन र कलेज सुरू भए देखि नै घरमा मैले आफूलाई स्कूटी चाहिएको कुरा बताएको थिएँ । तर, घरपरिवारले वेला भएको छैन भन्दै मेरो कुरामा खासै ध्यान दिएका थिएनन् । मलाई भने आफूसँग स्कूटी नहुँदा साथीसंगीसँग घुम्न जान तथा कलेजै आवत जावत गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो ।
मेरो एक जना मन मिल्ने साथी थिई मोनिका (नाम परिवर्तन) । उसको घर विराटनगर हो । उसका बुबा व्रिटिस लाउरे भन्थी । कलेज गएकै दिनदेखि उसँग मेरो घनिष्टता बढेको थियो । उसँग मैले प्रायः सवै कुरा सेयर गर्दथेँ । मलाई स्कूटी आवश्यकता परेको पनि उसैलाई सुनाएकी थिएँ । ऊ अरु साथीभाइ भन्दा बढी नै तडक भडक गर्दथी । बजारमा नयाँ नयाँ मोवाइलका ब्राण्ड आउने बित्तिकै उसलाई नयाँ मोवाइल चाहिहाल्थ्यो । होस्टलमा बस्ने भए पनि उसलाई पनि उसका परिवारले अड्कलेर मात्रै पैसा पठाउँथ्यो । तर पनि उसको हाऊ भाऊ र भड्किलो व्यवहारले मलाई अचम्मित बनाएको थियो । हप्तैपिच्छे रेष्टुरेन्ट जाने, फेरि फेरि कपडा लगाउनु पर्ने उसको वानीलाई कहाँको स्रोतले पूर्ति गरिरहेको थियो त्यसबारे म अनभिज्ञ थिएँ । उसले कतिपल्ट मलाई पनि रेष्टुरेन्ट लगेकी थिई । यता ११ को फाइनल परीक्षा नजिँकिँदै थियो उता आफ्नो दिमाखमा स्कूटीको चाहना सवार भइरहेको थियो । आफूले भनेको माग पुरा नगरिदिएकोले घर परिवारलाई देखाउनकै लागि भएपनि मैले जसरी पनि स्कूटी किन्नै पर्ने भएको थियो । एक दिनको कुरा हो, मलाई कलेज छुट्टि भएपछि मोनिकाले बागबजार घुम्न जाउँ भनी । मैले पनि घर परिवारसँग कुरा मिलाएर उसँग घुम्न जानका लागि राजी भएँ । त्यस पछि हामी बागबजार पुग्यौँ ।
त्यहाँ दुई जना मानिसहरू थिए । हेर्दा अत्यन्त धनीमानी जस्ता देखिने ति मानिसहरूलाई देख्ने वित्तिकै मोनिकाले हात हल्लाई । तत्तकालै उनीहरूले हामीलाई आफ्नै कारमा राखेर ठमेलको एउटा होटलमा पुर्याए । होटलमा मलाई खानेकुरा अर्डर गरेर उनीहरू एकछिन् वेपत्ता भए । त्यहाँ उनीहरू करिव ३० मिनेट हराए । ३० मिनेट पछि मोनिका मात्र आई उनीहरू आएनन् । मोनिकाले मलाई यस्तो प्रस्ताव राखी त्यो सुन्दा म सुरूमा त छाँगोबाट खसेको जस्तै भएँ । पछि मलाई मोनिकाले सम्झाई र आफू पनि करिव तीन महिना अघि देखिनै त्यस्तो काममा लागिसकेको बताई । त्यो सुन्दा मलाई झन् विश्वास मान्न गाह्रो भयो । पछि उसले कसैले थाहा नपाउने र तिम्रो स्कूटी किन्ने चाहना पनि पुरा हुने बताएपछि म उसको कुरामा राजी भएँ । भोलि त्यही ठाउँमा भेट्ने भन्दै म उबाट छुट्टिएर आफ्नो घरमा आएँ । घरमा आउँदा पनि हलुका भएको थिएन । मथिङ्गलमा के–के कुरा आइ रहे । एक मनले सोच्थ्यो, धत् त्यस्तो काम पनि गर्छन्, अर्को मनले भन्थ्यो मोनिकालाई हेर ऊ अरू भन्दा कति भिन्न छे, उसको लवाई खवाई र भड्किलो खर्च गराईको कसले मात्र तारिफ गर्दैन ? अर्को मनले नै जित्यो । त्यसपछि मैले घरमा जागिर मिलेको र भोलिबाट काममा जानुपर्ने भनेर ढाँटे । परिवारले पनि कहाँ काम मिल्यो, काम कस्तो, खासै सोधिखोजि गरेनन् । त्यसपछि म झनै फुक्का भए । भोलिपल्ट हामी उनीहरूले भनेकै ठाउँमा पुग्यौँ । त्यहाँ हिजै भेटेका मानिसहरू थिए ।
यसरी ठमेलको एउटा होटलमा मैले स्कूटीकै चाहनामा पहिलो पटक शरीर परपुरूषलाई सुम्पिएँ । जवानी विसाएँ । कुमारित्व तोडेँ । उनीहरूले त्यस्तै २० हजार दिए । तर, मेरो हातमा १० हजार मात्र पर्यो आधा पैसा मोनिकाले नै लिई । अहिले सम्झँदा पनि निकै रुन लाग्छ । मन भक्कानिएर आउँछ । त्यो वाध्यता थियो या रहर मैले केही सोच्न सकेको छैन । त्यस दिन म राति अवेर घर पुगेको थिएँ, मन बेचैन बनाएर । परिवारले कामको पहिलो दिन भनेर खासै वास्ता गरेनन् । त्यसपछि मेरे दैनिकीमा एकाएक परिवर्तन आयो । घरमा ट्राभल अफिसमा काम गर्ने, ठमेलमा कार्यालय रहेको भनेर ढाँटेकी थिएँ । त्यसैले ठमेल तिर कसैले देख्दा मलाई आपत्ति हुँदैनथ्यो । बुबाको सरकारी जागिर, दाजु उपत्यका बाहिर र आमा घरमै व्यस्त हुने हुनाले ममाथि निगरानी राख्ने कोही थिएन । म विहानै कलेज जान्थे र हप्तामा एक दिन त्यस्तो ग्राहककोमा जान्थेँ । साथी मोनिका नै थिई । ग्राहक खोज्ने काम मोनिकाकै थियो । केही पुराना केही नयाँ तर एकदम पैसापाल थिए हाम्रा ग्राहक । कति त रातै विताऔँ भन्दथे तर पनि घरपरिवारले थाहा पाउने भयले म रातै चाँही विताउन्न थिएँ । मोनिका भने धेरै जसो ग्राहकसँग रातै विताउँथी । म हप्ताको सात देखि १० हजार सम्म कमाउने थालिसकेको थिएँ । त्यस्तैमा ११ को बोर्ड एक्जाम पनि दिएँ । परीक्षा राम्रो हुने कुरै भएन । त्यसको दुई महिना पछि स्कूटी पनि किनेँ । जीवनको महत्वपूर्ण चाह त पुरा भयो तर म अर्कै दलदलमा फसिसकेको थिएँ । कक्षा ११को परीक्षामा राम्रो नतिजा आएन, तर फेलै पनि भइनँ । काम गर्न थालेकोले बिग्रियो होला भनेर परिवारले पनि खासै चिन्ता लिएनन् । र, म नचाँहदा नँचाहदै त्यस्तो दलदलमा फस्न पुगेँ ।
हामी प्रायः उच्च घरानाका व्यक्तिहरूकै सम्पर्कमा हुन्थ्यौँ र प्रायः एउटै होटल जान्थ्यौँ । त्यसमध्ये हाम्रो अधिकांश नियमित ग्राहक थिए । त्यसैले हामीलाई कसैले शंका गर्दैनथे । हामीसँग यौनकर्म गर्न आउने ग्राहकहरू व्यापारिक घरानाका थिए । उनीहरूले हामीलाई मनग्ये पैसा दिन्थे । सुरूमा मोनिकाले नै चिनजान गराएकी भएपनि पछि उनीहरूले सिधै मसँग सम्पर्क गर्न थाले । उनीहरू प्राय नयाँ नयाँ युवतीसँग सम्पर्क राख्न चाहने हुनाले ति युवती खोज्ने जिम्माचाँही मोनिकाले नै लिएकी थिई । उसले हाम्रै कलेज पढ्ने अरू दुई युवतीलाई पनि उनीहरूसँग भेट गराएकी थिई ।
सुरूमा नचाँहदा नचाँहदै त्यस्तो काममा लागेता पनि अहिले घरपरिवार र समाजले थाहा पाउने चिन्ताले पेशाबाट बाहिर फर्कने मन छ, तर पनि त्यही अनुसारको खर्च गर्नेबानी परिसकेकाले त्यो पेशाबाट फर्किहाल्ने अवस्था बनेको छैन । अर्को तर्फ मनग्ये पैसा कमाइने र समाज परिवर्तनशील र यौनमा उदार बन्दै गएकाले यहि पेशा सहज हुन्छ जस्तो पनि लागेको छ । ग्राहकहरू आफ्नो यौनजीवन र स्वास्थ्यप्रति आफैँ सचेत हुनाले त्यस्तो सम्बन्ध सुरक्षितै पनि छ ।
समाज बढी उपभोक्ताबादीबन्दै गएकाले आवश्यकता पूर्तिका लागि युप्रै प्लस टू व्याचलर पढ्दै गरेका युवतीहरू पनि यस्तो कार्यमा लागेका हामीले पाएका छौँ । नयाँ नयाँ मोवाइल, स्कूटी र भड्किलो जीवनशैलीको चाहको कारण उनीहरूलाई घर परिवारले दिएको पैसाले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन । परिवारको खर्चले नपुगे पछि उनीहरू हाम्रै जस्तो पेशामा आइपुगेका छन् । उनीहरूको ग्राहक पनि हाम्रा जस्तै पैसावालाहरू छन् । धेरै जसो उपत्यका बाहिरका र कोठा भाडा लिएर बस्नेहरू छन् । केही होस्टलमा बसेर पढ्नेहरू पनि त्यस्तो कार्यमा लागेको मैले भेटेको छु । त्यस्ता थुप्रै युवती धुम्रपान मध्यपान गर्दछन् । तर म भने रक्सी, चुरोट केही खान्न । वाइन सम्म लिएकी छु । र मेरा ग्राहकहरू पनि त्यस्ता छैनन् ।
(समिक्षा केसी (नाम परिवर्तन)सँग कुराकानीमा आधारित)
प्रस्तुतिः रामनाथा खनाल, सम्बन्धित डाटा: स्रोत: नेपालपाटी
Post by: sag on April 10, 2015, 11:49:04 AM
यौन धन्दा गर्नेबिरुद्ध मुद्दा, सर्लाहीमा ५ जनाहत्या अभियुक्त पक्राउ
महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले अश्लिल गतिविधिमा संलग्न ३ महिला सहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक हर्क बहादुर रावलको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार गेष्ट हाउसमा छापा मार्दा दिउँसै अश्लिल गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा होटल मालिक सहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
वृत्तका प्रहरी नायव उपरिक्षक देवेन्द्र बहादुर पालले दिएको जानकारी अनुसार प्रहरीले उनीहरुलाई हिरासतमा लिई सार्वजनिक मुद्धा दायर गरिसकेको छ ।
Post by: tundikhel on April 13, 2015, 08:44:04 AM
२१ चैत्र, २०७१
वेश्याप्रति निरपेक्ष घृणा र पण्डितप्रति निरपेक्ष प्रशंसा विवेकहीन मानिसहरूको प्रवृत्ति हो। परम्परा, गौरव र मृत राष्ट्रियताको थोत्रो चस्मा नफुकाली हेर्दा देखिने दृश्य यस्तै हो। यथार्थमा न वेश्या सर्वथा घृणायोग्य हुन्छन्, न पण्डित सर्वथा प्रशंसनीय।
इमानको यति चर्को खडेरीमा विवेकको तुलोमा जोखी हेर्दा मलाई वेश्या नै बढी सम्मानयोग्य लाग्छन्। खासमा तिनले सिस्टमकै नाकमा प्रहार गरिरहेका हुन्छन्। बिपी कोइरालाको 'आफ्नै कथा'मा उनकै आफन्त पर्ने युवती एक कदम अगाडि बढेर भन्छिन्, 'महिलाले आत्मसम्मान गुमाउनु नपर्ने र आत्मनिर्भर हुन सक्ने एउटै मात्र काम वेश्यावृत्ति हो।' जीवनको कहालीलाग्दो यात्रामा सहस्र हन्डर नखाई रहरले कुनै पनि युवती वेश्या हुँदैनन्। वेश्याहरूमाथि सम्मानजनक सम्बोधन गरिएका थुप्रै कृति संसारको साहित्यमा क्लासिक्स भएका छन्।
चिनियाँ निर्देशक झाङ यिमुले चाहिँ यान गेलिङको उपन्यासमा आधारित भएर वेश्याहरूको महानतामाथि चिनियाँ इतिहासमै सबैभन्दा महँगो चलचित्र बनाएका छन्। उनको चलचित्र 'द फ्लावर्स अफ वार' युद्धको विभीषिकाबीच प्रेम र बलिदानको यस्तो कथा हो जसले ठग स्वभावको जँड्याहालाई सन्त र वेश्याहरूलाई प्रेमको महान् प्रतिमूर्ति बनाइदिन्छ। यस्तै मानवीय रूपान्तरणको कथा यसअघि स्टीभेन स्पाइलबर्गको 'सिन्डलर्स लिस्ट', रोमन पोलान्स्कीको 'द पियानिस्ट' लगायत चलचित्रले भनिसकेका छन्। परन्तु, 'फ्लावर्स अफ द वार' धेरै अर्थमा अनुपम छ।
यो एउटी स्कुले किशोरी शुको स्मृति कथा हो। सन् १९३७ मा जापानले चीनको जियाङ्सु प्रान्तको राजधानी नानकिङमा आक्रमण गर्दा तीन लाख चिनियाँले ज्यान गुमाए। लगातार २० दिनको बमबारीपछि डिसेम्बर १३ मा जापानी सेनाले नानकिङ कब्जा गर्यो।। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका तर्फबाट केही सेनासहित मेजर लीमात्र बाँकी थिए। सैनिक भेष छाडेर उनी नानकिङबाट भाग्न सक्थे। तर, विपत्मा परेका चिनियाँ दुःखी महिलाको आबरु रक्षाका लागि अन्तिम साससम्म लडिरहे। केही नलागेपछि जापानी ट्यांकर ध्वस्त पार्न छातीमा विस्फोटक बाँधेर आफैंलाई मानवीय ढालका रूपमा बलिदान गरे। यो त चलचित्रको पृष्ठकथामात्र हो। मुख्य कथा त क्वीन हाई नदी क्षेत्रका १२ जना सुन्दरी वेश्या र एक किशोरको। तिनले १२ जना स्कुले किशोरीलाई जापानी सेनाको बलात्कार र हत्याबाट बचाउन आफैंलाई बलिदान गरेका थिए।
कन्भेन्टमा पढ्ने किशोरीसँगै किशोर जर्ज, अमेरिकी मोर्टिसियन (मृतक सिँगार्ने) जोन मिलर र १२ जना वेश्याले युरोपेली चर्च विन्चेस्टर क्याथेड्रलमा शरण लिएका हुन्छन्। किशोरीहरू वेश्याहरूलाई अघोरै घृणा गर्छन्। तिनलाई चर्पीसमेत प्रयोग गर्न दिँदैनन्। वेश्याहरूकी अगुवा सुन्दरी यु मो भने सधैं तिनको र आफ्नै साथीहरूको सुरक्षित मुक्तिका लागि चिन्तित रहन्छे। मोको पूर्वकथा आफैंमा कहालीलाग्दो थियो। छ वर्षसम्म कन्भेन्टमा पढेर ऊ अंग्रेजी जान्ने भएकी थिई। सुन्दर आँखा भएको कुनै युवकसित उसको हृदयको तार जोडिएको थियो। तर, तेह्र वर्षको उमेरमा ऊ सौतेलो बाबुबाट बलात्कृत भई। सबै सिद्धियो, त्यसपछि बाध्य भएर वेश्या भई।
प्रौढ जोन एकै नजरमा युको प्रेममा फस्छ। प्रेमकै प्रेरणाले उसले जापानी सेनाको बलात्कारबाट किशोरीहरूलाई बचाउन ज्यान जोखिम मोलेर प्रयास गर्योे। तैपनि गोली लागेर एउटी र बलात्कारबाट बच्न खोज्दा तीन तलामाथिबाट खसेर अर्की किशोरीको मृत्यु भयो। अर्कीलाई चाहिँ जापानी सेनाको बलात्कारबाट मेजर लीले बचायो। यसअघि नै जापानी सेनाले छाप्रामा लुकेर बसेका तीन किशोरीमध्ये एउटी झेनलाई तरबारले घोपेर मारिसकेका थिए। त्यस्तो स्थितिमा पनि साथीहरूलाई बचाउन उसले चुँक्कै आवाज निकालिन।
झाङ यिमु कथाको भावलाई व्यक्त गर्न विशिष्ट रङ प्रयोग गर्ने निर्देशकका रूपमा संसारमै प्रख्यात छन्। यु मोप्रति जोनभित्र अंकुराएको प्रेम व्यक्त गर्न उनले हरियो घेराको गाढा रातो रङ प्रयोग गरेका छन्। अक्सर उनी आफ्ना चलचित्रमा चिनियाँ जनक्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिलाई ध्वस्त पार्ने गरी उडाउन माहिर छन्। उनका माओकालीन अधिकांश पात्रहरू सोझा, इमानदार तर मूर्ख र जड हुन्छन्। तर, सन् २०१२ को गोल्डेन ग्लोबमा मनोनीत तथा गेलिङ यानको उपन्यास 'थर्टिन फ्लावर्स अफ नानजिङ'मा आधारित यस चलचित्रमा उनले तिनै जनसेना र चिनियाँ जनताको संघर्षको अनुपम गौरवगाथा गाएका छन्।
कहिलेकाहीँ मान्छेका ससाना चोखा भावनाको मूल्य जीवनभन्दा माथि हुन्छ। मेजर लीले पु शेङ नामको घाइते सेनालाई हेरचाहका लागि महिलाहरूकहाँ छाडेर गएको हुन्छ। पु टुहुरो थियो। ऊसँग केही थिएन। त्यसैले जनमुक्ति सेनाले उसलाई आफ्नो दस्तामा सामेल गर्योह। घाइते भएर मर्लन्त हुँदा ऊ भर्खरको किशोरमात्र थियो। डाउ नामकी वेश्याले उसलाई विशेष हेरचाह गरी। आफ्नै भाइको जस्तो अनुहार भएको त्यस केटोलाई ऊ प्रेम गर्छे र चारतारे बजाएर सुनाउँछे।
'तिमीलाई मनपर्यो ?'
'मनपर्यो । धन्यवाद।'
'धन्यवाद नभन। बरु मसँग बिहे गर। म पनि तिमीसँग खेतमा मिहिनेत गरेर काम गर्छु।'
'हाम्रो खेतै छैन।'
'त्यसो भए म पिपा बजाउँछु, तिमी कचौरा बोकेर हिँड। त्यसले हामी तिम्री आमालाई राम्ररी पालौंला।'
'मेरी आमा छैनन्। मेरा कोही पनि छैनन्। जापानीले सबै जनालाई मारिदिए।'
त्यो किशोर मर्योन। मान्छे आखिर प्रेमको सहाराले मात्र बाँच्न सक्छ। पु जिउँदो हुँदा डाउले चारतारे राम्ररी बजाएर सुनाउन पाइन। त्यसका तीन तार चुँडिएका थिए। त्यस्तो तार कोठीमै थियो। गाड्नुअघि भए पनि मृत पुलाई ऊ एकपल्ट सुनाउन चाहन्छे। उता ल्यानको प्रेमीले दिएको इयरिङ कोठीमै छुटेको थियो। जापानी प्रहरीका आँखा छल्दै तिनीहरू कोठी पुगे। अन्ततः ल्यान गोली लागेर मरी। डाउमाथि सेनाले पालैपालो बलात्कार गरे। एउटाचाहिँको कान टोकेर रक्ताम्मे पारिदिई। रिसले चुर भएर त्यसले बन्दुकको कुन्दैकुन्दाले घोपेर मारिदियो। पुको आत्मालाई भए पनि चारतारे बजाएर सुनाउने चोखो भावनासँगै यसरी उसको हत्या भयो।
जापानी सेनाको कर्नेल हासिगावाले चर्चमा आक्रमणका लागि 'पुजारी' जोनसँग माफी माग्यो र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दियो। किशोरी छात्राको गीत सुनेर ऊ 'प्रभावित' भयो। नानकिङ विजय घोषणामा उसले तिनलाई गीत गाउन निम्तो दियो। यो त बहानामात्र थियो। सेनाका हाकिमहरू शत्रुपक्षका किशोरीको कुमारित्व भंग गरेर विजयोत्सव मनाउन चाहन्थे। नियत थाहा पाएर जोनले यसको विरोध गर्योश। तर, केही लागेन। शत्रु सेनाकहाँ समर्पण गर्न जानुभन्दा मर्नु ठिक ठानेर किशोरीहरूले चर्चको छतबाट फाल हाल्ने योजना बनाए।
यहीँनिर कथाले अत्यन्त मार्मिक मोड लिन्छ। अब नगरबधूहरूको महान् आत्माले आत्मबलिदान गर्नुपर्ने बेला आयो। जर्जले जोन र युवतीहरूसँग गुहार माग्यो। मोले आफ्ना साथीहरूलाई मनाई। किशोरीका ठाउँमा वेश्या युवतीहरू जान तयार भए। यसरी किशोरीहरूको ज्यान र अस्मिता जोगियो। यहीँनिर किशोरी र वेश्याहरूबीच अत्यन्त मार्मिक कुराकानी हुन्छ। किशोरीहरू माफी माग्छन्।
'मेरी सानी चरी, मेरो जिन्दगी त नर्कै भयो। मेरा लागि भए पनि तिमीले असल जिन्दगी जिउनू है!'
'मेरो मायालुले दिएको यो बाला तिमी सुरक्षित राखिदेऊ है! भेट भए लिउँला, नभए तिमीले नै राख्नू।'
'मेरो त आफ्नो भन्नु त्यही बिरालोबाहेक कोही छैन। त्यसलाई हेरिदेऊ है!'
युवतीहरूले तिनको मन बहलाउन स्वर्गीय डाउको सम्झनामा क्वीन हाई नदी क्षेत्रको गौरवशाली गीत गाए। यहीँनिर कन्भेन्टको किशोर पियन जर्जले अर्को बलिदान गर्ने आत्मघोष गर्योत। किशोरीहरूले गीत गाउँदा लामखुट्टे उपनामधारी वेश्या पनि भूलवश देखा परी। शु नामकी किशोरीले उसलाई पनि विद्यार्थीकै रूपमा चिनाएर वेश्याहरूलाई बचाएकी थिई। यही शुले जापानी सेनासँग समर्पण गरेको ठानेर आफ्नै बाबुलाई दुत्कारेकी थिई र साथीहरूलाई छाडेर एक्लै मुक्त हुन अस्वीकारेकी थिई। त्यसपछि जापानी सेनाले गन्दा १३ जना विद्यार्थी थिए जो सबै विजय उत्सवमा जान बाध्य थिए। एउटी छात्रा त जानैपर्ने भयो। जर्ज तिनकै उमेरको थियो। भेष धर्दा महिला देखिन सक्थ्यो। त्यसमा मोर्टिसियन जोनको भूमिका जरुरी थियो।
विचरा टुहुरो जर्ज छ वर्षको हुँदा भोकमरीले झन्नै मरेको थियो। फादर इंगलम्यानले उसलाई चर्चमा ल्याएर बचाए। उसलाई विद्यार्थीको सुरक्षा र हेरचाह गर्न अह्राएका थिए। आक्रमणमा फादर मारिए। जर्जले फादर जिउँदो रहुन्जेल उनको गुन तिर्न पाएन। जोनले सबै महिला र जर्जलाई किशोरी विद्यार्थीका रूपमा सिँगारिदियो। महिला र जर्ज विद्यार्थीको जीवन जोगाउन जापानी सेनाको बलिबेदीमा होमिन बिदा भए। जाँदा आत्मरक्षाका लागि तिनले आफ्नो छातीमा काँचको छुरी लुकाएका थिए। जोनले जर्जलाई भनेको थियो, 'तिमीलाई धेरै खतरा छ। गाडी चढिसकेपछि कसैगरी भाग्नू।'
'म भाग्दिनँ। त्यसो गर्दा फेरि तेह्रै जना विद्यार्थी पक्राउ पर्छन्। म कसरी फादर इंगलम्यानको गुनको बदला धोका दिन सक्छु? म त्यहीँसम्म पुग्छु। त्यतिन्जेल पक्कै तपाईंले यी छात्रालाई नानकिङ पार गराइसक्नुहुनेछ।'
अनेक चलाखी गरेर जोनले विद्यार्थीलाई नानकिङ कटाएर मुक्त पार्योे। नयाँ पुस्ताको मुक्तिका लागि आफूलाई बलिदान गर्ने ती बाह्र महान् वेश्या र किशोर जर्जलाई के भयो होला? चलचित्र सकिए पनि दर्शकलाई यस प्रश्नले बेस्सरी चिमोटिरहन्छ। कथा वाचक शुले पछि तिनलाई कहिल्यै भेट्न पाइन। हुन सक्छ— ती बलात्कृत भए र आत्मरक्षा गर्दागर्दै मारिए। अनि जर्ज? उसलाई त अझै यातना दिएर मारियो होला।
सुन्दर कथा, पुष्ट पटकथा र जीवन्त अभिनय राम्रा चलचित्रका प्रथम सर्त हुन्। खासगरी वेश्याहरूकी नायिका यु मोको भूमिकामा नि नी, नक्कली पादरीको भूमिकामा कृस्चियन बेल, डाउको भूमिकामा ली यु मिन, शुको भूमिकामा झाङ जिन्यी, ल्यानको भूमिकामा बाई जुई, जर्जको भूमिकामा हुआन तियानयुआनको अभिनयकलाले भुतुक्कै पार्छ। ४० प्रतिशत अंग्रेजी र ६० प्रतिशत नानजिङको आञ्चलिक भाषामा छायांकित यस चलचित्रको फोटोग्राफी र मूलतः अव्यावसायिक कलाकारहरूको अभिनयको प्रशंसा हृदयबाटै उम्लेर आउँछ। चर्चाले संसार हल्लाएका थुप्रै चलचित्रमा दुई घण्टा बाँधिन मलाई हम्मे पर्छ। गोल्डेन ग्लोब पुरस्कारका लागि मनोनीत 'फ्लावर्स अफ द वार'ले भने मलाई सासै रोकेर बाँधिराख्यो। यस्तो तिख्खर, हृदयस्पर्शी र साहित्य स्तरको रुचिकर चलचित्र हेर्ने अवसर विरलै पाइन्छ।
Post by: tundikhel on May 07, 2015, 02:12:35 AM
पोखरामा युवतीहरुलाई जबरजस्ती यौनधन्दामा लगाउने पक्राउ
प्रकाशित मिति: 4:42:05 pm, May 06, 2015
पोखरा, वैशाख २३– पोखराको नागढुंगामा युवतीहरुलाई जवरस्ती यौनधन्दामा लगाउने एक महिलालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मानव वेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दामा फरार रहेकी पोखरा २७ की ४२ वर्षीय कमला शेरचनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
युवतीहरुलाई ललाई फकाई यौनधन्दामा लगाउने र नमान्नेलाई जबरजस्ती डरत्रास देखाएर यौन धन्दा गर्न बाध्य पार्ने गरेको आरोपमा शेरचन पक्राउ परेकी हुन् । शेरचनले पोखरा वडा नम्बर ९ नागढुंगामा निरभाना रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेकी थिइन् ।
रेष्टुरेण्टमा कार्यरत चार जना युवतीलाई रेष्टुरेण्टमा साधारण काम तथा घर सफाइको लागि भन्दै रोजगारी दिए पनि ती युवतीहरुलाई उनले जबरजस्ती यौनधन्दामा लगाउने गरेको उजुरी परेको थियो । पीडित युवतीहरुले रेष्टुरेण्ट संचालिका शेरचन विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा छुट्टाछुट्टै जाहेरी दिएका थिए ।
प्रहरीले पीडित युवतीसँग घटनाका बारेमा कास्की जिल्ला अदालतबाट बयान प्रमाणित गरिसकेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी हरि पालले जानकारी दिए । फरार रहेकी शेरचनलाई पक्राउ लगत्तै मंगलबारै जिल्ला अदालत कास्कीबाट मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
Post by: tundikhel on May 29, 2015, 02:03:29 AM
पतिलाई पार्लर जान्छु भन्दै यौनधन्दामा
दैनिक नेपाल२०७२ जेठ १४ गते
बुटवल, १४ जेठ । देवदह खैरेनीकी २४ वर्षीया पूजा (नाम परिर्वतन) सापकोटा आफ्ना श्रीमान्लाई पार्लरमा जागिर खान्छु भन्दै बिहान नौ बजे घरबाट हिँड्छिन् । बेलुकी पुनः घर फर्किन्छन् ।
मतीको राम्रै कमाई भएकाले होला उनका श्रीमान्ले उनलाई कहिल्यै चिओ गरेनन् । गरे त केवल विश्वास, आशा अनि भरोसा । त्यो पनि निरन्तर एक वर्षसम्म ।आजको सौर्य दैनिकले छापेको छ ।
तर, उनकी श्रीमती पूजा उनले आशा, विश्वास र भरोसा गरे अनुसार चलिनन्, व्युटीपार्लरमा जागिर पनि खाइनन् । खाइन् त जागिर एक होटलमा ग्राहक रिझाउने । ग्राहकलाई सन्तुष्टि पार्ने, अझ भनौ उनी यौनकर्मीको रूपमा काम गरिन् ।
आफ्नो माइत सालझन्डी बताउने पूजा बुधबार प्रहरीले होटलमा छापा मार्दा उनी भेटिइन् । तब पूजाको वास्तविकता थाहा भयो । पूजा यतिबेला इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको चिसो कोठामा छिन् ।
उनी मात्र होइन, किताब र कापी च्यापेर स्कुल जाने उमेरकी १६ वर्षीया सन्तोषी र १६ वर्षकै रमिता परियार पनि यौनकर्मीका रूपमा काम गरेको फेला परेपछि सोधपुछका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयमा लगिएको छ ।
यी दुवै युवतीले आफ्नो ठेगाना प्रहरीसमक्ष बुटवलको बुद्धनगरमा बताएका छन् ।
वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक केदारनाथ पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले धौलागिरी होटलमा छापा मार्दा एक जोडी कोठाबाट र अन्य युवती तथा होटल सञ्चालकसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
धौलागिरी होटलको नामबाट यौनधन्दा गरेपछि सो होटललाई होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघले यस्तै अनैतिक कार्य गरेको भन्दै साधारण सदस्य नरहनेगरी निष्काशन गरेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघले जनाएको छ । पटकपटक यस्तो क्रियाकलाप गर्ने गरेको भन्दै संघले सदस्य नै नरहने गरी हटाएको हो ।
प्रहरीले यौन क्रिडास्थलमा छापा मारी दुई सय ७९ वटा कन्डम फेला पारेको छ । ग्राहकहरू त्यहाँ जाँदा होटलले सु्विधा भन्दै निःशुल्क कन्डम दिने गरेको भेटिएको हो ।
पसल सञ्चालक इमबहादुर विक र उनकी श्रीमती कमला विकलाई प्रहरीले बारम्बार पक्राउ गर्दै यस्तो कार्य नगर्ने भन्दै छाड्दै आएको थियो । अहिले पनि होटल सञ्चालक दुवै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
उनीहरूकी एक छोरी छन् । उनकी छोरी पनि सोही होटलमा नै बस्दै आएको भए पनि उनी भने यौनकर्मीको रूपमा काम नगरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
होटलका भित्र दुई वटा कोठाका कुनाबाट प्रहरीले यौनसम्पर्क गरेपछि फालिएका कन्डमहरू पनि बरामद गरेको छ ।
Post by: xsajha on June 10, 2015, 12:15:25 PM
नेपालका यौनकर्मी महिला यस्ता छन् हेर्नुस
यौनव्यवसायमा प्रवेश गर्ने नयाँ युवतीको संख्या प्रतिवर्ष थपिँदै गईरहेको अध्ययनले देखाएको छ । तराईका ३२ जिल्लाका ९ सय यौनव्यवसायी महिलामा गरेको अनुसन्धानले ४२ प्रतिशत व्यवसायीले यो पेसा अँगालेको एक वर्ष पनि नभएको देखाएको हो । अनुसन्धान राजमार्गवरिपरि यौनव्यवसायमा संलग्न र तराई भेगका यौनकर्मी महिलामा गरिएको थियो । यौनव्यवसायमा संलग्नमध्ये ३८ प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको सो अध्ययनले दाबी गरेको छ । ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै यौनव्यवसायीले पहिलोपटक यौनसम्पर्क गर्दा १५ वर्षभन्दा पनि कम उमेर रहेको बताए । त्यस्तै, ७६ प्रतिशत यौनकर्मीका परिवार रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘परिवारका सदस्य यौनव्यवसायी महिलाको आम्दानीमा निर्भर छन् अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, ५७ प्रतिशतभन्दा बढी यौनव्यवसायीको परिवारमा दुईदेखि तीनजना सदस्य छन् । यौनव्यवसायमा संलग्न महिलाको शैक्षिकस्तर निकै कम भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूमध्ये करिब ५२ प्रतिशत निरक्षर छन् । निरक्षर यौनव्यवसायी महिलाले शिक्षाका लागि जीवनमा एकपटक पनि विद्यालय नटेकेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ६ प्रतिशतले मात्र एसएलसी र त्योभन्दा बढी अध्ययन गरेका छन् । करिब ५७ प्रतिशत यौनकर्मी विवाहित छन् । १७ प्रतिशत यौनकर्मी महिला कि त डिभोर्स गरेका छन् या त लोग्ने छाडेर बसेका छन्
१२ प्रतिशतभन्दा बढी विधवा पनि यौनव्यवसायमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । करिब ५९ प्रतिशत यौनकर्मीको परिवारमा आश्रति पनि छन् । करिब ६८ प्रतिशत विवाहित छन् । ३४ प्रतिशत विवाह नगरेका यौनव्यवसायमा छन् । विवाहितमध्ये पनि करिब २९ प्रतिशतले उनीहरूको श्रीमान्को अर्की पनि श्रीमती भएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी यौनकर्मी महिलामध्ये ८० प्रतिशतसँग सर्वेक्षणकर्ताले प्रत्यक्ष भेटेका थिए । अन्यसँग यौनकर्मी महिला, विभिन्न संगठनका प्रतिनिधि र रेडक्रसका प्रतिनिधिमार्फत भेट गरिएको थियो । त्यस्तै, अनुसन्धानमा सहभागी ६ सयमध्ये दुई दशमलव तीन प्रतिशतमा एचआइभी एड्सको पनि संक्रमण पाइएको छ । करिब ६८ प्रतिशत यौनकर्मी महिलाका ग्राहक यातायात मजदुर छन् ।करिब ७० प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले यौनकार्यमा सरिक हुँदा कन्डम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ५८ प्रतिशतभन्दा बढी यौनकर्मीले कन्डम निःशुल्क पाउने गरेका छन् ।
उनीहरूले कन्डम पाउने स्रोत एनजिओ तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी छन् । उनीहरूले प्रायः स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँड्ने ढाल र नम्बर वान कन्डम प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६७ प्रतिशतभन्दा बढीले उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालित क्षेत्रबाट पाँच मिनेटमै कन्डम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगबारे सोधिएको प्रश्नमा अधिकांशले कन्डम र सुईमार्फत प्रयोग गरिने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनबारे बताएका थिए । त्यस्तै, ५० प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले लगाउने कन्डमको बारेमा सुनेका छन् । विवाहित यौनकर्मी महिलामध्ये करिब ८१ प्रतिशतले गर्भधारणबाट जोगिन परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अधिकांश यौनकर्मी महिलाले एचआइभी/एड्स रोगबारे सुनेको बताए । ९२ प्रतिशतले रेडियोबाट एचआइभी/एड्सबारे जानकारी पाएको बताएका थिए ।
त्यस्तै, सर्वेक्षणकै क्रममा पनि करिब तीन प्रतिशत यौनकर्मी महिलाले आफूलाई विभिन्न यौनसमस्या रहेको बताएका थिए । ३१ प्र्रतिशतले नौदेखि १४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक यौनसम्पर्क गरेको बताएका थिए । १५ देखि १९ वर्षभित्र पहिलो यौनसम्पर्क गर्ने ६२ प्रतिशत रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, झन्डै ३२ प्रतिशत यौनव्यवसायीको विवाह ६ देखि १४ वर्ष उमेरमा भएको छ । १५ देखि १९ वर्षमा विवाह गरेका यौनव्यवसायी करिब ६० प्रतिशत छन् ।
Post by: tundikhel on June 26, 2015, 05:31:45 AM
यौन कार्यमा मस्त ८ जाडीसहित २४ पक्राउ
प्रकाशित मिति: 10:36:53 pm, June 25, 2015
झापा, असार १०–झापाको बिर्तामोडबाट प्रहरीले आज अपराह्न आपत्तिजनक अवस्थामा १६ सहित २४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बिर्तामोडमा सञ्चालित विभिन्न होटलबाट होटल सञ्चालकसहित आठ जोडीलाई योन कार्यमा लिप्त रहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले जानकारी दिए ।
झापामा सञ्चालित होटलमा पछिल्लो समय यौनजन्य गतिविधि बढेको जनगुनासो बढेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको संयुक्त टोलीले बिर्तामोडमा सञ्चालित २५ भन्दा बढी होटलमा एकैपटक छापा मारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ रेग्मीले जानकारी दिए । प्रहरीले छापा मारेका सबैजसो होटलमा यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएकाले होटल सञ्चालकसहित १३ जना महिला र ११ जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कसैको पनि नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । रासस
From - Ratopati
Post by: sag on September 11, 2015, 07:31:39 AM
चार दोबाटोमा खुलेआम यौनधन्दा चलाउने गुप्ता जोडीसहित पक्राउ
२०७२ भदौ २५ गते
बनेपा, २५ भदौ । काभ्रे जिल्लाको बनेपास्थित चार दोबाटोमा रहेको काभ्रे स्वीट एन्ड मिठाइ भण्डारमा प्रहरीले छापा मारी यौनधन्दा चलाएको आरोपमा पसल सञ्चालक विनोद गुप्तासहित एक जोडीलाई पक्राउ गरेको छ ।
मिठाइ पसलमा यौनधन्दा गरेको आरोपमा उनीहरुलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । अभियुक्तलाई सार्वजनिक अपराधअनुसार मुद्दा चलाइएको छ ।
गुप्ताले आफ्नो होटेलमा यौनधन्दा चलाउने गरेको उजुरी छिमेकीहरूले गरेपछि प्रहरीले छापामारेको थियो ।
Post by: uxwall on July 02, 2018, 08:13:17 AM
Post by: coolboy on July 02, 2018, 03:07:23 PM